The Bournemouth Protocol on Mass Grave Protection and Investigation - MY_Burmese translation by Bournemouth University - Issuu
The Bournemouth Protocol on Mass Grave Protection and Investigation - MY_Burmese translation
နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအတွက် Bournemouth လုပ်နည်းကျင့်ဝတ်
© 2020 မယ်လနီ ခလင့်ခ်နာ (Melanie Klinkner) နှင့် အယ်လီ စမစ် (Ellie Smith) ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများအားလုံးအား ထိန်းသိမ်းရရှိထားသည်။ ISBN: 9781858993218 မျက်နှာဖုံးပုံ © 2
ပျောက်ဆုံးနေသူများဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်း (International Comission on Missing Persons) ၏ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့် အရှင်ဘုရင်မ နူအာရ် (Queen Noor) ထံမှ ပျောက်ဆုံးနေသူများဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်း (ICMP) ၌ 2001 ခုနှစ် ကတည်းကစတင်ပြီး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်နှင့်အညီ ပျောက်ဆုံးနေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ဥပဒေစည်းမျဉ်းများနှင့်တစ် ညီတည်းဖြစ်သော နိုင်ငံ၏ တာဝန်ခံယူမှုအပိုင်းတွင် သမိုင်းဝင် အပြောင်းအလဲအား မျက်မြင်ကြုံတွေ့ ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ 1990 ပြည့်နှစ်များကာလတွင် ပြည်တွင်း နှင့် နိုင်ငံတကာ တရားမျှတရေး အဖွဲ့အစည်းများ
ကြိုးစားအားထုတ်မှုများအတွက်လည်း ပံ့ပိုးမှုရှိရမည်ဆိုသော အချက်အပေါ်တွင် ခိုင်မာစွာ
သည် ယခင် Yugoslavia မှ အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ထောင်နှင့်ချီသော
အခြေပြုထားခြင်း ဖြစ်သည်။ နှံ့စပ်ထိရောက်မှုရှိသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများမှတစ်ဆင့်
အမှုတွဲများကို စတင် စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ ဤအခြင်းအရာသည် ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူ
နိုင်ငံတော်အနေနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများအတွက် အာမခံချက်တစ်ရပ်အား ပေးအပ်သွားနိုင်ရန်
များ၏ အခွင့်အရေးများအား ကာကွယ်ရန်၊ ထို့အတူ ပျောက်ဆုံးနေသူများအတွက် ထိရောက်
ဖြစ်သည်။ ရာဇဝတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိ
မှုရှိ၍ တရားမျှတသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ထိန်းသိမ်းရန် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ေ
ပက္ခ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုနှင့် အလွဲသုံးစားအနိုင်ကျင့်မှုများ နှင့် အခြားသော ရာဇဝ
ဆာင်နိုင်စွမ်းနှင့် စိတ်အားထက်သန်မှုတို့အပေါ် လူထု၏ ယုံကြည်ကိုးစားမှုအား ပျိုးထောင်ေ
တ်ပြစ်မှုများတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုများကို ခြေရာခံရှာဖွေ၊ ပြန်ဖော်စစ်ေ
ပးရန် အစရှိသည်တို့အတွက် ဥပဒေစည်းမျဉ်းအပေါ်အခြေခံသည့် နည်းဗျူဟာရပ်များအတွက်
ဆးရန် ဦးဆောင်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုများ၏ သက်သေအထောက်
အခြေခံအုတ်မြစ်အား ချအပ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ပျောက်ဆုံးမှုများအား ခြေရာခံရန် နှင့်
အထားများ ခိုင်လုံမှုရှိစေခြင်းအပေါ် အဓိကအာရုံပြု လုပ်ဆောင်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ထိရောက်မှု
အစရှိသည်တို့အတွက် ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည် သိပ္ပံနည်းကျ နည်းလမ်းများစွာကို တစ်
ရှိသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးအနေနှင့်ငှာ တရားရုံး
သမတ်တည်း အသုံးပြုဆောင်ရွက်သွားသည်။ ထို့ပြင် ပဋိပက္ခတိုက်ပွဲ၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖော
များမှ လွှဲပြောင်းချအပ်ပေးထားသော စီမံချက်ကြီးတစ်ရပ်၏ အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်သည်။ အုပ်
က်မှုများ၊ သဘာဝကပ်ဘေးများ၊ ကြိုတင်စီမံထားသည့် ရာဇ၀တ်ပြစ်မှု သို့မဟုတ် ရွှေ့ပြော
စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံခြင်းဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေး နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအတွက် Bournemouth လုပ်
င်းနေထိုင်မှု အစရှိသည့်တို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပမာဏ ကြီးမားသော
နည်းကျင့်ဝတ် သည် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပြတ်သား
ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အမှုတွဲများအား သင့်တင့်စွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းသည် လူမှုဆက်ဆံရေး
မှုရှိစေရန် အရေးကြီးသော ခြေလှမ်းအဆင့်တစ်ဆင့် ဖြစ်ပေသည်။ ၎င်းသည် အဖွဲ့အစည်းများ
ပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပြီး၊ ပဋိပက္ခအခြေအနေမှ
အကြား ကျယ်ပြန့်စွာ ပိုမို ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေမည် ဖြစ်သည်။ ကြောက်ဖက်ဖွ
ပြန်လည်နလန်ထူထောင်မှု နှင့် ကာကွယ်မှုတစ်ရပ်လည်းဖြစ်ကာ ရေရှည်တည်တံ့မှုရှိသော
ယ် အကြမ်းဖက်မှုများ နှင့် လူသား ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အုပ်စုလိုက် မြေမျြုပ်နှံမှု
ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် လူသားများ၏ လုံခြုံရေးအတွက်လည်းဖြစ်ကြောင်း သိသာစွာတွေ့
နေရာများအား ကြားဝင်အနှောက်အယှက်များ မရှိစေရန် ကာကွယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊
မြင်ရလာပြီ ဖြစ်သည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူမှာ မည်သူပင်ဖြစ်ပါစေ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ နှင့် အလွဲသုံးစား အနိုင်ကျင့်မှုများတို့နှင့်စပ်လျဉ်ြး့ပီး ထိရောက်မှုရှိသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအား ဆောင်ရွက်သွားရန်မှာ နိုင်ငံတော်၏ တာဝန်ဝတ္တရား ဖြစ်သည်။ ပျောက်ဆုံးမှုအခြေအနေအပါအဝင် ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အမှုတွဲများအား ထိရောက်စွာ စုံစမ်းစ စ်ဆေးရန် ပျက်ကွက်မှုသည် ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် ၎င်းမိသားစုများတို့၏ အခြေခံ လူ့အခွ င့်အရေးများအား ချိုးဖောက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအပေါ် အန္တရာယ်ရှိသော ပယ်ဖျက်ပိတ်ဆို့မှုတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပေသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် ထိရောက်မှုရှိသော စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုများသည် အတိတ်ကာလမှ ရာဇဝတ်ပြစ်မှုအကျိုးဆက်များအား ဖြေရှင်းစီမံရန်အတွ က် စစ်မှန်၍ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကတိကဝတ်ပြုမှုကို ကိုယ်စားပြုခြင်း ဖြစ်သည်။ 2008 တွင် Bournemouth တက္ကသိုလ်မှ ပညာတော်သင်များ၏ ညွှန်ကြားမှုအားဖြင့် ပြင်ဆင်ထားသော ထုတ်ဝေမှုတစ်ရပ်သည် အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး သိပ္ပံနည်းကျ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှ သင်ယူတွေ့ ရှိရသော အတွေ့အကြုံများ နှင့်
၎င်းနေရာများအား ဥပဒေနှင့်အညီ လေးစားသမှုထားရှိသော စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များဖြင့် စုံစ မ်းစစ်ဆေးသွားရပေမည်။ ဤသည်မှာ နစ်နာခံစားရသူများ၏ မိသားစုများနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစ ည်း တစ်ရပ်လုံးအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ ကြွေးကျန်တင်ရှိသော တာဝန်ဝတ္တရားတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်သည်။ ဤတွင်တင်ပြထားသော လုပ်နည်းကျင့်ဝတ်သည် အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံခြင်းဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေး နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော ဥပဒေရေးရာအပိုင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နှင့် သိပ္ပံနည်းကျ စည်းမျဉ်းများအပိုင်းမှစ၍ ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်း ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံ နှင့် မိသားစုများ၏ ပံ့ပိုးထောက်ပံ့မှုအပိုင်း အစရှိသည်တို့မှ အဓိကပုဂ္ဂိုလ် တော်တော်များများထံမှ အကြံဥာဏ်ရယူထားခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်ပိုင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများ နှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များထားရှိကြသော ၎င်းတို့တစ်ဦးစီအပေါ် ကြီးစွာ ကြွေးတင်၊ ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။ ICMP ကိုယ်စား အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံခြင်းဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေး
နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအတွက် Bournemouth လုပ်နည်းကျင့်ဝတ် အား မိတ်ဆက်တင်ပြခွင့်ရရှိသည့်အတွက် လွန်စွာပင် ၀မ်းမြောက်မိပါသည်။
သင်ခန်းစာများတို့ကို ပထမဆုံးအကြိမ် စုပေါင်းတင်ဆက်ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီဖြစ်သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဖော်မြူလာထုတ်ဖော်ရေးဆွဲရန်အတွက် စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။
အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံခြင်းဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေး နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအတွက် ဤ Bournemouth လုပ်နည်းကျင့်ဝတ် အသစ်သည် ဤသုတေသန နည်းဗျူဟာရပ်အား ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ဤတွင် အရေးကြီးလှသော ဤကိစ္စရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များအား အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ရန်အတွက်ငှာ အမျိုးမျိုးသော စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများတို့အား ကိုယ်စားပြုသည့် နိုင်ငံတကာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များထံမှ ဆောင်ရွက်မှုများလည်း ပါဝင်သည်။
အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံခြင်းဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေး နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအတွက် Bournemouth လုပ်နည်းကျင့်ဝတ် သည် အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နှင့် ကာကွယ်မှု၏ စံသတ်မှတ်ချက်များတို့အနေနှင့် တရားမျှတမှုရှိပြီး၊ ယခင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး အမှန်တရားအား ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်ငှာ
အရှင်ဘုရင်မ အရှင်ဘုရင်မ နူအာရ် ပျောက်ဆုံးနေသူများဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်း၏ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်
ဒေါက်တာ အက်ဂ်နက်စ် ကော်လာမတ်ဒ် (Agnes Callamard) ၊ တရားရုံးပြင်ပ၊ လက်တန်း သို့မဟုတ် အာဏာအကြွင်းမဲ့ စီရင်မှုများဆိုင်ရာ UN အထူး အစီရင်ခံတင်ပြသူ အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုများဟာဆိုရင် လူသားသမိုင်းရဲ့ သီးသန့်ခွဲခြားနိုင်တဲ့ ဖြစ်စဉ်များ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၊ ဒေသတိုင်းမှာ ပြန့်နှံ့နေတာပါ။ အချို ဖြစ်ရပ်များဟာဆိုရင် ရာစုနှစ်ချီ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး၊ အချို့ ပြစ်မှုများကတော့ မကြာသေးမီက ဖော်ထုတ်တွေ့ ရှိခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုစီတိုင်းမှာ အရေးကြီးတဲ့ နောက်ကွယ်ဇာတ်လမ်းများ ရှိပါတယ် – အခြားသူများ မပြောပြဘဲထားရှိခဲ့တဲ့၊ ငြင်းဆန်ခဲ့တဲ့၊ ဖုံးဖိခဲ့တဲ့ ဒါမှမဟုတ် မြှုပ်နှံထားခဲ့တဲ့ အမှန်တရားများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားရုံးပြင်ပဆိုင်ရာ စီရင်မှုများနဲ့ လက်တန်း သို့မဟုတ် အာဏာအကြွင်းမဲ့ သတ်ဖြတ်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီး UN ရဲ့ အထူး အစီရင်ခံတင်ပြသူတစ်ဦး ဖြစ်တာနဲ့အညီ ကျွန်မအနေနဲ့ အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုတွေဟာ ရာဇ၀တ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေရဲ့ ရလဒ်၊ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံရဲ့ ၀တ္တရားတာဝန်ပျက်ကွက်မှုတွေရဲ့ ရလဒ် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကို သိရှိထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အုပ်စုလိုက်သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှု နေရာတွေဟာဆိုရင် ခေတ်ကာလတစ်လျှောက်မှာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ ကြိမ်ဖန်တလဲလဲ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ နေရာတွေဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုလည်း ကျွန်မ နားလည်သိရှိထားပါတယ်။ အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာများနှင့် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်များတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး
လူ့ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများအား ကိုင်တွယ်စီမံမှုနှင့် သက်ဆိုင်သူ မိသားစုများ၊
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ နှင့်
ကျန်ရစ်သူများ၊ ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် နိုင်ငံများတို့၏ အကျိုးစီးပွား
သမိုင်းအထောက်အထားဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည် နေရာအလိုက်၊
အစရှိသည်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် လူ့အခွင့်အရေး စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်
သက်ဆိုင်သူတစ်ဦးချင်းစီအလိုက်၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းအလိုက်၊ ထို့ပြင် နိုင်ငံအလိုက်
ဥပဒေများတို့၏ အင်္ဂါရပ်အစုံအလင်ကို ခိုင်မာစွာ ချိတ်ဆက်စုစည်းပေးထားသည်။
အစရှိသည်တို့အပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားခြားနားမှုများ ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းတို့၏
ဤလုပ်နည်းကျင့်ဝတ်အတိုင်း အသုံးချမည်ဆိုပါက အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာများ၊
သိသာထင်ရှားမှုသည် သဘောထားကွဲလွဲမှုများထက် ကျော်လွန်ပြီး၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကာ
ထို့ပြင် ၎င်းတွင် ရှိနေသည့် ကျန်ရစ်သော လူ့ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ အစရှိသည်တို့သည်
မျိုးဆက်အစဉ်အဆက် ဆက်ခံဆင်းသက်လာခဲ့ပါသည်။ အဆုံးသတ် နှုတ်ဆက်ဂုဏ်ပြုပြီး၊
ကနဦး ရှာဖွေတွေ့ ရှိမှုနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးချိန်မှစ၍ အထောက်အထားရှာဖွေမှုဆိုင်ရာ
နောက်ဆုံးအနေနှင့် လေးစားသမှုပေးအပ်သည့်အနေနှင့်ငှာ အုပ်စုလိုက်
ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့် တရားဝင် တရားမျှတမှုအား ရှာဖွေချိန်နှင့် ရေရှည် အထိမ်းအမှတ်
မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာများအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး နှင့် အောက်မေ့သတိရမှု
ကျောက်တိုင်ထိန်းသိမ်းမှုများ ဆောင်ရွက်ပြီးသည့်အထိ ကာလတစ်လျှောက် ၎င်းတို့နှင့်
တာဝန်ဝတ္တရားသည် အတိတ်၊ လက်ရှိနှင့် အနာဂါတ်မျိုးဆက်များတို့၏ တာဝန်ပင် ဖြစ်သည်။
ထိုက်တန်သော လေးစားသမှုထားရှိ၍ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမခံရသော၊ ထို့ပြင်
သို့ဖြစ်သောကြောင့်ငှာ မည်သည့်အခြေအနေ၌မဆို အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာများ၏
ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော စီမံကိုင်တွယ်မှုကို လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်သည်။
တည်ရှိမှုအား ငြင်းဆန်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖုံးကွယ်ခြင်းများ မပြုသင့်ပေ၊ ထိုနည်းတူ
နိုင်ငံတကာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ အုပ်စုလိုက်
၎င်းနေရာများအား ဖျက်စီး သို့မဟုတ် ဖြိုဖျက်ခြင်းများလည်း မပြုလုပ်သင့်ပေ။ ထိုနည်းတူ မည်သည့်အခြေအနေ၌မဆို အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာများအား ရှာဖွေသူများ သို့မဟုတ် ၎င်းနေရာအကြောင်း ပြောဆိုသူများ အစရှိသည်တို့အား အကျဉ်းချခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ပစ်ခြင်းများလည်း မပြုရပေ။ ၎င်းအစား လူ့အခွင့်အရေးအား အခြေခံသည့် အလုံးစုံပါဝင်သော ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းအား အသုံးပြုရမည် ဖြစ်သည်။ သေဆုံးသူများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာအား ထိန်းသိမ်းပေးပြီး၊ ဖြစ်နိုင်ပါက မိသားစုများနှင့် ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်း၏ နစ်နာခံစားရမှုများအား လျော့ပါးသက်သာစေကာ အမှန်တရားနှင့် တရားမျှတမှုအား ရှာဖွေပေးပြီး၊ ထို့အပြင် ၎င်းကဲ့သို့ဖြစ်ရပ်များ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မြံ ဖစ်ပေါ်ခြင်း မရှေိစရန် ကတိက၀တ်ပြုချက်နငှအ့် တူ အလံုး စံထုည်သ့ငွ်း စဉ်းစားမှုပြုသော
မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာများအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ စီမံကိုင်တွယ်မှုသည် အများအားဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများရှိကာ မသင့်တင့်သည်များ သို့မှမဟုတ် အလွန်ရိုးရှင်းပြီး ခြားနားမှုမရှိသည်များ ရှိတတ်ပေသည်။ ဤသည်အား ရပ်တန့်ပစ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ မိသားစုများ၊ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများ၊ ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်း နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများတို့၏ အမျိုးစုံလင်ကွဲပြားသော အကျိုးစီးပွားနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများတို့အား လေးစားသမှုထားရှိ၍ အကာအကွယ်ပေးအပ်ရန်အတွက်ငှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသည်ထက်မက ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်၊ လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ဘုံလူသားချင်းစာနာထော က်ထားမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှဝေသော တာဝန်ဝတ္တရားတစ်ရပ် ဖြစ်ပေသည်။
ကုသဖြေရှင်းမှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်မှုတို့အား လိုအပ်ပေသည်။
အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံခြင်းဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေး နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအတွက် Bournemouth လုပ်နည်းကျင့်ဝတ် သည် ဤအခြင်းအရာများ အားလုံးအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် အဓိကကျသော ထည့်ဝင်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် အလွန်အရေးကြီးသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များအား ဖော်ထုတ်ပေးကာ အမှန်တရားနှင့် တရားမျှတမှုအတွက် မိမိတို့၏ လူ့အခွင့်အရေးအား ကျန်ရစ်သူမိသားစုများ ကျင့်သုံးနိုင်စေရန်အတွက် ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်၍ လေးစားသမှုထားရှိသော အကာအကွယ်များ နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနည်းလမ်းများတို့ကို ပံ့ပိုးပေးထားသည့် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေခွဲများအား အတူတကွ စုစည်းပေးထားသည်။ ဤလုပ်နည်းကျင့်ဝတ်သည် အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုများ၊ ကျန်ရစ်သည့်
တရားရုံးပြင်ပ၊ လက်တန်း သို့မဟုတ် အာဏာအကြွင်းမဲ့ စီရင်မှုများဆိုင်ရာ အထူး အစီရင်ခံတင်ပြသူ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်
ဒေါက်တာ အက်ဂ်နက်စ် ကော်လာမတ်ဒ် တရားရုံးပြင်ပ၊ လက်တန်း သို့မဟုတ် အာဏာအကြွင်းမဲ့ စီရင်မှုများဆိုင်ရာ UN အထူး အစီရင်ခံတင်ပြသူ
လုပ်နည်းကျင့်ဝတ်၏ ရည်မှန်းချက်နှင့် နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ
အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုများသည် ပဋိပက္ခတိုက်ပွဲများ နှင့် စုပေါင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု
လုပ်နည်းကျင့်ဝတ်၏ ရည်မှန်းချက်နှင့် နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ.................................3 အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုများ ကာကွယ်ရေး နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွင်း ဆက်စပ်ရာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု မူစည်းမျဉ်းများ..............................................................................................6 A. ဖော်ထုတ်တွေ့ ရှိမှု နှင့် အန္တရာယ်ကင်းသော အစီရင်ခံတိုင်ကြားမှု...................................8 B. ကာကွယ်မ.ှု....................................................................................................................................8 C. စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု.............................................................................................................................9 D. အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မ.ှု .......................................................................................12 E. လူ့ခန္ဓာအကြွင်းအကျန်များ ပြန်လည်အပ်နှံမ.ှု ........................................................................14 F. တရားမျှတရေး .............................................................................................................................15 G. အမှတ်တရ အထိမ်းအမှတ် ပြုလုပ်မ.ှု .......................................................................................16 နောက်ဆက်တွဲ 1..............................................................................................................................17 နောက်ဆက်တွဲ 2..............................................................................................................................18 နောက်ဆက်တွဲ 3..............................................................................................................................19 နောက်ဆက်တွဲ 4..............................................................................................................................20 နောက်ဆက်တွဲ 5..............................................................................................................................21 နောက်ဆက်တွဲ 6..............................................................................................................................22
များတို့တွင် မကြာခဏ တွေ့ ရှိရတတ်သော အမွေအနှစ်တစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများအတွက်မူ မိမိတို့ ချစ်ခင်ရသူများ၏ ကံကြမ္မာ နှင့် ၎င်း တို့ရှိနေမည့်နေရာအား သိရှိဖို့ရန်၊ ထို့ပြင် သေဆုံးသူများ၏ ရုပ်အကြွင်းအကျန်များအား မြှုပ်နှံရန် နှင့်/သို့မဟုတ် အမှတ်တရ အထိန်းအမှတ်ပြုလုပ်၍ ဂုဏ်ပြုပေးဖို့ရန် အလွန်ပင် လိုအပ်ပေသည်။ စင်စစ် ဤလိုအပ်ချက်သည် အမှန်တရားအား သိရှိနိုင်ရန်အတွက် တရားဝင် အခွင့်အရေးတစ်ရပ်အား အသိအမှတ်ပြုခြင်းလည်း ဖြစ်ပေသည်။ အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုများတွင် အမှန်တရား၊ တရားမျှတမှု နှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ၏ တာဝန်ယူမှုတို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ထိရောက်သော မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် အထောက်အထား သက်သေများ ပါဝင်နေသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့်ငှာ အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာများအား ကာကွယ်ရေး၊ ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတို့အတွက် ထိရောက်သော စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များတို့သည် အလွန်ပင် အဓိကကျ အရေးကြီးပေသည်။ သို့သော်လည်း လက်ရှိတွင် ဤနယ်ပယ်အတွင်းမှ အမျိုးမျိုးသော အဓိကကျသည့် ပါဝင်လုပ်ဆောင်သူများအကြား လုပ်ငန်းစီမံလည်ပတ်မှုအတွက် အကောင်းဆုံး လက်တွေ့ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းများ တော်တော်များများရှိသော်လည်း အားလုံး အသုံးပြု၊ မျှဝေနိုင်သည့် ဘုံစံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်များ မရှိသေးပေ။ သက်ဆိုင်သူများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုပြု၍ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးထားသော လုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားသည့် ဤလုပ်နည်းကျင့်ဝတ်သည် ဤလိုအပ်သော ကွာဟချက်အား ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မူစည်းမျဉ်းများ နှင့် ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းအလေ့အကျင့်များနှင့်စပ်လျဉ်းသော လက်ရှိ တည်ရှိနေသည့် စာရွက်စာတမ်းများအား ဆင့်ပွားထားခြင်း မဟုတ်သလို အစားထိုးခြင်းလည်း မဟုတ်ပေ1။ ၎င်းအစား အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာများအား ကာကွယ်ရေး နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအတွက် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်၊ ဆက်စပ်မှုရှိသော စည်းမျဉ်း ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းအား ကမ်းလှမ်းပေးသည်။ ၎င်းသည် အောက်ဖော်ပြပါတို့အား ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့် အများအပြားသော ပါဝင်သက်ဆိုင်သူများနှင့်အတူ ၎င်းတို့ တစ်ရပ်လုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော ဤလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ၏ ကာလအလိုက် အစဉ်အဆက်ပြဇယား၊ အတူတကွဖြစ်သော စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ နှင့် ယန္တရားလည်ပတ်မှုများ၊ ထို့ပြင် အမှန်တရား နှင့် တရားမျှတမှုအား ရှေ့တိုး၊ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အပြန်အလှန် အားထုတ်လုပ်ဆောင်မှု အစရှိသည်တို့ကို လိုက်နာထားသည် (1) အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံခြင်းဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေး နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ လုပ်နည်းကျင့်ဝတ်၊ ၎င်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များအား အခြေပြုထားပြီး၊ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးဥပဒေ၊ နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နှင့် သက်ဆိုင်သည့်နေရာများတွင် နိုင်ငံတကာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ အစရှိသည်တို့၏ ဥပဒေခွဲများအား ပေါင်းကူး၊ ပေါင်းစည်း ဆောင်ရွက်ထားသည်၊ ထို့ပြင် အဆိုပါ သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ၏စာရင်းအား နောက်ဆက်တွဲ 1 တွင် ကြည့်ရှုပါ။
(2) လုပ်နည်းကျင့်ဝတ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပညာရေးရှုထောင့် မှတ်ချက် သည် ၎င်း၌ပါဝင်သည့်
သို့ဖြစ်ရာ အနည်းဆုံး အဆင့်တစ်ဆင့်တွင် သက်ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများနှင့်အညီ
အမျိုးမျိုးသော ပြဌာန်းချက်များသို့ ဦးတည်နေသည့် အထောက်အထားအချက်အလက်များ
မည်သည့်အခြေအနေအတွက်မဆို သက်ရောက်အသုံးချသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နှင့်
နှင့် ဆွေးနွေးချက်များတို့ကို သုံးသပ်ထားသည်။ သီးခြား ထုတ်ဝေထားသော
ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များတို့သည် အမှန်တရား နှင့် တရားမျှတမှုရှိရေး
ပညာရေးရှုထောင့် မှတ်ချက်သည် အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေး
ပန်းတိုင် နှစ်ရပ်စလုံးအပေါ် လုံလောက်စွာ ဖြည့်ဆည်းမှု ပြုသင့်ပေသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ
နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း တွေ့ ရှိရသော ရှုထောင့်အမြင်များ နှင့်
၎င်းတို့သည် အာဏာပိုင်များ၏ စိစစ်၊ စစ်ဆေးမှုအား ခံနိုင်ရည်ရှိရပေမည်။
လိုအပ်ချက်များတို့ကို မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်း လက်တွေ့ ကျင့်သုံးနိုင်ကြောင်း၊
ထို့ပြင် သက်ဆိုင်သည့်နေရာများတွင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုပြုနိုင်စေကြောင်း
ဤလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်၏ သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအား သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ
သေချာစေရန်အတွက်ငှာ အထူးချဲ့ ထွင်၊ ဖော်ပြထားသည်။
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ၊ တရားသူကြီးများ၊ အမှုစစ်များ၊
အသုံးပြုသူများ - ဤလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်အား လက်တွေ့ ကျင့်သုံးသူများမှ
လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများ/ရဲဝန်ထမ်း၊ အရပ်သား လူမှုအဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်များ
အသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားပြီး၊ ဤတွင် အစိုးရ နှင့် နိုင်ငံတော် အရာရှိဝန်ထမ်းများ၊ ဥပဒေ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး ၀န်ထမ်းများ၊ ဥပဒေရေးရာ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ အထူးကျွမ်းကျင်သူများ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ
နှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာအပိုင်းများ အစရှိသည်တို့ အပါအ၀င် ဖိတ်ကြားထားသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များတို့၏ အတွေ့အကြုံ၊ ထည့်သွင်းပါဝင်မှုတို့အားဖြင့် ပုံသွင်းပုံဖော်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေး နှင့်
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများ နှင့် ကျွမ်းကျင် အရပ်သား လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဇာတ်ကောင်များ အစရှိသည်တို့ အကန့်အသတ်မရှိ ပါဝင်သက်ဆိုင်သည်။
လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်၏ နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ နှင့် သက်ရောက်အသုံးချမှု အမှုတစ်မှုချင်းစီအလိုက် အခြေခံ၍ ဤလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်၏ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အတိုင်းအတာသည် လူ့အခွင့်အရေး တလွဲသုံးစားအနိုင်ကျင့်မှုများ နှင့် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်သည့် နိုင်ငံတွင်း နှင့် နိုင်ငံတကာ အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုအတိုင်းအတာသို့ ကန့်သတ်ထားသည်။ သို့သော်လည်း ဤအခြင်းအရာသည် ဤလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်အနေနှင့် အမျိုးမျိုးသော အခြေအနေများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုများဖြင့် ဆက်နွယ်နေခြင်းကို တားမြစ်နိုင်ခြင်း မရှိပေ။3 အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုများအတွင်းမှ သားကောင်များသည် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှင့်/ သို့မဟုတ် ကလေးများ ဖြစ်နိုင်ပေသည်။ ၎င်းတို့သည် ပဋိပက္ခအတွင်း တစ်ဘက်ဘက်မှသော အရပ်သားများ နှင့်/သို့မဟုတ် လက်နက်ကိုင်သောင်းကျန်းသူများလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်သည် ခြားနားခြင်းများမပြုဘဲ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အခြားသော ခံယူချက်ရှုထောင့်၊ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစု လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ လိင်အမျိုးအစား၊ လိင်စိတ်ခံယူချက်၊ လိင်သတ်မှတ်ချက်၊ ဘာသာရေး သို့မဟုတ် ယုံကြည်ချက်၊ အသက်အရွယ်၊ လူမျိုး၊ အသားအရောင်၊ ဘာသာစကား၊ တိုင်းရင်းသားဖြစ်မှု၊ ဇာတ်အမျိုးအစားခွဲခြားမှု၊ မူလ နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့တဲ့မသန်စွမ်းမှု၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ မွေးဖွားမှု၊ အိမ်ထောင်ရေး အခြေအနေ နှင့် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေရေးရာများတို့မှ အသိအမှတ်ပြုသည့် အခြားသော နောက်ခံ အချက်အလက်များ မှန်သမျှ အစရှိသည်တို့ မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သိကျွမ်းနားလည်မှု၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု နှင့်/သို့မဟုတ် ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ထိုနည်းတူ ပထ၀ီဒေသဆိုင်ရာ မတူကွဲပြားမှု အစရှိသည်တို့အပေါ် ရောင်ပြန်ထင်ဟပ်မှု ရှိပေသည်။4 အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ ဤလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်၏ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ဖော်ပြပါ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များအား အနက်ဖွင့်ဆိုပေးထားပါသည် •	နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအတွင်း အနက်ဖွင့်ဆိုထားခြင်းမရှိသည့် အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှု ဟူသော ဝေါဟာရသည် ဤလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်အတွင်းတွင်မူ ‘မြှုပ်နှံထားသော၊ မြုပ်နေသော သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်တွင် ပြန့်ကျဲနေသော (တစ်ခုမကသည့်) အများအပြားသော (အရိုးစုများ၊ ရောနှောကြွင်းကျန်နေသည်များ၊ နှင့် ကျန်ရစ် အစိတ်အပိုင်းအစများ အစရှိသည်တို့အပါအ၀င်) လူ့ခန္ဓာကိုယ် အကြွင်းအကျန်များ ရှိနေသည့် နေရာ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ဧရိယာကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး၊ သေဆုံးမှု နှင့်/သို့မဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်အကြွင်းအကျန် စွန့်ပစ်မှုနည်းလမ်းအား ဥပဒေနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် ခွင့်ပြုချက်ပေးအပ်ထားသော ၀န်းကျင် အခြေအနေများ ဖြစ်ရပေမည်’။ •	ပျောက်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ ဆိုသည်မှာ ‘ပဋိပက္ခအခြေအနေ၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တလွဲသုံးစားအနိုင်ကျင့်မှုများ နှင့်/သို့မဟုတ် ကြိုတင်စီမံထားသော အကြမ်းဖက်မှုများ အစရှိသည်တို့၏ ရလဒ်အနေနှင့်ငှာ ပျောက်ဆုံးနေသော ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။’5 •	လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်အတွင်းမှ နစ်နာသူသားကောင် ဆိုသည်မှာ ‘နိုင်ငံအတွင်းမှ
ဤကျင့်ဝတ်အား သက်ရောက်အသုံးချရန် ရည်ရွယ်သည်။
ပြစ်မှုဥပဒေဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်မှုများကြောင့်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ
အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုအား စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် တူးဖော်မူနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ သို့မဟုတ် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ
‘စံတွေ့ ရှိချက်’ သို့မဟုတ် ‘ပုံမှန်တွေ့ ရှိရချက်’ ဟူ၍ မရှိသေးပေ။ အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုအား စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းများသည် လွန်စွာပင် အသေးစိတ်အချက်အလက်လိုက်၍ ကွဲပြားပေသည်။ ဤသည်မှာ ပထ၀ီဆိုင်ရာ နှင့် လောကီရေးရာမတည်မြဲမှု အချက်များ၊ ထို့အတူ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေများကဲ့သို့သော အချက်များကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပေသည်။ ၎င်းရလဒ်အနေနှင့်ငှာ ဤလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်သည် အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ပြန်လည်တူးဖော်ရေး အမှုတွဲများ အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံး အခြေခံ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှု၏ စံသတ်မှတ်ချက် ရှုထောင့်အနေနှင့်ငှာ ရည်ရွယ်ခြင်း မဟုတ်ပေ။ ၎င်းအစား ဤလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်သည် အမျိုးမျိုးသော လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း အခြေအနေများ နှင့် အဆင့်များ အားလုံးတွင် လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ကြသူများမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု အတွင်း ညှိနှိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ ပံ့ပိုး၊ သတင်းအချက်အလက် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်ငှာ အသေးစိတ် အဘက်ဘက်မှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများအား ထောက်ပံ့ပေးသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ဤလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်အတွင်း ပါဝင်သော ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုချင်းစီအပေါ် လုံးဝသက်ဆိုင်အသုံးချနိုင်မှု ရှိချင်မှရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားထားသင့်ပေသည်။ ဤလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်သည် အလုံးစုံအခြေအနေများတွင် အထောက်အပံ့ပြုပေးနိုင်စေဖို့ ရည်ရွယ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်၏ အသေးစိတ် ရှုထောင့်များအလိုက် သက်ရောက်အသုံးချရန် သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်
ပြင်းထန်သော နိုင်ငံတကာ ဥပဒေများ အစရှိသည်တို့ကို ချိုးဖောက်မှုများကြောင့်ဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်သော လှုပ်ရှားမှုများ သို့မဟုတ် ချန်လှပ်ဖယ်ရှားမှုများတို့ကြောင့်ငှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု၊ စိတ်ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာ နစ်နာခံစားရမှုများ၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် မိမိတို့၏ အခြေခံ အခွင့်အရေးများ သိသိသာသာ နစ်နာထိခိုက်မှု အစရှိသည်တို့ ပါဝင်သည့် ထိခိုက်မှုအား ခံစားရသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီ သို့မဟုတ် အုပ်စုအဖွဲ့လိုက် ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်’။6 နိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့်အညီ ဤလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်အတွင်း အသုံးပြုသည့် နစ်နာသူသားကောင်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအတွ င်းမှ တစ်ဦးချင်းစီများ (‘အခြေခံ’ သို့မဟုတ် ‘တိုက်ရိုက်’ နစ်နာသူသားကောင်များ) ကိုသာမက ၎င်းတို့၏ မိသားစုများနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ပါက ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများ (‘တစ်ဆင့်ခံ’ သို့မဟုတ် ‘တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော’ နစ်နာသူသားကောင်များ)ကိုပါ ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ သေချာစွာ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိစေရန်အတွက်ငှာ ဤလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်အတွင်း၌ အချို့သော ပြဌာန်းဖော်ပြချက်များနှင့် သက်ဆိုင်မှုရှိသော အခြေအနေများတွင် ‘မိသားစုများ’၊ ‘မိသားစုဝင်များ’ နှင့် ‘သက်ရောက်မှုရှိသော ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများ’ အစရှိသည်တို့အတွက် ကိုးကားချက်များကိုပါ ပြုလုပ်ပေးထားသည်။7
အမှုတစ်မှုချင်းစီအပေါ်အခြေခံကာ လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်သူများမှ သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်မှု ပြုသင့်ပေသည်။ ဤတွင် ထောက်ခံခွင့်ပြုချက်ရ ကျွမ်းကျင် အရပ်သား လူမှု အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်၏ ထောက်ပံ့မှုလက်အောက်မှ ဖြစ်သော နိုင်ငံသား သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ ကနဦးအစပြု ဆောင်ရွက်မှုများလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နှင့် တူးဖော်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ပါဝင်သက်ဆိုင်ကောင်း သက်ဆိုင်နေသည့် ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများ၊ ထို့ပြင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမဟုတ်သော်လည်း တူးဖော်မှုအား ဆောင်ရွက်ကြသူများ အစရှိသည်တို့ကိုလည်း နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ကနဦးအစပြုဆောင်ရွက်မှုများအားဖြင့် ‘တရားဝင်ဖြစ်စေမည်’ ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် ဆက်လက်ဆွေးနွေးချက်အတွက်ငှာ ပူးတွဲပါရှိသော ပညာရပ်ရှုထောင့် မှတ်ချက်အား ကြည့်ရှုပါ။
ဥပမာအားဖြင့် လူသားများမှပြုလုပ်သည့် ကပ်ဘေးများပါ အပါအ၀င် ကပ်ဘေးအန္တရာယ်များ၊ နှင့် နယ်စပ်အားဖြည့်မှု သို့မဟုတ် တရားမ၀င် ကုန်ကူးမှုတို့၏ ရလဒ်ဖြစ်သည့် သေဆုံးမှုများ။
ကျွမ်းကျင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအတွက် နမူနာ နည်းပညာများနှင့် သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များအား ပူးတွဲပါရှိသည့် ပညာရပ်ရှုထောင့် မှတ်ချက်အတွင်း၌ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ပါလီမန်သမ္မဂအတွင်း နှင့် ICRC (2009) ၊ ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ – ပါလီမန်ဝင်များအတွက် လက်ကိုင်စာအုပ်၊ စာမျက်နှာ9နှင့် ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်သက်ဆိုင်သော နိုင်ငံတကာ ကော်မရှင် ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် တစ်ညီတည်းအညီ။ အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ပတ်သက်၍မူ ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် မရှိသေးပေ။ ဤအတွင်း အကြံပြုထားသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ၏ ရလဒ်အနေနှင့် ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်သက်ဆိုင်သော 2019 UN လုံခြုံရေးကောင်စီ ဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းအတွင်း တွေ့ ရှိသည့် ယူဆချက်နှင့်ယှဉ်လျှင် ပိုမို နယ်ပယ်ကျဉ်းမြောင်းမှုရှိပြီး၊ ‘နိုင်ငံတကာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာအဆင့်မဟုတ်သည့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ၏ ရလဒ်အဖြစ် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသော’ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 2010 UNHCR အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အား အပ်ခိုးထင်ဟပ်မှုပြုသည် (အပိုဒ် 9)။ တစ်ချိန်တည်းတွင်ပင် ဤအတွင်းမှ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် ဤလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်ထက် ကျော်လွန်သော ခေါင်းစဉ်အကြောင်းအရာဖြစ်သည့် ပျောက်ဆုံး ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအား ဖော်ပြထည့်သွင်းထားခြင်း မရှိပေ။
ဤသည်မှာ နောက်ဆက် A ၊ 1 ရှိ ပြစ်မှု နှင့် အာဏာအလွဲသုံးစားပြုမှုမှ သားကောင်များအတွက် အခြေခံ တရားမျှတမှု မူစည်းမျဉ်းများဆိုင်ရာ UN ထုတ်ပြန်ချက်၊ နှင့် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေ နှင့် နိုင်ငံတကာ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုများတို့အတွက် ဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်း နှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော UN အခြေခံမူစည်းမျဉ်းများ နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ၊ နောက်ဆက် V ၊ 8 နှင့် အတင်းအကြပ်ပြုသော ပျောက်ဆုံးမှုအတွင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ အားလုံးအား ကာကွယ်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ ကွန်ဗင်းရှင်း၏ ပဲ့တင်ချက်အပိုဒ် 24(1) အစရှိသည်တို့မှ စုပေါင်းထားသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ရပ် ဖြစ်သည်။
‘မိသားစုများ’ ၊ ‘မိသားစုဝင်များ’ သို့မဟုတ် ‘သက်ဆိုင်သော ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများ’ ဟူသည့် ဝေါဟာရများအား ကိုးကားအသုံးပြုမှုသည် ၎င်းတို့သည် နစ်နာခံစားရသူ သားကောင်များ မဟုတ်ကြောင်း တစ်နည်းနည်းဖြင့် အကြံပြု၊ ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပေ။ ထို့ပြင် မိသားစုတစ်စုချင်းစီ နှင့် ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ ကိုယ်၌သည်ပင်လျှင် အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလက်အောက်မှ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ချိုးဖောက်နစ်နာမှုများတွင် အခြားနစ်နာခံစားရသည့် တိုက်ရိုက် သားကောင်းများ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
•	နိုင်ငံတကာဥပဒေအတွင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားခြင်းမရှိသည့် မိသားစု ဟူသော ဝေါဟာရအား ဤတွင် အသေးစိတ်အခြေအနေအလိုက် လူမှုရေးဆိုင်ရာ လက်တွေ့နယ်ပယ်နှင့် စပ်လျဉ်းသော အယူအဆတွင် အသုံးပြုထားသည်။8 ဤလုပ်နည်းကျင့်ဝတ်၏ ရည်ရွယ်ချက်အား ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်ငှာ မိသားစုဝင်များဟုဆိုရာ၌ ဥပမာအားဖြင့် ပျောက်ဆုံးနေသူ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး သွေးချင်းနီးစပ်မ9ှု ၊ နှင့် ရုပ်အကြွင်းအကျန် နှင့် ဥပဒေရေးရာ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများအား သင့်တင့်စွာ လက်ခံရယူနိုင်မှုတို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပါဝင်သက်ဆိုင်နေပေသည်။ ဒေသခံ ဥပဒေများ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများ နှင့်/သို့မဟုတ် အလေ့အကျင့်များတို့နှင့်အညီ မိသားစုဝင်ဖြစ်မှုအား သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်သင့်ပေသည်။ •	(၎င်း၏ စာတွေ့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည့် ‘အဖွင့်တရားရုံး’ သို့မဟုတ် ‘လူထု’
လူသားများ အားလုံးအား အတင်းအကြပ်ပြုမူသော ပျောက်ဆုံးမှုမှ ကာကွယ်ရေး (CED13) အတွက် နိုင်ငံတကာ ကွန်ဗင်းရှင်း၏ အပိုင်း 24(3) အရ နိုင်ငံပါတီများသည် ‘ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များအား ရှာဖွေ၊ ခြေရာခံ၊ လွတ်မြောက်သွားစေရန်အတွက် သင့်တော်သော စီမံတိုင်းတာဆောင်ရွက်မှုများ အားလုံးကို ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပြီး၊ အကယ်၍ ပျောက်ဆုံးနေသူ သေဆုံးသွားသည့်ဖြစ်စဉ်များတွင်မူ ၎င်းတို့၏ ခန္ဓာအကြွင်းအကျန်များအား တည်နေရာရှာဖွေ၍ လေးစားသမှုထားရှိကာ ပြန်လည်အပ်နှံပေးဖို့ လိုအပ်ပေမည်’။ ဤသည်မှာ ပျောက်ဆုံးသူများ၏ ကံတရား နှင့်/သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးသွားသည့်နေရာအား သိရှိရချိန်အထိ စဉ်ဆက်မပြတ် တာဝန်ယူရမည့်
ဟူသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ စစ်မှန်မှုရှိသည့်) သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု
၀တ္တရားတစ်ရပ် ဖြစ်ပေသည် (CED-လမ်းညွှန် မူစည်းမျဉ်းများ14၊ မူစည်းမျဉ်း 7)။
သည် ဥပဒေတရားရုံး နှင့်/သို့မဟုတ် အခြားသော စီရင်မှုယန္တရားများ (ဥပမာ -
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုလျှင် ထိရောက်မှုရှိသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ရပ်အား
သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ အရာရှိ) မတိုင်မှီ နှင့် ၎င်းနောက် ပြဿနာကိစ္စရပ်များအား
ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ဝတ္တရားမှာ နည်းလမ်းဥပဒေသ ၀တ္တရားတစ်ရပ်ဖြစ်ပြိး၊
ယူဆောင်လာခြင်းအားဖြင့် သိပ္ပံနည်းကျ၊ တရားဝင် နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ
နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ
လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်၏ ပုံစံ စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည့် ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်း တစ်ခုအား လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိစဉ် အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေး နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် သက်ရောက်အသုံးချသော ကာလအစီအစဉ်အလိုက် လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ အမျိုးမျိုးကို ဖော်ပြထားသည့် စာရွက်စာတမ်းဖြစ်သော ဤလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်၏ အကြောင်းအရာများသည် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများ နှင့် မူဝါဒများတို့၏ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ရပ် ဖြစ်ပေသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့်ငှာ နိုင်ငံတကာဥပဒေ10 (နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များ) မှ ဆင်းသက်လာသည့် အဓိကအူတိုင်ဖြစ်သော စံပြဌာန်းချက်များကို ဖော်ပြထားသည့် အပြာရောင်သေတ္တာကွက်တစ်ခုအားဖြင့် အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီအား စတင်ထားပြီး၊
သေဆုံးသူများအား ရှာဖွေမှုပြုရန် လိုအပ်ပေသည် (ဥပမာ - GC I ၊ အပိုင်း 15 ၊ GC II ၊ အပိုင်း 18 နှင့် 21; GC IV ၊ အပိုင်း 16 ၊ နောက်ဆက်တွဲ လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ် I ၊ အပိုင်း 17(2)) နှင့် ပျောက်ဆုံးမှု (နောက်ဆက်တွဲ လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ် I ၊ အပိုင်း 33(2))16။ ဓလေ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဥပဒေအရ အကြံပြုချက်မှာမူ နိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ်အတွင်း၌ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတွင်း၌ဖြစ်စေ ပဋိပက္ခအခြေအနေနှင့်သက်ဆိုင်သော ပါတီအဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့စီသည် ‘လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ၏ ရလဒ်အနေဖြင့် ပျောက်ဆုံးနေသည်ဟု အစီရင်ခံတိုင်ကြားခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းတာစီမံဆောင်ရွက်ချက်များ အားလုံးကို ပြုလုပ်ရန် တာဝန်ရှိပေသည်’ (CIHL17 2006 စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းမျဉ်း 117)။
လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်၏ အကြံပြုထားသော အကြောင်းအရာအတွက် ဥပဒေရေးရာ အခြေခံအကြောင်းတရားအား ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။
အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုများသည် ချို့တဲ့သော သို့မဟုတ် ယန္တရားလည်ပတ်မှုများမရှိသော
နယ်ပယ်များအတွင်း၊ တာဝန်ပိနေသော စီရင်စုတစ်ခုအတွင်း၊ လုံခြုံမှုမရှိ၍
လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ် တစ်ရပ်လုံး၏ စတင်အမှတ်သည် ရှာဖွေ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုရန် နိုင်ငံ၏ ၀တ္တရားအားဖြင့် စတင်သည်။
အပြိုင်အဆိုင်များပြားကာ တစ်ပြိုင်တည်းလိုအပ်ချက်များ ရှိနေသည့် နယ်ပယ်အတွင်း အစရှိသည်တို့တွင် တည်ရှိနိုင်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ဖြစ်စဉ်တွင် ပြည်တွင်း ဥပဒေထုတ်ပြန်မှု နှင့် မြှုပ်နှံအားထုတ်မှုရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်မှုများတို့ကို လိုအပ်ပေသည်။ အဆိုပါသော ဥပဒေထုတ်ပြန်ချက်များ နှင့်
နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များ ရှာဖွေ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုရန် တာဝန်
အဖွဲ့အစည်းများတို့သည် ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အမှုများ အားလုံးအတွက် ထိရောက်မှုရှိသော တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှု၏ အခြေခံလမ်းခင်းမှုတစ်ရပ်အဖြစ် ရှုမြင်နိုင်ပေသည်။
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ နိုင်ငံများသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အခွင့်အရေး၊ နှင့် ၎င်းအပေါ် အကာအကွယ်ပေးမှုများ ချိုးဖောက်ခြင်းခံရသည့်အခါ၌ ရှာဖွေ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန် တာဝန်ရှိပေသည်။
နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များ -
အသက်ရှင်သန်မှု အခွင့်အရေး နှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမှု သို့မဟုတ်
ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေထုတ်ပြန်ချက် နှင့် ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်စပ်လျ
အခြားသော ရက်စက်ယုတ်မာသည့်၊ လူမဆန်သည့် သို့မဟုတ် နိမ့်ကျသည့်
ဉ်းပြိး အားထုတ်နှစ်မြုပ်မှုပြုသော အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း
ဆက်ဆံမှုများတို့အပေါ် တားမြစ်ချက်အတွင်း၌ ထိရောက်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုအား လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ ပါဝင်ပေသည် (ICCPR11 ၊ အပိုင်6းနှင့် 7)။ ဒေသဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးဥပဒေအရ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ရပ်သည် လက်ငင်းလုပ်ဆောင်မှုရှိကာ လွတ်လပ်၊ သေသပ်ကျန၍ ဘက်လိုက်မှုမရှိသော၊ ထို့ပြင် ပွင်းလင်းမြင်သာမှုရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များသည် သေသပ်စေ့စပ်၍ သက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ အားလုံးနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး
CED အရ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များအနေနှင့် တရားဝင် မှတ်တမ်းများ ပြုလုပ်ထားရှိရန်၊ နှင့် မိမိတို့၏ လွတ်လပ်မှုအား ဆုံးရှုံးနေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ အားလုံးအား စာရင်းပြုစုထားရန် လိုအပ်ပေသည် (အပိုင်း 17(3))။ စာရင်းများ နှင့် ဒေတာဘေ့စ်အား စီမံခန့်ခွဲမှုပြုလုပ်ရာ၌ နစ်နာသူသားကောင်များ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ စောင့်ထိန်းမှု နှင့် အချက်အလက်များတို့၏ လျှို့ ၀ှက်စောင့်ထိန်းမှုတို့ကို လေ့စားသမှုထားရှိသင့်ပေသည် (CED-လမ်းညွှန် မူစည်းမျဉ်း၊ 11(8))။
ဓမ္မဓိဌာန်ကျကာ ဘက်လိုက်မှုမရှိသော လေ့လာသုံးသပ်ချက်တစ်ရပ်အပေါ် အခြေခံရမည် ဖြစ်သည်။12
ပျောက်ဆုံးမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သော ICRC စံနမူနာဥပဒေသည် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်တွင်း ဥပဒေထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်အညီ ကိုးကားထားသည့် ‘ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဆွေမျိုးများ’ ဟူသော ဝေါဟာရကို အသုံးပြုထားသည် (ကြက်ခြေနီ နိုင်ငံတကာ ကော်မတီ (ICRC) (2009)၊ လမ်းညွှန် မူစည်းမျဉ်းများ/ပျောက်ဆုံးမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သော စံနမူနာ ဥပဒေ၊ အပိုင်း 2(2)) (ပျောက်ဆုံးမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သော ICRC စံနမူနာဥပဒေ အကျဉ်းချုပ်)။
မျိုးရိုးဗီဇဆက်စပ်မှုရှိ၍ သွေးချင်းနီးစပ်မှုရှိသူများ ပါဝင်သည် (Pueblo Bello Massacre Colombia ၊ ကောင်းကျိုးအပေါ် စီရင်မှု၊ စစ်လျော်ကြေးများ နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အမေရီကန်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တရားရုံး အတွဲဆက်များ C နံပါတ် 140 (ဇန်န၀ါရီ 31 ၊ 2006) အပိုဒ် 273 နှင့် 274။
သို့ဖြစ်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သော ပြဌာန်းချက်များ၏ စာရင်းသည် ညွှန်ပြမှုသာလျှင် ပြုနိုင်သည်။
အရပ်သား နှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်သော နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက် (ဒီဇင်ဘာ 19 ၊ 1966 တွင် မွေးစားကျင့်သုံးသည်၊ မတ်လ 23 ၊ 1976 တွင် အားထုတ်ဆောင်ရွက်မှုပြုသည်) 999 UNTS 171 (အကျဉ်းချုပ် ICCPR)။ UN လူ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကော်မတီ (HRC) ၊ အထွေထွေမှတ်ချက် နံပါတ် 36 ၊ အပိုင်6း(အသက်ရှင်သန်မှု အခွင့်အရေး) CCPR/C/GC/35 (စက်တင်ဘာ3၊ 2019) အပိုဒ် 58 အားလည်း ကြည့်ရှုပါ။
Kukhalashvili နှင့် အခြားသူများ အပြိုင် Georgia ၊ စီရင်ချက်၊ ECtHR လျှောက်လွှာ နံပါတ် 8938/07 နှင့် 41891/07 (မေလ2၊ 2020) အပိုဒ် 130။
အတင်းအကြပ်ပြုသော ပျောက်ဆုံးမှုအတွင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ အားလုံးအား ကာကွယ်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ ကွန်ဗင်းရှင်း (ဇန်န၀ါရီ 12 ၊ 2007 တွင် မွေးစားသည်၊ ဒီဇင်ဘာ 23 ၊ 2010 တွင် အားထုတ်ဆောင်ရွက်မှုပြုသည်) UN စာရွက်စာတမ်း A/RES/61/177 (ဒီဇင်ဘာ 20 ၊ 2006) (အကျဉ်းချုပ် CED)။
အတင်းအကြပ်ပြုသော ပျောက်ဆုံးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုလသမ္မဂ ကော်မတီ၊ ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များအား ရှာဖွေရန်အတွက် လမ်းညွှန် မူစည်းမျဉ်းများ (မေလ 8 ၊ 2019) UN စာရွက်စာတမ်း CED/C/7 ၊ မူစည်းမျဉ်း7(၎င်းနောက် CED-လမ်းညွှန် မူစည်းမျဉ်းများတွင)် ။
Da Silva အပြိုင် United Kingdom ၊ Grand Chamber စီရင်ချက်၊ ECtHR လျှောက်လွှာ နံပါတ် 5878/08 (မတ်လ 30 ၊ 2016) အပိုဒ် 231–238 ၊ ထိရောက်မှုရှိသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် Grand Chamber သတ်မှတ်ချက် အကျဉ်းချုပ် အပြည့်အ၀အား ပေးအပ်သည်။
လက်တွေ့ မြေပြင်အတွင်း လက်နက်ကိုင်တပ်များကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ၊ နာမကျန်းဖြစ်မှုအခြေအနေများအတွက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရေးဆိုင်ရာ ဂျနီဗာ ကွန်ဗင်းရှင်း (I) (သြဂုတ် 12 ၊ 1949 တွင် မွေးစားကျင့်သုံးသည်) 75 UNTS 31 (အကျဉ်းချုပ် GC I) ၊ ပင်လယ်ပြင်တွင် လက်နက်ကိုင်တပ် အဖွဲ့ဝင်များကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ၊ နာမကျန်းဖြစ်မှု နှင့် သင်္ဘောပျက်နစ်မြုပ်မှု အခြေအနေများအတွက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရေးဆိုင်ရာ ဂျနီဗာ ကွန်ဗင်းရှင်း (II) (သြဂုတ် 12 ၊ 1949 တွင် မွေးစားကျင့်သုံးသည်) 75 UNTS 85 (အကျဉ်းချုပ် GC II) ၊ စစ်ပွဲကာလအတွင်း အရပ်သားများအား ကာကွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ဂျနီဗာ ကွန်ဗင်းရှင်း (IV) (သြဂုတ် 12 ၊ 1949 တွင် မွေးစားကျင့်သုံးသည်) 75 UNTS 288 (အကျဉ်းချုပ် GC IV) ၊ နှင့် သြဂုတ် 12 ၊ 1949 ဂျနီဗာ ကွန်ဗင်းရှင်း နောက်ဆက်တွဲ လုပ်နည်းကျင့်ဝတ်၊ နှင့် နိုင်ငံတကာ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ၏ နစ်နာသူသားကောင်များအား ကာကွယ်ရေးနှင့် ဆက်နွယ်မှု (လုပ်နည်းကျင့်ဝတ် I) (ဇွန်လ 8 ၊ 1977 တွင် မွေးစားကျင့်သုံးသည်၊ ဒီဇင်ဘာ7၊ 1979 တွင် အားထုတ်ဆောင်ရွက်မှုပြုသည်) 1125 UNTS 17512 (အကျဉ်းချုပ် နောက်ဆက်တွဲ လုပ်နည်းကျင့်ဝတ်)။
Henckaerts J-M. နှင့် Doswald-Beck L. ၊ (2006) ဓလေ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဥပဒေ၊ အတွဲ I - စည်းမျဉ်းများ (အကျဉ်းချုပ် CIHL စည်းမျဉ်းများ)။
ထို့ပြင် မြေပြန်လည်တူးဖော်မှုသည် တရားရေးရာ လုပ်ငန်းစဉ်၏ ရှုထောင့်တစ်ရပ်ဖြစ်သော ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များအား စီမံဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တာဝန်ချအပ်ထားခြင်းခံရသော ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု (ပျောက်ဆုံးသူများဆိုင်ရာ ဘော့စ်နီးယား ဥပဒေ18 အပိုင်း7၊ CED-လမ်းညွှန် မူစည်းမျဉ်း 12(1) နှင့် 12(3) အားလည်း ကြည့်ရှုပါ)၊ နှင့် လိုအပ်သော သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများတို့အား ဤအုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေး၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နှင့် လူ့ခန္ဓာအကြွင်းအကျန်များ ပြန်လည်တူးဖော်ရှာဖွေမှုတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော တာဝန်ဝတ္တရားအတွင်း ထည့်သွင်းရန် အကြံပြုထားသည်။ ၎င်းသည် ရြေရာခံမှုဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်များအား လက်ခံရယူသည့် အန္တရာယ်ကင်းသော ယန္တရားလည်ပတ်မှုများကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးသင့်ပြီး၊ (ICRC ပျောက်ဆုံးမှုများဆိုင်ရာ စံနမူနာဥပဒေ19၊ အပိုင်း 12 နှင့် 12(3)) ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များတို့၏ စာရင်းသွင်းမှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှုအား ဖန်တီးပေးသင့်သည်။ 2019 UN လုံခြုံရေးကောင်စီ ဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းသည် ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ပြဿနာများအား တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ငှာ ပြည်တွင်းအဆင့် ‘ဥပဒေပြဌာန်းချက်’ ၏ လိုအပ်မှုကို ဖိအားပေးဖော်ပြခဲ့သည် (စာမျက်နှာ2ရှိ UNSC 247420) ။ ဥပဒေထုတ်ပြန်မှုပြုရာတွင် အတတ်နိုင်ဆုံး အတိုင်းအတာ အပြည့်အ၀အထိ သက်ဆိုင်သူများ အားလုံးအပေါ် အကာအကွယ်ပေးမှု၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နှင့် အထောက်အထားရှာဖွေမှုတို့ကို သေချာအောင်ဆောင်ရွက်စေရန် လိုအပ်ပြီး၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ မရှိစေရန် စီမံသင့်ပေသည်။
နိုင်ငံအာဏာပိုင်များသည် ပဋိပက္ခ၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ သို့မဟုတ် ကပ်ဘေးများတို့မတိုင်မိ အုပ်စုလိုက် မြေမျြုပ်နှံမှုများ၏ အထူးအခြေအနေများအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကြိုတင်တည်ရှိနေသော ဖွဲ့စည်းမှုများ အစဉ် အသင့်ထားရှိနိုင်စွမ်း ရှိချင်မှ ရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ ဥပဒေများ၊ ဥပဒေထုတ်ပြန်မှု နှင့် ကျင့်သုံးမှုများတို့အားဖြင့် အစိုးရသော လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချို့သော သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေဘောင်များမျာမူ ရှိကောင်း ရှိနေသေးနိုင်ပေသည်။21 နိုင်ငံတကာ ဥပဒေထုတ်ပြန်ပြဌာန်းမှုများအား ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သည့် အခြေအနေမှလွဲ၍ ဤဥပဒေရေးရာ ရှုထောင့်များအပေါ် လေးစားသမှုထားရှိ၍ လိုက်နာကျင့်သုံးမှုသည် သက်ဆို င်သူဇာတ်ကောင်များအားလုံးအပေါ် ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှု ပြုရမည် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များအား ရှာဖွေရန် နှင့် အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ တောင်းဆိုရန် အခွင့်အရေးရှိသူများ၏ ထုတ်ပြန်ပေးမှုအပေါ် အစိုးရမည် ဖြစ်ပြီး၊ ကျန်ရစ်အကြွင်းအကျန်များအား ပြန်လည်အပ်နှံမှု လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် စီမံညွှန်ကြားပေးမည် ဖြစ်သည်။ အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာ ကာကွယ်ရေး နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသော သတိပေး မှတ်ချက် ဥပဒေဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ မည်သို့ပင်ရှိစေသော်ငြား အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာများအား စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းသည် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှု နည်းလမ်း ၀တ္တရားများ ဖြစ်ပြီး၊ ရလဒ်အား ကျိန်းသေရယူခြင်း မဟုတ်ပေ (ဆိုလိုသည်မှာ အကောင်းဆုံး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုပြုရန် နှင့် ရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များအပေါ် အမှီပြုခြင်းကို ဆိုလိုသည်)။ အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာများအား စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အလွန် ရှုပ်ထွေး၍ ကာလကြာရှည်ကာ ငွေကုန်ကြေးကျများသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး၊ သိသာထင်ရှားသော စီမံရေးဆွဲမှု၊ ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှု၊ အရင်းအမြစ်များ၊ တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှု နှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ စိတ်အားထက်သန် အားပေးမှုများတို့ လိုအပ်သည်။ ၎င်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ကိုယ်၌သည်ပင် ၎င်းအမှု၌ ပါဝင်သက်ဆိုင်သူ အသီးသီးအပေါ်သို့ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပြီး၊ ဤတွင် ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူတစ်ဦးစီ နှင့် မိသားစုများ၊ မျက်မြင်သက်သေများ၊ နစ်နာခံစားရသူ၏ အုပ်စုအဖွဲ့များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အထူးပြု အေဂျင်စီများ၊ NGO များ၊ ဒေသခံ၊ ဒေသဆိုင်ရာ နှင့် နိုင်ငံအဆင့် အုပ်ချုပ်သူအာဏာပိုင်များ နှင့် ပြည်နယ် အေဂျင်စီများ၊ ထို့ပြင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာ UN ကော်မရှင်များကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာ အုပ်စုများ နှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ အစရှိသည်တို့အပေါ်သို့ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပေသည်။ ၎င်းရလဒ်အနေနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်စီ၊ အုပ်စုအဖွဲ့လိုက် နှင့် လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွားများ၊ လိုအပ်ချက်များ အစရှိသည်တို့အပေါ် ကျယ်ပြန့်စွာ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် သင့်တင့်လျောက်ပတ်မှုပြုရန် သို့မဟုတ် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရန် အသင့် ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် သိသိသာသာပမာဏ ကြီးမားသော အခြေအနေများတွင်မူ အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှု၏ သားကောင်များ အားလုံးအား ပြန်လည်တူးဖော်ရယူရန်၊ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ရန် နှင့် အမိမြေသို့ ပြန်လည်အပ်နှံရန် အခက်အခဲရှိကောင်း ရှိနိုင်ပေသည်၊ ထို့ပြင် ဤသည်မှာ ပျောက်ဆုံးနေသူများ၏ မိသားစုများ နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများတို့အပေါ် ရှုပ်ထွေးသက်ရောက်မှုများ ရှိနိုင်ပေသည်။
ပြည်တွင်း နှင့် နိုင်ငံတကာ အခြေအနေများတွင် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ ခံယူချက်များ နှင့် တရားမျှတရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများပေါ်သို့လည်း သက်ရောက်မှု ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပေသည်။22
အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုများ ကာကွယ်ရေး နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွင်း ဆက်စပ်ရာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု မူစည်းမျဉ်းများ ကာကွယ်ရေးနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်၏ အမျိုးမျိုးသော အဆင့်များအပေါ်သို့ သက်ရောက်မှုရှိသော ဤလုပ်နည်းကျင့်ဝတ်အတွင်း ဖော်ပြထားသည့် အချက်များအပြင် အမိမြေ နှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်များ အားလုံးတွင် အဆင့်အသီးသီးရှိ ပါဝင်သက်ဆိုင်သူ ဇာတ်ကောင်များ အားလုံးအပေါ် သက်ဆိုင်သက်ရောက်မှုရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်(များ) အကြောင်း အသိပေး၊ လမ်းညွှန်ပြပေးသင့်သည့် ဆက်စပ်ရာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု မူစည်းမျဉ်းများလည်း ရှိပေသေးသည်။ ၎င်းတို့အား အောက်တွင် သီးခြား စာရင်းပြု ဖော်ပြထားပြီး၊ လက်တွေ့လုပ်ေဆာင်မြှု ပုရာ၌ ၎င်းတိသ့ု ည် တစ်ခနုငှတ့် စ်ခု ဆက်စပ်နေသည်။ (1) ထိခိုက်မှု မရှိပါစေနှင့် ‘ထိခိုက်မှု မရှိပါစေနှင့်’ ဟူသော ချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းသည် အခြားသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု မူစည်းမျဉ်းများ အားလုံး၏ အခြေခံပင်ဖြစ်ပြီး၊ အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာများ၏ တည်ရှိမှု နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအား လုပ်ဆောင်မှုတို့သည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အတိုင်းအတာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သို့ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ခြေရှိသော နည်းလမ်း(များ)အား နည်းလည်သိရှိစေသည်၊ ထို့အတူ ဖြစ်နိုင်ပါက ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများအား ရှောင်ရှားစေနိုင်မည့် ထို့ပြင်/သို့မဟုတ် လျော့ပါးသက်သာစေနိုင်မည့် နည်းလမ်း(များ)ကိုပါ နားလည်လာစေနိုင်သည်။ လူ့အခွင့်အရေးများ၊ ပဋိပက္ခ နှင့် ပဋိပက္ခနှောင်းပိုင်း ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေများ အစရှိသည်တို့အတွင်း ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုသည်နှင့်အညီ အဆိုပါသော စီမံလည်ပတ်မှုများသည် ၎င်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှု အတိုင်းအတာ၏ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ရှုထောင့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် ဖြစ်လာမည် ဖြစ်သည်။ ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများသည် လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသော လူမှုဘ၀ အပြောင်းအလှည့်များကို ရင်ဆိုင်သွားကြရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဤတွင် လူမှုဘ၀ နှင့် အာဏာ ဖွဲ့စည်းမှုများ၊ ထို့ပြင် လူမှုဆက်ဆံရေး စံသတ်မှတ်ချက်များ ပြန်လည်ထုတ်ပြန်ဖွဲ့စည်းမှုများ အစရှိသည်တို့အတွင်း ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းမှု ဒီဂရီအတိုင်းအတာများ ပါဝင်သက်ဆိုင်နေနိုင်ပေသည်။ ဤအခြေအနေများတွင် ‘ထိခိုက်မှု မရှိပါစေနှင့်’ ဟူသော ချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်း ယှဉ်တွဲတည်ရှိမှုအား ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် လိုအပ်သည့် တည်ရှိနေသော ဖွဲ့စည်းမှုများ နှင့် ဆက်ဆံရေးများအား အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရန် ရှောင်ရှားသွားစေနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အဆင့်အတန်းအခြေအနေများ နှင့် အရင်းအမြစ်များတို့နှင့် ဆက်နွယ်ပြီး တန်းတူညီမျှခြင်းမရှိမှုများ သို့မှမဟုတ် ဘက်လိုက်မှု သို့မဟုတ် မျက်နှာသာပေးမှုများ အစရှိသည်တို့အား ရှောင်ရှားနိုင်ရန်၊ သို့မှမဟုတ် ကျား၊မ လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး အမြစ်တွယ်နေသော တန်းတူညီမျှမှုမရှိခြင်းများအား ရှောင်ရှားနိုင်ရန် အစရှိသည်တို့အတွက်လည်း ကြိုးပမ်းအားထုတ်သင့်ပေသည်။ ၎င်းတွင် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အတိမ်းအစောင်းမခံမှုများ နှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များတို့အား ရှင်းလင်းစွာ လေးစားသမှုထားရှိ၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းများလည်း ပါဝင်မည် ဖြစ်ပြီး၊ နစ်နာသူသားကောင်များ နှင့်/သို့မဟုတ် မိသားစုများတို့၏ သိရှိထားသော ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်ချက်များကိုလည်း ၎င်းတို့သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ ထိရောက်အောင်မြင်မှုအပေါ် ပြောင်းပြန်သက်ရောက်မှု မရှိသေးသမျှအတိုင်းအတာအထိ ဖြစ်နိုင်သမျှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုပြုသင့်ပေသည်။ (2) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် စိတ်ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံအန္တရာယ်ကင်းရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့၊ ပျောက်ဆုံးနေသူများ၏ မိသားစုများ၊ မျက်မြင်သက်သေများ နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်း ပါဝင်သက်ဆိုင်နေသည့် အခြားသော ပါတီအဖွဲ့ မှန်သမျှ အစရှိသည်တို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် စိတ်ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံအန္တရာယ်ကင်းရေးသည် အရေးအကြီးဆုံးပင် ဖြစ်သည်။ နစ်နာသူသားကောင်များ နှင့် ၎င်းတို့ မိသားစုများ၏ လုံခြုံရေး၊ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ထိန်းမှု နှင့် လူမှုဖူလုံရေးတို့သည် အဓိကကျသူ ဇာတ်ကောင်များ အားလုံးအတွက် မည်သည့် ခြားနားချက်များမှမရှိဘဲ သော့ချက်ကျသည့် အဓိက ပူပန်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် ဆက်လက် ရှိနေသင့်ပေသည်။ သင့်တင့်သော ညွှန်းဆိုလွှဲပြောင်းမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ စိတ်ဒဏ်ရာ ရနိုင်ခြေရှိသောသူများနှင့်အတူ အင်တာဗျူးမေးမြန်းမှုများ ဆောင်ရွက်သည့်အခါ၌ ၎င်းတို့အား ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးသည့် ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှုနည်း လမ်းများအား မွေးစားအသုံးပြုခြင်း အစရှိသည်တို့အပါအ၀င် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအား ပံ့ပိုးထောက်ပံ့ပေးရန်အတွက်ငှာ ရှေးဦးစီမံဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပေသည်။ ထို့ပြင် အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များအပေါ် စိတ်ဒဏ်ရာ နှင့် အခြားသော အနှုတ်လက္ခဏာ စိတ်ခံစားချက်သက်ရောက်မှုများ ရရှိစေနိုင်သည့် ဖြစ်ရပ်များအား နည်းနိုင်သမျှနည်းစေရန် နှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ငှာလည်း ဂရုတစိုက် ဆောင်ရွက်မှု ပြုသင့်ပေသည်။23
Bosnia နှင့် Herzegovina - ပျောက်ဆုံးနေသူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ ဥပဒေ (21 အောက်တိုဘာ၊ 2004) ၊ Bosnia နှင့် Herzegovina တရားဝင် ဂေဇက် 50/04 ။
ICRC ပျောက်ဆုံးနေသူများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စံနမူနာဥပဒေ။
UNSC ၊ ဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်း 2474 ၊ ဇွန်လ 11 ရက်၊ 2019 ၊ UN စာရွက်စာတမ်း S/RES.2474.
ဥပမာအားဖြင့် အင်တာပိုလ် (2018) ကပ်ဘေးသားကောင် ဖော်ထုတ်မှု လမ်းညွှန်ချက်၊ အပိုင်း B ၊ နောက်ဆက်တွဲ 1 ၊ အပိုင်း 4.1 အား ကြည့်ရှုပါ။
မျှော်မှန်းချက်များဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအပါအ၀င် မိသားစု နှင့် ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုအား ဆက်စပ် မူစည်းမျဉ်းများအတွင်းတွင် နှင့် ဤလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်၏ အပိုင်း C တို့အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ၌ ပိုမိုအသေးစိတ် ဖြေရှင်းထားသည်။
ဥပမာအားဖြင့် စိတ်ဒဏ်ရာရရှိသူများအား အင်တာဗျူး မေးမြန်းရန်အတွက် အသေးစိတ် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အတူ၊ မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်မှု အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့် OHCHR ၊ လူ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်မှု လက်ကိုင်စာအုပ်၊ အခန်း 12 အား ကြည့်ရှုပါ။
အသေးစိတ်ကျသော ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာများ နှင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်း စီမံရေးဆွဲမှု ပြုလုပ်သင့်ပေသည်။ စိတ်ချယုံကြည်မှုရှိစေရန် နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် လူထု၏ ညှိနှိုင်းပါဝင်မှုများကိုလည်း တိုက်တွန်းအားပေးရန်အတွက်ငှာ ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ တိုင်းတာစီမံချက်များ၏ တည်ရှိမှုကိုလည်း လူထု သတိပြုသိရှိစေရန် ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ တည်ရှိနေသော လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေများ ခွင့်ပြုသည့် အတိုင်းအတာအထိ နစ်နာသူသားကောင်များ၏ မိသားစုများ နှင့် မျက်မြင်သက်သေဖြစ်နိုင်သူများတို့နှင့်စပ်လျဉ်းသော ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အသေးစိတ် စီမံတိုင်းတာဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်း လူထုဒိုမိန်းအတွင်း နေရာချစီမံရပေမည်။ မည်သည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်မဆို တိုက်ရိုက် ညှိနှိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုပြုသူများကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေး တိုင်းတာစီမံဆောင်ရွက်ချက်များအကြောင်း အသိပေး၊
(5) ပွင့်လင်းမြင်သာမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၊ တူးဖော်မှု၊ အထောက်အထားဖော်ထုတ်မှု နှင့် လူ့ခန္ဓာအကြွင်းအကျန်များ ပြန်လည်အပ်နှံမှု အစရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်များ အားလုံးသည် ကာကွယ်ရေး နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေး အားထုတ်မှုများတွင် ပါဝင်သက်ဆိုင်နေသော ပါတီအဖွဲ့များ၊ ပျောက်ဆုံးနေသူများ၏ မိသားစုများ နှင့် လူထုများ အစရှိသည်တို့ အားလုံးအတွက် ဖြစ်နိုင်သမျှ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသင့်ပေသည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် လူထု၏ စိစစ်၊ စစ်ဆေးမှုအား ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် လမ်းညွှန်စီမံမှုပြုရန်အတွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားကာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိ၍ အလွယ်တကူဝင်ရောက်ရယူ သိရှိနိုင်သော တရားဝင် လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်များတို့ကို ဖွဲ့စည်း ထုတ်ပြန်ထားခြင်းသည်
သိရှိစေသင့်ပြီး၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်း ပါဝင်ပတ်သက်မှု မှန်သမျှအတွက်
ကမ်းလှမ်းထောက်ပံ့ပေးသော လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စနစ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကန့်သတ်ချက်များ
ကျွမ်းကျင်သော လက်တွေ့ဆောင်ရွက်သူများသည် ပြဌာန်းထုတ်ပြန်ထားသော/
မှန်သမျှသည် သတင်းအချက်အလက် သိရှိ၊ အသိပေးသော ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုအပေါ်
စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းကိုယ်ထည်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြပြီး၊ အဆိုပါ
ကိုယ်ထည်များမှ အတည်ပြုထားသည့် အရည်အချင်းပြည့်ဝသော အဖွဲ့ဝင်များ၏
နစ်နာသူသားကောင်များ၏ ဂုဏ်သိက္ခာအပေါ် လေးစားသမှု ထားရှိခြင်းဟုဆိုရာတွင်
လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများတို့သည်လည်း အလွယ်တကူ သိရှိနားလည်နိုင်ကာ
ကျန်ရစ်သော ရုပ်အကြွင်းအကျန်များအား လေးစားသမှုဖြင့် ဂရုတစိုက် ကိုင်တွယ်စီမံခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာကိစ္စရပ်များအား အစဉ် ပြန်လည်သုံးသပ်စစ်ဆေးမှု ပြုသင့်သည်။ (3) အချုပ်အနှောင်ကင်း လွတ်လပ်မှု နှင့် ဘက်လိုက်မှုမရှိခြင်း ခွဲခြားဆက်ဆံမှု နှင့် ဘက်လိုက်မှုများ မရှိသည့် ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းအား အရာအားလုံးတွင် ထည့်သွင်းအသုံးချသင့်ပေသည်။24 စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအား ဆောင်ရွက်ရာ၌ ၎င်းသက်ဆိုင်ရာ ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်း၏ ရှေ့မျက်မှောက်တွင် တရားဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ နှင့် ဤသို့အားဖြင့် ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်း၏ ညှိနှိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အတွက် ပံ့ပိုးမှု နှင့် လူထု၏ တာဝန်ယူမှုတို့အား တိုးမြင့်လာစေရန်အတွက်ငှာ မည်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့မဆိုသည် အချုပ်အနှောင်ကင်း လွတ်လပ်မှု ရှိရုံမျှမက ဘက်လိုက်မှုများပါ မရှိဘဲ စီမံဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည့်အပြင် ဤသို့ စီမံလည်ပတ်လျက်ရှိကြောင်းကိုလည်း လူအများ သိရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ပေသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့များသည် ဖြစ်နိုင်သမျှ မိမိတို့၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများသည် နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး သို့မဟုတ် မျိုးနွယ်စု၊ တိုင်းရင်းသားဆိုင်ရာ ဘက်လိုက်မှုများ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုများတို့၏ လက်အောက်တွင်ရှိနေသည်ဟု ယူဆရသော အခြေအနေများအား ရှောင်ရှား၊ ကန့်သတ်ထိန်းချုပ် သို့မဟုတ် လျော့ပါးစေရန် ဆောင်ရွက်သင့်ပေသည်။ သို့သော်လည်း သတိပြုသင့်သည်မှာ အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် မြင့်မားစွာ တင်းကြပ်ထားသော နိုင်ငံရေး နှင့်/သို့မဟုတ် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာများလက်အောက် တွင် ရှိနေပြီး၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုချိန်၌လည်း ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပေသည်။ ၎င်းရလဒ်အနေနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့များသည် အချို့သော မြေမြှုပ်နှံရာနေရာများအား တူးဖော်သည့်အခါ၌ ၎င်းအခြင်းအရာကိုယ်၌သည် အချို့သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ဘက်လိုက်မှုရှိသည်ဟု ယူဆရသောအခြေအနေများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း သတိပြုသင့်ပေသည်။ (4) လျှို့ ၀ှက်စောင့်ထိန်းမှု ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ နှင့် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်သည့် အခြားသော ဒေတာအချက်အလက်များတို့နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး လျှို့ ၀ှက်ေစာင်ထ့နိ်း မှုပြုကြောင်း သေချာအောင်ဆောင်ရကွမ်ှု နှင့် ဂရုတစိကုအ်လေးထားမှုတသ့ို ည် သံသယရှေိသာ နစ်နာသူသားကောင်များ၏ မိသားစုများတို့နှင့် ယုံကြည်မှုအား တည်ဆောက်ရာတွင် နှင့် ၎င်းတို့၏ လုံခြုံအန္တရာယ်ကင်းရေးအား သေချာမှုရှိစေရန်တို့အတွက် အလွန်ပင် အရေးကြီးပြီး၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာများအား အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးနေသည့် ဆွေးမျိုးများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း နှင့် ပျောက်ဆုံးနေသူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဒေတာအချက်အလက်များ နှင့် DNA နမူနာများတို့အား ထောက်ပံ့ခြင်း အစရှိသည်တို့တွင် အဓိကကျသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပေသည်။ လျှို့ ၀ှက်စောင့်ထိန်းမှုပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသော လုပ်ငန်းစဉ်စီမံဆောင်ရွက်မှုများအား ထုတ်ပြန်ထားသင့်ပြီး၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့အတွင်း၌ ပါဝင်သော အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး နားလည်သိရှိ၊ အသုံးချနိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ထားသင့်ပေသည်။ လျှို့ ၀ှက်စောင့်ထိန်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းသော စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် နိုင်ငံ၏ပြဌာန်းချက်များနှင့် တစ်သမတ်တည်းအညီ ရှိသင့်ပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ဆက်သွယ်အသိပေးကာ အများပြည်သူလူထုအတွင်း၌ ရရှိနိုင်စေဖို့ ဆောင်ရွက်ထားသင့်သည်။ ပျောက်ဆုံးသူများ၏ မိသားစုများ နှင့် အခြားသော ရပ်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များတို့သည်လည်း ဤလျှို့ ၀ှက်စောင့်ထိန်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ ကန့်သတ်ချက်များအကြောင်း သတိပြုသိရှိနိုင်စေဖို့ ဆောင်ရွက်ထားသင့်သည်။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသင့်ပေသည်၊ သို့မှသာ လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုအပေါ် လူထု နှင့် မိသားစုများတို့၏ ယုံကြည်လက်ခံနိုင်မှုများအား တိုးမြင့်စေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ပါက လူသား နမူနာစများ သို့မဟုတ် ကိရိယာပစ္စည်းများတို့အား စစ်ဆေးမှုအတွက် အသုံးပြုသော သိပ္ပံနည်းကျ ဓာတ်ခွဲခန်းများ၏ သက်ဆိုင်ရာ အသုံးချလက်ခံနိုင်မှုနှင့် အတူ ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ကျင့်သုံးသော သိပ္ပံနည်းကျ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ရှိနေသော လုပ်ငန်းစဉ်မှန်သမျှကိုလည်း ရရှိနိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ထားသင့်ပေသည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပေါ် ကန့်သတ်ချက်များ မှန်သမျှသည် တင်းကြပ်စွာ ကြပ်မတ်မှုပြုရန် လိုအပ်ပြီး၊ နစ်နာသူသားကောင်များ နှင့် ၎င်းမိသားစုများတို့၏ အခွင့်အရေးများမှစ၍ ဂုဏ်သိက္ခာ နှင့် လျှို့ ၀ှက်စောင့်ထိန်းမှုတို့ဖြင့် တစ်ညီတည်းရှိသင့်ကာ သက်ဆိုင်ရာ ပါဝင်သက်ဆိုင်သူဇာတ်ကောင်များ နှင့် ပါဝင်သက်ဆိုင်နိုင်ခြေရှိသူများ အားလုံး၏ လုံခြုံအန္တရာယ်ကင်းရေး အပါအ၀င် တရားဝင် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ပြုမူသင့်ပေသည်။ (6) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်း၊ မီဒီယာ နှင့် လူထုတို့ဖြင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု နည်းဗျူဟာများ နှင့် (လူမှုမီဒီယာများမှတစ်ဆင့်အပါအ၀င်) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု လမ်းကြောင်းများတို့အား အစောပိုင်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိန်းသိမ်းမှုတို့သည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအပေါ် ယုံကြည်မှု၊ အကောင်းမြင်မှု နှင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုတို့အတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါပြီး၊ မြှုပ်နှံနေရာများ နှင့် ပျောက်ဆုံးမှုများ နှစ်မျိုးစလုံးအား အစီရင်ခံတိုင်ကြားခြင်း အပါအ၀င် အခြားသော သော့ချက်ကျသည့် ရှုထောင့်များနှင့်အတူ အထောက်အထားဖော်ထုတ်မှု နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်များတို့၏ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအား ဖြန့်ကျက်ဆောင်ရွက်နိုင်စေမည် ဖြစ်သည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သား၍ စဉ်ဆက်မပြတ်သော ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုသည် ပွင့်လင်းမြင်သားမှုအတွက် ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအားလည်း ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု နည်းဗျူဟာများသည် စံမျှော်မှန်းမှု ရှိသင့်ပြီး၊ သတင်းအချက်အလက်များ စီးဆင်းမှု နှင့် ပုံမှန် သတင်းအချက်အလက် ပေးပို့မှုတို့အတွက် နှစ်လမ်းသွား ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း ရှိနိုင်စေရန် စီမံသင့်ပေသည်။ (7) လက်တွေ့ကျစစ်မှန်သော မျှော်မှန်းချက်များ ပျောက်ဆုံးသူများ၏ မိသားစုများသည် မိမိတို့ ချစ်ခင်ရသူများကို ဖော်ထုတ်တွေ့ ရှိနိုင်ပြီး၊ ၎င်းတို့အား ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ ပြန်လည်အပ်နှံနိုင်စေဖို့ မျှော်မှန်းချက်ကြီးစွာ ထားရှိတတ်ကြသည်။ သို့သော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ လူသားခန္ဓာကိုယ်အကြွင်းအကျန်များ အား အထောက်အထားဖော်ထုတ်မှု နှင့် ပြန်လည်အပ်နှံမှုတို့သည် အစဉ်ဆိုသလို အဆင်ပြေချောမွေ့ ခြင်းများ မရှိနိုင်ပေ၊ ထို့ပြင် တူးဖော်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်သော ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု နှင့် ပံ့ပိုးမှုတို့အား သေချာစေရန်အတွက်ငှာ မျှော်မှန်းချက်များအား ဖြစ်နိုင်သမျှ စီမံဆောင်ရွက်မှုပြုသင့်ပေသည်။ ရက်စက်ယုတ်မာမှုများအား သိသာထင်ရှားသော ပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကျူးလွန်ခဲ့သည့်နေရာများ၊ အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုများ နှင့် ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ ပမာဏများပြားသောနေရာများ၊ မြေမြှုပ်နှံမှုများအား ရှာဖွေတွေ့ ရှိခြင်း မရှိသေးသည့် ထို့ပြင်/သို့မဟုတ် တူးဖော်၊ ဖော်ထုတ်မှုပြုရန် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် အရင်းအမြစ်များ အကန့်အသတ်ရှိသည့်နေရာများ အစရှိသည့်တို့အတွင်းမှ အခြေအနေများသည့် အခက်အခဲများ အထူး ရှိနိုင်ပေသည်။ အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှု ကာကွယ်ရေး နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်း ပါဝင်နေသည့် ပါတီအဖွဲ့များ အားလုံးသည် မိမိတို့ မစောင့်ထိန်းနိုင်ဘဲ မိသားစုများအပေါ် ကတိက၀တ်များပြုလုပ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားသင့်ပေသည်။
အထောက်အထားဖော်ထုတ်မှု နှင့်/သို့မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်များတို့သည် ဒေတာအချက်အလက်များ မျှဝေခြင်း၏ လိုအပ်ချက် သို့မဟုတ် တာဝန်ဝတ္တရားအား အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီး၊ ဤမျှဝေမှုပြုခြင်း၏ သဘောသဘာဝ နှင့် ရည်ရွယ်ချက်တို့အား ဖြစ်နိုင်သမျှ လုပ်ငန်းစဉ်၏ အစောဆုံးအဆင့်တွင် သိသာထင်ရှားမှုရှိစေရန် ပြုလုပ်ထားသင့်သည်။ မြေတူးဖော်မှု လုပ်ငန်းစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်အား အောင်မြင်စေရန်အတွက်ငှာ ဒေတာမျှဝေမှုပြုလုပ်ခြင်း မှန်သမျှအား သက်ဆိုင်သူ ပုဂ္ဂိုလ်(များ)မှ ခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းအတာအထိ လိုအပ်သောသူများ နှင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတို့အတွက်သာ ကန့်သတ်ထားသင့်ပေသည်။
အထူးသဖြင့် ဤအခြင်းအရာသည် ဥပမာအားဖြင့် အမျိုးသမီးများ၊ သက်ကြီးသူများ၊ စိတ်ဒဏ်ရာရရှိထားသူများ နှင့်/သို့မဟုတ် ကလေးများ အစရှိသည်တို့နှင့်သက်ဆိုင်နေသော အမှုများတွင် ခြားနားသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းကို အသုံးပြုစေနိုင်ပြီး၊ ဤသို့အားဖြင့် လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရာ၌ အချက်အလက် မညီမျှမှုများ သို့မဟုတ် အခက်အခဲများတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပေမည်။
A. ဖော်ထုတ်တွေ့ ရှိမှု နှင့် အန္တရာယ်ကင်းသော အစီရင်ခံတိုင်ကြားမှု
ဤသည်အား ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဆိုဒ်နေရာကို သတိပြုမိသည့် ပထဆုံး တုံ့ပြန်သိရှိသူများ၊ သတင်းထောက်များ သို့မဟုတ် ဒေသခံများတို့မှ ဆောင်ရွက်ကောင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။27 ၎င်းနောက်တွင်မူ ဆိုဒ်နေရာအား ကနဦး စစ်ဆေးမှုပြုသည့်
နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ သင့်တင့်သော ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှုများအား ပြုလုပ်ထားလျက်ရှိစဉ် အတင်းအကြပ်ပြုမူသော ပျောက်ဆုံးမှု ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း စွဲဆိုတိုင်ကြားလာသည့် သက်ဆိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အာဏာပိုင်းများထံသို့ သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား အစီရင်ခံတိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အေဂျင်စီများ/အရာရှိများတို့သည် နောက်ဆက်တွဲ ဆောင်ရွက်မှုအား ပြုလုပ်သင့်ပေသည်။ ဒရုမ်းများ၊ ဂြိုလ်တုများ နှင့် သက်ဆိုင်ပါက ဥပဒေချိုးဖောက်မှုမရှိသည့် စကန်ဖတ်ယူမှု နည်းပညာများ အစရှိသည်တို့ကဲ့သော ကိရိယာများအား စာရွက်စာတမ်း၊ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှုအတွက် နောက်ဆက်တွဲ အသုံးပြုကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပေမည်။
သေချာအောင်ဆောင်ရကွရ်န်အတွကင်ှာ CED အနေနှင့် အစီရင်ခတံငိုြ် ကားခွငန့် ငှသ့် က်ဆငိုေ် သာ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသည့် ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးအား ပြည်တွင်း၌ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုပြုရန် လိုအပ်ပေသည် (CED အပိုင်း 12(1))။ တရားဝင် တိုင်းကြားချက်မရှိသည့်တိုင် အတင်းအကြပ်ပြုမူသော ပျောက်ဆုံးမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ဟု ကျိုးကြောင်းသင့်တော်စွာ ယုံကြည်လက်ခံနိုင်သမျှကာလပတ်လုံး အာဏာပိုင်များသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုပေးရန် လိုအပ်ပေသည် (CED ၊ အပိုင်း 12(2))။
နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များ ဆိဒုေ်နရာမှ ရရှေိသာ သက်သေအထောက်အထား၏ စစ်မနှမ်အှုား သေချာအောင်ဆောင်ရကြွ် ခင်းအပါအ၀င် ထိရောက်မရှုှေိ သာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအား ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ငှာ အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာသည် (ပထမဆုံး တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သူများ အပါအ၀င်) တတိယပါတီအဖွဲ့များကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ မရှိရုံမက အနှောက်အယှက်ပေးမှုများလည်း မရှိစေရန်
နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ
လိုအပ်ပေသည်။ CED အပိုင်း 12(3)(a) တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ
ပဋိပက္ခဖြစ်ရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ပါတီအဖွဲ့များသည် လူသေ
အာဏာပိုင်များထံ၌ ‘၎င်းတို့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သော
အကြွင်းအကျန်များအား မြှုပ်နှံခြင်းမပြုမီ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း
စာရွက်စာတမ်းများ နှင့် အခြားသော အချက်အလက်များတို့ကို ၀င်ရောက်ရယူနိုင်မှု
သိရှိနိုင်သည့် အချက်အလက်များ အားလုံးအား မှတ်တမ်းပြုလုပ်ထားပြီး၊
အပါအ၀င် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအား ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်ငှာ
မြေမြှုပ်နှံမှုတည်နေရာအား အမှတ်အသား ပြုလုပ်ထားရမည် ဖြစ်သည်
လိုအပ်သော အာဏာလုပ်ပိုင်ခွင့်များ နှင့် အရင်းအမြစ်များတို့’ ရှိပေသည်
(CIHL စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းမျဉ်း 116 ၊ GC IV ၊ အပိုင်း 130)။
(အထူးပြုချက်အား စာလုံအနက်ရောင်ရင့်ဖြင့် ပေါင်းထည့်ထားသည်)။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေအတတ်ပညာသည် ကျိုးကြောင်းလိုက်နာတာဝန်ယူေ
အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုအား စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကို စတင်ဆောင်ရွက်သည့်အခါတွင် အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှု ဖြစ်ပေါ်သည်ဟု သံသယရှိသည့် နေရာအား အာဏာပိုင်များထံသို့ ဦးစွာပထမဆုံး အသိပေးကာ အခြေပြုဆောင်ရွက်သွားရမည် ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်း စည်းမျဉ်းစနစ်များအရလည်း အစီရင်ခံတိုင်ကြားမှုပြုရန် တာဝန်ဝတ္တရားကို ချမှတ်ကောင်း ချမှတ်ထားနိုင်ပေသည်။25 သို့သော်လည်း ‘သတင်းပေးသူ’ (ပျောက်ဆုံးနေသူပုဂ္ဂိုလ်၏ ဆွေမျိုး ဖြစ်သည်ဟုတ်စေ၊ မဖြစ်သည်ဟုတ်စေ) သည် အာဏာပိုင်များထံမှ စုံစမ်းထောက်လှန်းခြင်းမခံရရန်၊ သို့မဟုတ် အမည်ဖော်ထုတ်ခြင်းမပြုရန် ဆန္ဒရှိသည့် အခြေအနေများတွင်မူ အဆိုပါသော အစီရင်ခံတိုင်ကြားချက်များ ဖြစ်ပေါ်ချင်မှ ဖြစ်ပေါ်မည် ဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်ကင်းသော အစီရင်ခံတိုင်ကြားမှု - အာဏာပိုင်များထံသို့ အသိပေးရန်နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး အန္တရာယ်ကင်းသော လုပ်ငန်းစဉ်များ အတွက် ပြဌာန်းချက်အား လိုအပ်ပေသည်။26 သက်ဆိုင်သူ ပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် အေဂျင်စီများတို့သည် သံသယဖြစ်ဖွယ်သော အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုအား ပထမဆုံး ဖော်ထုတ်တွေ့ ရှိ သို့မဟုတ် ကြားသိသူများ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပေသည်။ အစီရင်ခံတိုင်ကြားမှုပြုရာ၌ သံသယဖြစ်ဖွယ်သော အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှု၏ တည်နေရာအား အမှတ်အသားပြုလုပ်ထိန်းသိမ်းမှု ပါဝင်သင့်ပေသည် သို့မဟုတ် ၎င်းမှတ်တမ်းအား ပြုလုပ်ပေးသင့်သည်။ ဤသို့အားဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါကဲ့သို့သော တည်နေရာများအား ဖော်ထုတ်နိုင်သည့် ပထ၀ီဒေတာ အချက်အလက်ဆိုင်ရာ
ဆာင်ရွက်မှုကို ဖိအားပေး ဖော်ပြထားပြီး၊ ‘အာဏာပိုင်များအနေနှင့် သက်သေအထောက်အထားအား ခိုင်လုံသေချာမှုရှိစေရန်ငှာ ၎င်းတို့ ရရှိနိုင်သော ကျိုးကြောင်းသင့်တော်သည့် ခြေလှမ်းအဆင့်များကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း’ အကြံပြုထားသည်။28 နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေလက်အောက်မှ နောက်ဆက်တွဲ လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ် I ၏ အပိုင်း 34(2)(b) အရ မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာများအား ကာကွယ်မှုပြုရန် လိုအပ်ပေသည်။ ထို့ပြင် သေဆုံးသူများ၏ ခန္ဓာကိုယ်များ ဖြန့်ကျက်စွန့်ကျဲခံရခြင်း နှင့် ဖြတ်တောက်ခံရမှုများတို့ကို ကာကွယ်ထားမြစ်ထားခြင်းနှင့်အတူ ‘သေဆုံးသူများ လုယက်ယူငင်ခြင်း မခံရစေရန် ကာကွယ်တားဆီးဖို့အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော တိုင်းတာဆောင်ရွက်စီမံမှုများ အားလုံးကို ပြုလုပ်ရန်’လည်း လိုအပ်ပေသည် (CIHL စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းမျဉ်း 113 ၊ ICC St. အပိုင်း29 8(2)(b)(xxi) နှင့် 8(2)(c)(ii) စစ်မက်ဆိုင်ရာ ပြစ်မှု)၊ ထို့ပြင် မြေမြှုပ်နှံရာနေရာအား လေးစားသမှုထားရှိ၍ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းအပါအ၀င် ရုပ်ကြွင်း အကြွင်းအကျန်များအား လေးစားသမှုဖြင့် စွန့်ပစ်ဆောင်ရွက်ရန်လည်း လိုအပ်ပေသည် (စည်းမျဉ်း 115)။ သတ်ဖြတ်သည့် ပြစ်မှုအား ကျူးလွန်ခြင်းမရှိသည့်တိုင် သေဆုံးသူထံမှ ပစ္စည်းခိုးယူခြင်းသည်လည်း ပြစ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပေသည်။30
၀န်ဆောင်မှုများ နှင့် ကိုသြဒိနိတ်များအား မှတ်သိမ်းနိုင်သည့် ကိရိယာများတို့မှတစ်ဆင့် အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်သွားနိုင်မည် ဖြစ်သည် -
ကျန်ရစ်ရပြု ကွင်း များ နှင့် သက်သေအထောက်အထားများ၊ ထြို့ ပင် စံစုမ်းစစ်ဆေးမှုလငိုး များတိ၏့ု
•	ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နေရာရှာဖွေမှု စနစ် (GPS) သို့မဟုတ် စစ်တပ်သုံး
စစ်မှန်မှုအား ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ငှာ ဆိုဒ်နေရာအား ကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုပြုခြင်းသည်
မြေပုံဇယားကိုးကားချက် စနစ် (MGRS)၊ •	မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှ မြေပုံများ၊ •	စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် ရိုက်ယူထားသည့် ဓာတ်ပုံများမှ အခြေအနေပြောင်းလဲမှုပြ ဒေတာအချက်အလက်များ ဆိုဒ်နေရာအား ကနဦး စာရွက်စာတမ်းပြု၊ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အောက်ဖော်ပြပါတို့အား အသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ပေသည် -
အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတစ်ချိန်တည်းတွင်ပင် အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာအား စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာတစ်ခု ဖြစ်စေရန် စွဲဆောင်မှုပြုနိုင်ပြီး၊ သက်သေအထောက်အထားများ ဖျက်စီးခံရနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို တိုးမြင့်စေနိုင်ပေသည်။ ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသော မြေတူးဖော်မှုသည် အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု နှင့်/သို့မဟုတ် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ရည်ရွယ်ချက်များတို့အတွက် လိုအပ်သည့် သက်သေအထောက်အထား စုဆောင်းမှုကို အနှောက်အယှက်၊ ထိခိုက်မှု ဖြစ်စေနိုင်ပြီး၊ သက်သေအထောက်အထားများ၏ သင့်တင့်သော စံပြည့်မှီချက် စုဆောင်းမှုအား
ပျက်ကွက်စေကာ သေဆုံးသူ ရုပ်ကြွင်းများ၏ ပျက်စီးထိခိုက်မှုများကို တိုးမြင့်စေနိုင်ပေသည်။
•	ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊
ခန္ဓာကိယုရ်ပြု ကွင်း များအား မသင်တ့င်စ့ွာ ရှာဖွေဖော်ထတုမ်သှုည်လည်း (လူထ၏ုအမြင်ရှေုထာင့်
•	ဆိုဒ်နေရာအကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည့် ရေးသားချက် သို့မဟုတ် အသံသွင်း မှတ်တမ်းပြုလုပ်ထားမှု၊ •	ပုံဆွဲထားမှု သို့မဟုတ် မြေပုံပေါ် အမှတ်အသားပြုလုပ်ထားမှု။
အပါအ၀င်) ကိုယ်တွယ်စီမံမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး လေးစားသမှုမရှိခြင်းကို ဦးတည်သွားစေနိုင်ပြီး၊ မိသားစု၏ စိတ်ဒဏ်ရာအား ပိုမိုဆိုးရွားသွားစေနိုင်ပါသည်။ အကာအကွယ်များ စီမံဆောင်ရွက်ထားခြင်းအားဖြင့် ခွင့်ပြုချက်မရှိသည့် ရုပ်ပုံ နှင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ဖွယ် ပုံရိပ်များ ရိုက်ကူး၊ ဖြန့်ဝေခြင်းများတို့ကို တားဆီးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဥပမာအနေနှင့် 2015 Iraqi ဥပဒေ နံပါတ် 13 ၊ အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုကိစ္စရပ်များ နှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ 2006 ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချက် ဥပဒေ နံပါတ်5၊ အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုများ ကာကွယ်ရေး၊ အပိုင်း9အား ကြည့်ရှုပါ။ ၎င်းအတူ အပိုင်း 231a လက်အောက်ရှိ Bosnia နှင့် Herzegovina 2003 ပြစ်မှုကုဒ်ဥပဒေသည် အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာအား အစီရင်ခံတိုင်ကြားမှုပြုရန်ပျက်ကွက်ခြင်းအား အကျဉ်းချမှတ်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည် (Bosnia နှင့် Herzegovina - ပြစ်မှုဆိုင်ရာကုဒ်ဥပဒေ (ဇွန်လ 27 ၊ 2003) ၊ Bosnia နှင့် Herzegovina တရားဝင် ဂေဇက် 37/03)။
ဥပမာအနေနှင့် ICMP သည် ၎င်း၏ဆိုဒ်နေရာ တည်နေရာရှာဖွေမှု မှတစ်ဆင့် မည်သူမဆိုမှ အစီရင်ခံတိုင်ကြားမှုပြုနိုင်ရန်ငှာ အွန်လိုင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စင်တာတစ်ခုအား ကမ်းလှမ်းထောက်ပံ့ပေးထားသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု (2016)၊ နိုင်ငံတကာပြစ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပထမဆုံး တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သူများအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ အခြေခံ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်များ။
Treskavica အပြိုင် Croatia ၊ စီရင်ချက်၊ ECtHR လျှောက်လွှာနံပါတ် 32036/13 (ဧပြီ 12 ၊ 2016) အပိုဒ် 60 တွင် ဤ၌ သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ သက်သေအထောက်များ ပါဝင်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုထားသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပြစ်မှုဆိုင်ရာ မှုခင်းနေရာအား မည်သို့ ကိုင်တွယ်စီမံရမည်နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအား မှုခင်းနေရာအတွက် လုံခြုံရေးစီမံခြင်း၊ စာမျက်နှာ 65 မှ အပိုင်း 7.1 ရှိ နိုင်ငံတကာ ပြစ်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းများအား ပံ့ပိုးထောက်ပံ့ခြင်း 2011 လက်ကိုင်စာအုပ်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။ Minnesota လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်အတွင်း၌ ဖော်ပြထားသည်မှာ ‘[a] မှုခင်းနေရာအား အခွင့်အရေးရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် တတ်နိုင်သမျှ အစောဆုံး ကာကွယ်စီမံမှု ပြုသင့်ပြီး၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိသော ၀န်ထမ်းများအား ၀င်ရောက်ခွင့် မပေးသင့်ပေ’ (စာမျက်နှာ 14 ၊ အပိုဒ် 59 မှ)။
နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုတရားရုံးဆိုင်ရာ ရောမ ထုတ်ပြန် ပြဌာန်းချက် (ဇူလိုင် 17 ၊ 1998 တွင် မွေးစားကျင့်သုံးသည်၊ ဇူလိုင် 1 ၊ 2002 တွင် အားထုတ်ဆောင်ရွက်မှုပြုသည်) 2187 UNTS3(အကျဉ်းချုပ် ICC St.)။
Pohl နှင့် အခြားသော Nuremberg ရှိ US စစ်တပ် သမာဓိခုံအဖွဲ့ (နိုဝင်ဘာ3၊ 1947)။
ကာကွယ်မှုများ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အထူးသဖြင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ် ရုပ်ကြွင်းအကျန်များ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု၊ မလေးမစားလုပ်ဆောင်ခံရမှု၊ ဓားပြတိုက်ခံရမှု၊ တိရစ္ဆာန်များ၏ စားသုံးခံရမှု
အစရှိသည်တို့ မရှိစေရန် ထို့အပြင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူသည် ထောက်လ၊ှန်းစစ်ဆေးမှုများအား ချိုးဖောက်၍ ဒုတိယအဆင့် ဆိုဒ်နေရာများသို့ ခန္ဓာကိုယ်ထည်များအား ရွှေ့ပြောင်းမှု/ပြန်လည်နေရာချမှုများ မရှိစေရန် အစရှိသည်တို့အတွက် အကာအကွယ်ပြုပေးပေသည်။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ကျူးကျော်ဖြတ်သန်းခြင်း နှင့် ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းတို့သည် ပြည်တွင်းစည်းမျဉ်းစနစ်အတွင်း ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ကောင်း သတ်မှတ်နိုင်ပေသည်။31
နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေများအရ ထိရောက်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုအား ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ဝတ္တရားဆိုသည်မှာ အမှီအခိုကင်း လွတ်လပ်၍ လုံလောက်မှုရှိကာ (ဥပမာအားဖြင့် CED အပိုင်း 12) အချက်အလက်များကို သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပြီး၊ တာဝန်ယူထားသူများအား ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်သော
ထိရောက်မရှုှေိ သာ ကာကွယ်ေရး နည်းစနစ်အတွက် ကြိုတင်စမီေံဆာင်ရကွမ်အှုခြေအနေများ -
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ဆိုလိုသည်။33 ဤတွင် ပြီးပြည့်စုံ၍ တိကျမှန်ကန်မှုရှိသော
•	အခြားသော အရင်းအမြစ်များနှင့်အတူ တြိဂံပိုင်းခြားမှတ်သား၍ အစီရင်ခံတင်ပြချက်များ
မှတ်တမ်း နှင့် သေဆုံးမှု ဒဏ်ရာများနှင့် အကြောင်းအရင်းအား လွတ်လပ်စွာ
နှင့် သက်သေအထောက်အထားအား အတည်ပြုမှု။ •	အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာများအား ၎င်းတို့၏ စကေးပမာဏ နှင့် ၎င်းတို့ တည်ရှိသော ဒေသခံအခြေအနေပေါ်တွင်မူတည်ကာ မြေပုံရေးဆွဲ၍ စာရွက်စာတမ်း၊ မှတ်တမ်းပြုလုပ်မှု။ လိအုပ်သော ကာကွယ်ေရး ခြေလှမ်း အဆင်မျ့ားတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ကောင်း ပါဝင်ပေမည် •	ဆိုဒ်နေရာအား လုံခြုံရေးချခြင်း နှင့် ၀င်ရောက်မှုများအား လုံခြုံစောင့်ချခြင်း မြေနေရာပေါ်သို့ ၀င်ရောက်ရန်ငှာ တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်32 အား ရယူသင့်ပေသည်။ ဤတွင် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှု နှင့် လက်တွေ့ကျင့်သုံးရန် ခွင့်ပြုချက်တို့လည်း လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်ပေမည်။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ သိသာထင်ရှားမှုရှိသော ဆိုဒ်နေရာများ၏ တည်ရှိမှု၊ ပထ၀ီဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ နှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့အားဖြင့် ၀င်ရောက်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိကောင်း ရှိပေမည်။ ဆိုဒ်နေရာပေါ်၌ ရှိနေသော အန္တရာယ်များဟုဆိုရာတွင် မပေါက်ကွဲသေးသည့် လက်နက်ခဲယမ်းများ နှင့် ညစ်ညမ်းထိခိုက်မှုများလည်း ပါဝင်ပေသည်။ •	ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ တိုင်းတာစီမံဆောင်ရွက်ချက်များတွင် ဖော်ပြပါတို့ ပါဝင်ကောင်း ပါဝင်ပေမည် - အပြင်ပိုင်း နယ်ပယ်အ၀န်းအား လုံခြုံမှုရှိစေရန် ကာကွယ်ခြင်း၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရှိနေသည့် အကြွင်းအကျန်များအား ကာကွယ်ရန် မြေပြင်ညီ ဖုံးလွှမ်းလုပ်ဆောင်မှု နှင့် လုံခြုံရေး အစောင့်များ နှင့် မြေနေရာအား စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း။ အဆိုပါသော တိုင်းတာစီမံဆောင်ရွက်ချက်များသည် ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအကြား ကာလကြာချိန်၊ ဒေသခံ အခြေအနေ နှင့် ဆိုဒ်နေရာ၏ အကာအကွယ်ကင်းမဲ့မှု (ဆိုလိုသည်မှာ အခြားပစ္စည်းများ နှင့် တိရစ္ဆာန်များတို့ဖြင့် ထိတွေ့ နိုင်ခြေရှိမှု) အစရှိသည့် အချက်များအပေါ်တွင်လည်း အမှီပြုနေပေသည်။ ဆိုဒ်နေရာအား လုံခြုံအောင်ဆောင်ရွက်ရာ၌ လူထု၏စိတ်ခံစားချက်များဖြင့် ဆန့်ကျင်နိုင်ခြေရှိသောကြောင့်ငှာ ကာကွယ်မှုများ ကမ်းလှမ်းလာသူများအတွက် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်ချက်များ ပြုလုပ်ပေးရန်လည်း လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်ပေမည်။ •	ဥပမာအားဖြင့် နိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသော စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများအတွက်မူ
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှုတို့အတွက် သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ သက်သေအထောက်အထား နှင့် အလောင်းခွဲစိတ်ခြင်းများအား လုံခြုံမှုရှိစေခြင်းများလည်း ပါဝင်သည်။34 စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် အချက်အလက်များကို လက်ခံရယူရန်အတွက် လုံလောက်သော အခွင့်အာဏာ ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၊ တာဝန်ယူကိုင်တွယ်ရန် အရာရှိဝန်ထမ်းများ ရှိရပေမည်။ ၎င်းအား ချက်ချင်း မဆိုင်းမတွ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်၊ ခြုံငုံသုံးသပ်ရလျှင်မူ ၎င်းသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုရန် စဉ်ဆက်မပြတ် တာဝန်ဝတ္တရားတစ်ရပ်35 ဖြစ်သော်လည်း နည်းဥပဒေသ တာဝန်ဝတ္တရားတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး၊ အဆုံးသတ်တစ်ရပ် မဟုတ်ပေ။36 လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အမေရီကန် အတွင်းတရားရုံးသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုအား ပြုလုပ်ရာ၌ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အတိုင်းအတာ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်စဉ်များ၏ ရှုပ်ထွေးမှုများတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုပြုလုပ်ရန် အထူးဖိအားပေးဖော်ပြထားပြီး၊37 ဤသည်မှာ အမှန်တရားအား သိရှိပိုင်ခွင့်နှင့်အညီ ‘စုပေါင်း ဆောင်ရွက်ချက် ပတ်တန်များအား သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ချက်အပါအ၀င် ပြီးပြည့်စုံမှုအရှိဆုံး သမိုင်းဝင် ဖြစ်နိုင်ခြေ အမှန်တရားအား’38 အောင်မြင်ရယူနိုင်ရန် ဖြစ်သည် (ဥပမာအားဖြင့် CED အပိုင်း 24(2))။ အပိုင်း 12(4) အတွင်း၌ CED မှ ဆက်လက်၍ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်မှာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် ‘စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခြင်းအား အဟန့်အတားဖြစ်စေသည့် အပြုအမူများအား တားဆီး၊ ပိတပ်င်ရန်အတွကင်ှာ လိအုပ်သော တိငုး တာစီမေံဆာင်ရကွခ်ျက်များအား’ ပြုလုပ်ရပေမည်။ သင့်တော်ပါက နိုင်ငံများ နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အေဂျင်စီများတို့အကြား နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများလည်း ပါဝင်ကောင်း ပါဝင်ပေမည် (CED-လမ်းညွှန် မူစည်းမျဉ်းများ၊ မူစည်းမျဉ်း 3(4))။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ပန်းတိုင်များကိုသာလျှင် စစ်မှန်စွာ ရှာဖွေလျက်ရှိသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည် ဥရောပကွန်ဗင်းရှင်း အပိုင်း2အရ လိုအပ်သည့် ‘ထိရောက်မှုရှိသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ စံသတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ပြည့်စုံစွာ လုံလောက်ကိုက်ညီမှု’ ရှိချင်မှ ရှိပေမည်။39
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၀င်ရောက်စစ်ဆေးရယူနိုင်မှုသည် အစဉ်ဆိုသလို မဖြစ်နိုင်ပေ။
Orentlicher မူစည်းမျဉ်းများ40အရ ‘ဥပဒေရေးရာ စီမံစီရင်ချက်များ
ဂြိုလ်တုပုံရိပ်များမှတစ်ဆင့် ဆိုဒ်နေရာပြင်ပမှ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းသည်လည်း
မည်သို့ပင်ဆိုစေသော်ငြား နစ်နာသူသားကောင်များ နှင့် မိသားစုများတို့သည်
ရရှိနိုင်သော ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ တိုင်းတာဆောင်ရွက်ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်ပေသည်။
အကယ်၍ နစ်နာသူသားကောင်၏ ကံကြမ္မာမှာ သေဆုံးမှု သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးမှု
ဆိုဒ်နေရာသည် ထိခိုက်ထားပြီးသည်ဖြစ်စေ ထိခိုက်ထားခြင်းမရှိသည်ဖြစ်စေ အကာအကွယ်များအား ဆောင်ရွက်မှုပြုသင့်ပေသည်။
ဖြစ်သည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်၌ ချိုးဖောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမှန်တရားအား သိရှိပိုင်ခွင့် အကြွင်းမဲ့ ရှိပေသည်’။ နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ မိသားစုများသည် မိမိတို့ မိသားစုဝင်များ၏ ကံကြမ္မာအကြောင်း သိရှိပိုင်ခွင့် ရှိပြီး၊ နိုင်ငံတော်အနေနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ထောက်ပံ့ပေးရန် အရင်းအမြစ်များ ထားရှိကောင်း ထားရှိရပေမည် (နောက်ဆက်တွဲ လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ် I ၏ အပိုင်း 32)။ CIHL စည်းမျဉ်းများ၏ စည်းမျဉ်း 117 အရ အကြံပြုထားသည်မှာ နိုင်ငံတကာအဆင့်နှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မဟုတ်သော လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ နှစ်ရပ်စလုံးမှ ပဋိပက္ခ၏ သက်ဆိုင်သူ ပါတီအဖွဲ့များသည် ‘ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း အစီရင်ခံတိုင်ကြားခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် တာဝန်ယူရန်ငှာ သင့်တင့်သော တိုင်းတာစီမံဆောင်ရွက်ချက်များ အားလုံးကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်’။
ဥပမာအားဖြင့် 2015 Iraqi ဥပဒေ နံပါတ် 13 ၊ အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှု ကိစ္စရပ်များ နှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ 2006 ပြင်ဆင်ချက် ဥပဒေ နံပါတ်5၊ အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုများ ကာကွယ်ရေး။
ပျောက်ဆုံးနေသူ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ရှာဖွေရန်အတွက် 2019 လမ်းညွှန် မူစည်းမျဉ်းများ၏ မူစည်းမျဉ်း 10(3) သည် ‘စစ်တပ် နှင့် ရဲဌာန၀န်ဆောင်မှုများ၊ ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဆိုင်မှုမြေများ အစရှိသည်တို့ အပါအ၀င် ပျောက်ဆုံးသူ ရှိကောင်း ရှိနေနိုင်မည့် နေရာများ အားလုံးသို့ ကြိုတင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်းမရှိဘဲ လည်ပတ်စစ်ဆေးနိုင်ရန်ငှာ အာဏာထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း အပြည့်အ၀’ အပါအ၀င် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အာဏာပိုင်များထံသို့ ကန့်သတ်ချက်များမရှိဘဲ ၀င်ရောက်တွေ့ဆုံနိုင်မှုအား တောင်းဆိုထားသည်။ ဤတွင် လိုအပ်ပါက ‘ရှာဖွေမှုနှင့်သက်ဆိုင်သော ဆိုဒ်နေရာများအား ထိန်းသိမ်းမှု’ လည်း ပါဝင်သင့်ပေသည် (ibid)။
Kukhalashvili နှင့် အခြားသူများ အပြိုင် Georgia ၊ စီရင်ချက်၊ ECtHR လျှောက်လွှာ နံပါတ် 8938/07 နှင့် 41891/07 (ဧပြီ2၊ 2020) အပိုဒ် 129။
Ibid ၊ အပိုဒ် 129 တွင်။
Aslakhanova နှင့် အခြားသူများ အပြိုင် Russia ၊ စီရင်ချက်၊ ECtHR လျှောက်လွှာ နံပါတ် 2944/06 နှင့် 8300/07 ၊ 50184/07 ၊ 332/08 ၊ 42509/10 (ဒီဇင်ဘာ 18 ၊ 2012) အပိုဒ် 230။
Da Silva အပြိုင် United Kingdom ၊ Grand Chamber စီရင်ချက်၊ ECtHR လျှောက်လွှာ နံပါတ် 5878/08 (မတ်လ 30 ၊ 2016) အပိုဒ် 231–238 ၊ ထိရောက်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အတွက်ငှာ Grand Chamber ကန့်သတ်ချက်စည်းမျဉ်းများ အကျဉ်းချုပ် အပြည့်အ၀အား ပေးအပ်ခြင်း။
Massacres of El Mozote နှင့် အခြားသော နေရာများ အပြိုင် El Salvador ၊ ကောင်းကျိုးအပေါ် စီရင်မှု၊ စစ်လျော်ကြေးများ နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အမေရီကန်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တရားရုံး အတွဲဆက်များ C နံပါတ် 252 (အောက်တိုဘာ 25 ၊ 2012) အပိုဒ် 299။
Valle Jaramillo နှင့် အခြားသော အပြိုင် Colombia ၊ ကောင်းကျိုးအပေါ် စီရင်မှု၊ စစ်လျော်ကြေးများ နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အမေရီကန်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တရားရုံး အတွဲဆက်များ C နံပါတ် 192 (နိုဝင်ဘာ 27 ၊ 2008) အပိုဒ် 102။
Cyprus အပြိုင် Turkey ၊ Grand Chamber စီရင်ချက်၊ ECtHR လျှောက်လွှာ နံပါတ် 25781/91 (မေလ 10 ၊ 2001) အပိုဒ် 135။
လူ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကုလသမ္မဂ ကော်မရှင်၊ တိုက်ပွဲ ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွှတ်ခွင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် မူစည်းမျဉ်းတွဲများအား ပြင်ဆင်ရန်ငှာ အနှောင်အဖွဲ့ကင်း လွတ်လပ်သော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ အစီရင်ခံချက်၊ (ဖေဖော်ဝါရီ 18 ၊ 2005) UN စာရွက်စာတမ်း E/CN.4/2005/102/Add.1 (အကျဉ်းချုပ် Orentlicher မူစည်းမျဉ်းများ) မူစည်းမျဉ်း 4။
(2) ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်း ၀င်ရောက်မှု နှင့် ပြောင်းပြန်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုအား နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုများ
၏ ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက်
•	စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်း၊ နှင့် လက်တွေ့ကျသော
2019 လမ်းညွှန်ချက်များအရ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စံသတ်မှတ်ချက်များသည် အနှောင်အဖွဲ့ကင်း လွတ်လပ်မှု နှင့် ဘက်လိုက်ခြင်းမရှိမှု (လမ်းညွှန်ချက် 7)၊ တိကျသေသပ်မှု (လမ်းညွှန်ချက် 8)၊ လက်ငင်းလုပ်ဆောင်မှု (လမ်းညွှန်ချက် 9) နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု (လမ်းညွှန်ချက် 10) အစရှိသည့် မူစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီရှိရန် လိုအပ်ပြီး၊ ‘ရိုးသားစစ်မှန်မှု နှင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံးသော စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်များအား လေ့လာစောင့်မတ်’ရန်ငှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများအနေနှင့် နိုင်ငံတကာ မြစ်မှုဆိုင်ရာ တရားရုံးနှင့်အညီ လိုက်နာမှုရှိရပေမည်။42
စီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောပြ၍ ဆက်ဆံရေးများ နှင့် ယုံကြည်မှုအား တည်ဆောက်ခြင်းသည် အရေးကြီးပေသည်။ ဤသို့အားဖြင့် ဆိုဒ်နေရာသို့ ၀င်ရောက်မှု၊ ၎င်းတွင် ရှိနေသည့်အရာများ၊ အချက်အလက်များ နှင့် လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုအား လက်သင့်ခံမှုတို့ကို လုံခြုံစောင့်ကြပ်မှုပြုရန် အထောက်အကူဖြစ်စေပေမည်။ •	အစီအစဉ်ရေးဆွဲမှုပြုရာ၌ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ စစ်မှန်မှုအား ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိစဉ် တစ်ဖက်တွင်လည်း ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်း၏ သက်ရောက်မှုအား လျော့ချရန် မျှော်မှန်း၊ ဆောင်ရွက်ထားသင့်ပေသည်။ (3) အရင်းအမြစ်များ၊ အဖွဲ့ နှင့် ရှာဖွေရယူမှုတို့အတွက် အစီအစဉ်များ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် မည်သည့် အရင်းအမြစ်များအား လိုအပ်ပြီး၊ မည်သည်တို့ကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြတ်သားသည့် ငွေကြေးလျာထားချက် နှင့်
အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုအား စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော တရားမ၀င် သေဆုံးမှုများအား ပိုမိုကျယ်ပြန့် ထိရောက်စွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် ပေါင်းစပ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ပေမည်။ မျက်မြင်သက်သေများ၊ ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများတို့မှ ထောက်ပံ့ပေးသည့် အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမ(ှု များ)နှင့် သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များသည် မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာများအား ကာကွယ်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုရန်အတွက်ငှာ အလွန်အသုံးဝင်သော အချက်အလက်များ
အစီအစဉ်တစ်ခုအား စုစည်းဆောင်ရွက်ထားရပေမည်။ ဤတွင် တာဝန်ခန့်အပ်မည်ဖြစ်သော အဖွဲ့၏ အရွယ်အစား နှင့် ဖွဲ့စည်းမှု၊ ၀န်ထမ်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍများ (ဖြစ်နိုင်သမျှ အလုပ် ဆက်တိုက်ဆောင်ရွက်သွားစေနိုင်ရန် သေချာအောင် ဆောင်ရွက်ထားပါ)၊ ထို့ပြင် အလုပ်ခန့်အပ်မှုအဆင့် အစရှိသည်တို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။47 သင့်တော်ပါက ရေရှည် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် (လိုအပ်သော ထရိန်နင်ပေးအပ်မှုများနှင့်အတူ) ဒေသခံ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများအား အသုံးပြုရန်လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
(4) အန္တရာယ်ကင်းရေး နှင့် လုံခြုံရေးအတွက် အစီအစဉ်များ
Minnesota လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော တရားမ၀င်
ဆိုဒ်နေရာ၏ လုံခြုံရေးနှင့်အတူ ၀န်ထမ်းများတို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
သေဆုံးမှုများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် အောက်ဖော်ပြပါသော အနည်းဆုံး သတ်မှတ်ချက် စည်းမျဉ်းများတို့ကို ပြဌာန်းထားသည် - ‘(a) နစ်နာသူ သားကောင်(များ)အား ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်၊ (b) သေဆုံးမှု အကြောင်းအရင်း သက်သေပြချက်၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သ(ူ များ)၏ အထောက်အထား၊ နှင့် သေဆုံးမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသော အခြေအနေများတို့၏ အထောက်အထားပစ္စည်းများ အားလုံးအား ရှာဖွေဖော်ထုတ်၊ ထိန်သိမ်းမှုပြုရန်၊ (c) ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော မျက်မြင်သက်သေများအား ဖော်ထုတ်၍ သေဆုံးမှု၊ နှင့် သေဆုံးမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသော အခြေအနေများတို့နှင့်ပတ်သက်သည့် ၎င်းတို့၏ အထောက်အထားသက်သေများအား ရယူရန်၊ (d) သေဆုံးမှု အကြောင်းအရင်း၊ ပုံစံ၊ နေရာ နှင့် အချိန်တို့အပြင် ၀န်းကျင်အခြေအနေများ အားလုံးနှင့် စပ်လျဉ်းသည်များအား
လုံခြုံရေးများတို့သည် အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်ပေသည်။ အချို့သောဆိုဒ်နေရာများသည် ရာသီဥတုအခြေအနေများကြောင့်ငှာ တူးဖော်မ48ှုပြုရန်အတွက် အလွန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည် သို့မဟုတ် အန္တရာယ်မကင်းပေ။ အဆိပ်များ၊ မြေမြှုပ်မိုင်းများ နှင့် လူလုပ်ဖောက်ခွဲပစ္စည်းများ (IED) ကဲ့သို့သော အန္တရာယ်များအတွက် အထူးကျွမ်းကျင်သူများ၏ ပံ့ပိုးထောက်ပံ့မှုအား လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်ပေမည်။ ဆိုဒ်နေရာ လုံခြုံအန္တရာယ်ကင်းရေးအပြင် ဆိုဒ်နေရာသို့ အသွား၊အပြန် ၀န်ထမ်းများအား ပို့ဆောင်မှု နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ ပြုလုပ်စဉ်အတွင်း လုံခြုံမှုများရှိစေရန်လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပေသည်။ (5) နယ်ပယ်အကျယ်အ၀န်း၊ စကေးအတိုင်းအတာ နှင့် နောက်ဆက်တွဲများတို့အတွက်
သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ရန်။ (…) နှင့် (e) သေဆုံးမှုအတွင်း ပါဝင်သက်ဆိုင်နေသူများ၊
နှင့် သေဆုံးမှုအတွက် ၎င်းတို့ တစ်ဦးစီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားအား သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ရန်’
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခု၏ အချိန်စကေးသတ်မှတ်ချက်များ နှင့်
(D.1.25. စာမျက်နှာ7တွင်၊ ခြေစည်းမှတ်ချက်အား ချန်လှပ်ထားသည်)။
အ၀န်းအတိုင်းအတာများတို့အပါအ၀င် နယ်ပယ်အကျယ်အ၀န်းအား အုပ်စုလိုက်
အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကောင်းမွန်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အလေ့အကျင့်အား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ငှာ အထူး အခြေအနေများ အစီအစဉ်ရေးဆွဲမှုအဆင့်
မြေမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ တူးဖော်မှုများ နှင့် လေ့လာသုံးသပ်မှုတို့၏ စကေးအတိုင်းအတာ နှင့် နောက်ဆက်တွဲများတို့တွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုပြုရမည် ဖြစ်သည်။ (6) စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီဖြစ်သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် အစီရင်ခံတိုင်ကြားချက်တို့အတွက် အစီအစဉ်များ
(1) ဆက်စပ် အစီအစဉ်ရေးဆွဲမှုဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များ
စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီဖြစ်သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ၊
•	ပျောက်ဆုံးသူများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အားထုတ်မှုအား
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်ခံထားသည့် အထောက်အထားဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ၊
ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါတွင် အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာများအတွက် မည်သည့်
နှင့် သက်သေအထောက်အထား နှင့် မှတ်တမ်းများ ကိုင်တွယ်မှု/စီမံမှုတို့အတွက်
အဖွဲ့အစည်းမှ အလုံးစုံ တာဝန်ယူမှုပြုမည်နည်း။44
လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်များ အစရှိသည်တို့အား အသုံးပြုမှုသည် လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အရည်အသွေး၊
•	အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုအား တူးဖော်မှု၊ အထောက်အထားရှာဖွေ ဖော်ထုတ်မှု နှင့် လူ့ရုပ်ကြွင်း အကြွင်းအကျန်များအား ပြန်လည်အပ်နှံမှု အစရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတို့အား မည်သူမှ စီစဉ်သင့်သနည်း။
တစ်သမတ်တည်းဖြစ်မှု နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတို့အပြင် သဘောတူလက်ခံမှုကို သေချာစေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု စနစ်တစ်ခုအားလည်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ပြင်ဆင်ထားသင့်သည်။
•	စီစဉ်ရေးဆွဲထားသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ နယ်ပယ်အကျယ်အ၀န်းမှာ မည်သို့နည်း။
(7) တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသည့် အချက်များအတွက် အစီအစဉ်များ
•	မည်သည့်အဆင့်သော တာဝန်ယူမှုနှင့်အတူ မည်သည့် အထွေထွေ
ညစ်ညမ်းပျက်စီးမှု၊ ရောနှောပေါင်းစပ်မှု နှင့် တတိယပါတီအဖွဲ့ ‘တူးဖော်မှု’ များတို့သည်
စည်းကမ်းကြပ်မတ်ရေး အဖွဲ့များအား ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ထားဖို့ လိုအပ်သနည်း။45
အစီအစဉ်ရေးဆွဲမှုအဆင့်အပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပေသည်။
•	မည်သည့် နောက်ဆက်တွဲ အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်များတို့ ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ခြေရှိသနည်း၊ ထို့ပြင် ၎င်းတို့သည် မည်သို့ စုပေါင်း၍ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားကြမည်နည်း။ •	အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် အခြားသော/ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် မည်သို့ ကျင့်သုံးစီမံသွားမည်နည်း။46
ဂျနီဗာ အကယ်ဒမီ နှင့် နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီ ကော်မတီ (ICRC) (2019) ၊ နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုများအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ - ဥပဒေ၊ မူဝါဒ နှင့် ကောင်းမွန်သော အလေ့အကျင့်။
နိုင်ငံတကာ ပြစ်မှုတရားရုံး (2008) ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများအတွက် ကျင့်ဝတ်ကုဒ်၊ ICC/AI/2008/005 အပိုင်း 4.1။
ဥပမာအားဖြင့် Minnesota လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်သည် အင်တာဗျူးမေးမြန်းမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သော အသေးစိတ် လမ်းညွှန်ချက်များ အပါအ၀င် အင်တာဗျူးမေးမြန်းမှုများ နှင့် မျက်မြင်သက်သေ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အပိုင်းအား ပြဌာန်းဖော်ပြထားသည် (ပုဒ်မ V, B. စာမျက်နှာ 33-35 တွင)် ။
ဤသည်မှာ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်မှု၊ တရားစီရင်စု နှင့် ပြဌာန်းမှုများတို့အပေါ် မူတည်မည်ဖြစ်သည်။
အဖွဲ့၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှင့် ကျွမ်းကျင်သူများတို့နှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ဆက်တွဲ2အား ကြည့်ရှုပါ။ ကပ်ဘေး သားကောင်များ ဖော်ထုတ်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍများနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များအတွက်မူ နောက်ဆက်တွဲ 8 - အင်တာပို၏ ကပ်ဘေးသားကောင် ဖော်ထုတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် DVI စီမံခန့်ခွဲမှု အခန်းကဏ္ဍများအား ကြည့်ရှုပါ။
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော တရားမ၀င် သေဆုံးမှုများအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက် အထွေထွေ ပြဌာန်းဖော်ပြချက်များအား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခု လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော Minnesota လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်၊ ပုဒ်မ IV (စာမျက်နှာ 12-15) တွင် တွေ့ ရှိနိုင်သည်။ မှုခင်းနေရာများ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် နောက်ဆက်တွဲ လမ်းညွှန်ချက်များကိုမူ Minnesota လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်များ၊ ပုဒ်မ V ၊ စာမျက်နှာ 30-32 တွင် တွေ့ ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သက်ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ၊ ကျွမ်းကျင်မှု နှင့် ရေရှည်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတို့နှင့်အတူ အရန်ထောက်ပံ့မှု လုပ်ငန်းတွဲများအား သေချာစေရန် စီမံထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များသည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်ကောင်း ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။
UNAMI နှင့် OHCHR (2018) ရက်စက်ယုတ်မာမှုများအား မြေလှန်တူးဖော်ခြင်း - ယခင် ISIL မှ ထိန်းချုပ်သည့် နယ်နိမိတ်အတွင်းမှ အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုများ။
(8) အစီအစဉ်နေရာချမှု၊ ဒေတာအချက်အလက် သိုလှောင်မှု၊ ထိန်းသိမ်းမှု နှင့်
သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်း
အထက်ပါ အစီအစဉ်ရေးဆွဲမှုအဆင့်များနှင့် တစ်ညီတည်းဖြစ်သည့် သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နယ်ပယ်အကျယ်အ၀န်းနှင့်အညီ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ နှင့် ဆက်စပ်
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းတွင် အောက်ဖော်ပြပါတို့ လိုအပ်မည်
အထောက်အထားများတို့မှ ကိုးကားနမူနာများ၊ နမူနာများတို့အား စီစဉ်နေရာချမှု (အသုံးပြုမှု
နှင့် စွန့်ပစ်မှုတ)ို့ အား ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ထားသင့်ပေသည်။ နိုင်ငံ၏ ဒေသတွင်း ဒေတာ ပြဌာန်းချက်များနှင့်သာမက နိုင်ငံတကာပြဌာန်းချက်များနှင့်လည်း တစ်ညီတည်းဖြစ်သည့် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု၊ ဒေတာအချက်အလက် ကာကွယ်မှု နှင့် ထိန်းသိမ်းမှုများတို့အပါအ၀င် ဒေတာအချက်အလက် အားလုံးအတွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိသော ဖွဲ့စည်းမှုများအား နေရာချစီစဉ်ထားဖို့ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။49 (9) လူသားရုပ်ကြွင်းကျန်များ ပြန်လည်အပ်နှံမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့်/သို့မဟုတ် တူးဖော်ပြီးနောက် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုများတို့အတွက် အစီအစဉ်များ တူးဖော်မှုအား စတင်မလုပ်ဆောင်မီတွင် လူ့ရုပ်ကြွင်းများ ပြန်လည်အပ်နှံမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ နှင့် အကယ်၍ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်ခြင်းမရှိသည့် အခြေအနေများတွင်မူ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု သို့မဟုတ်
(1) စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီဖြစ်သည့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအား အသုံးပြုမှု စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီဖြစ်သော သဘောတူထားသည့် လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ50 အား အချိန်နှင့်အမျှ အဆင့်များ အားလုံးတွင် သက်ရောက်အသုံးချရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့အားဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ စစ်မှန်မှု (အထူးသဖြင့် နစ်နာသူ သားကောင်များ၏ သက်သေအထောက်အထားများ၊ သေဆုံးမှု အထောက်အထား၊ အကြောင်းအရင်း၊ ပုံစံ၊ အချိန်၊ နေရာတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသော အထောက်အထားများအားလုံးအား ရှာဖွေရယူမှု နှင့် ထိန်းသိမ်းမှု၊ လူ့ရုပ်ကြွင်း အကြွင်းအကျန်များအား ပြောင်းရွှေ့မှု နှင့် နှောက်ယှက်မှု၊ ထို့ပြင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သ(ူ များ)၏ အထောက်အထား အစရှိသည်တ)ို့ ကို ကာကွယ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ (2) အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ယန္တရားများ အသုံးပြုမှု
မြှုပ်နှံစီစဉ်မှုများတို့အတွက် ရှင်းလင်းသေချာမှုရှိသော နည်းဗျူဟာအား ထားရှိသင့်သည်။
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ယန္တရားသည် စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် အညီဖြစ်သော
(10) (ရု ရုပ်ပုံများ အသုံးပြုမှု အပါအ၀င်) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု နည်းဗျူဟာ နှင့်
ပူးပေါင်းဆက်စပ်ဆောင်ရွက်မှုတို့အတွက် အစီအစဉ်များ (10.1) ဌာနတွင်းပိုင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု၊ ပူးပေါင်းဆက်စပ်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် သင့်တော်သော အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်။
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံး လိုက်နာကျင့်သုံးမှုရှိကြောင်းကို (3) သင့်တော်သော သက်သေအထောက်အထားများ ကိုယ်တွယ်စီမံမှု၊ မှတ်တမ်းသိမ်းဆည်းမှု၊ အစီရင်ခံတိုင်ကြားမှု နှင့် ထိန်းသိမ်းမှုစနစ်အား အသုံးပြုမှု ဤတွင် လူ့ရုပ်ကြွင်း အကြွင်းအကျန်များအား သင့်တင့်၊ လုံခြုံစွာ နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ
(10.2) ပြင်ပပိုင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ နှင့် တရားစီရင်ရေး
ရယူမှု နှင့် ပို့ဆောင်မှုများတို့နှင့်အတူ ညစ်ညမ်းပျက်စီးမှုများကို ကာကွယ်ရန်
အာဏာပိုင်များအကြား ပူးပေါင်းဆက်စပ်ဆောင်ရွက်မှု၊ အထူးသဖြင့် လူသား
တိုင်းတာစီမံဆောင်ရွက်ချက်များတို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ အထောက်အထားများအား
အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည် နိုင်ငံတော်
ထိန်းသိမ်းသည့် ရှင်းလင်းပြတ်သားသော လုပ်ငန်းစဉ်တွဲ နှင့် တာဝန်ယူမှုဆိုင်ရာ
သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ စီရင်ချက်ဆိုင်ရာ အင်္ဂါရပ်များဖြင့် သီးခြားဖြစ်နေသော
လုပ်ငန်းစဉ်များတို့ကို ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိစဉ် တစ်ဖက်တွင်လည်း (သေဆုံးမှု
အကြောင်းအရင်း၊ ပုံစံ နှင့် အချိန်၊ လူထုပထ၀ီဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊
(10.3) ပြင်ပပိုင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ နှင့်
အထောက်အထားများတို့နှင့်အတူ အရေအတွက်စုစုပေါင်း အစရှိသည့်)
နစ်နာသူသားကောင်များ၊ မိသားစုများ၊ ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် မီဒီယာများတို့အကြား ပူးပေါင်းဆက်စပ်ဆောင်ရွက်မှု။ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် တရားဝင် ပံ့ပိုးထောက်ပံ့မှု
သက်သေအထောက်အထားများ အားလုံးအား ထိန်းသိမ်း၊ မှတ်တမ်းပြု၊ ကျွမ်းကျင်စွာ လေ့လာသုံးသပ်၍ အစီရင်ခံတင်ပြမှု ပြုသင့်ပေသည်။
နှင့် ညှိနှိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအား ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိစေရန်အတွက်ငှာ အစောပိုင်းကာလ
(4) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာ အသုံးပြုမှု
နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်သော ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုသည် အလွန် အရေးကြီးပေသည်။ ဤတွင်
မိသားစုများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိရောက်စွာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုပြုနိုင်စေရန်၊
သေဆုံးသူ အကြွင်းအကျန်များအား ဂရုတစိုက်၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ လေးစားသမှုထား၍
နှင့် လိုအပ်ပါက အမှုစီရင်မှုဆိုင်ရာ/တရားမျှတရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများတို့နှင့်
လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပေးမှုလည်း ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ
မီဒီယာများနှင့်ပါ သက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်ရ လွယ်ကူစေရန် ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု နှင့် ပြန်လည်အပ်နှံမှု တာဝန်အား လက်တွေ့နည်းလမ်းကျကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် အခြေခံကျ၊ အရေးပါပြီး၊ ဥပဒေ နှင့် တရားစီရင်မှုဆိုင်ရာ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များအပေါ် လက်သင့်ခံ၊ ယုံကြည်နိုင်မှုအတွက် အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေပါသည်။ အများပြည်သူထံ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများ အားလုံးသည် တိကျမှန်ကန်မှု ရှိသင့်ပြီး၊ေ၀၀ါးမသေချာမှုများမရှိစေဘဲ အချိန်မှီ ပုံမှန် ဖြစ်သင့်ပေသည်။ ၎င်းတွင် အောက်ဖော်ပြပါတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များ ပါဝင်သင့်သည် •	လူ့ရုပ်ကြွင်း အကြွင်းအကျန်များ ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု နှင့် ပြန်လည်အပ်နှံမှု လုပ်ငန်းစဉ်၊ •	ကာကွယ်ရေး နှင့် လျှို့ ၀ှက်စောင့်ထိန်းမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်များ/တိုင်းတာစီမံဆော င်ရွက်ချက်များတို့၏ တည်ရှိမှု (နှင့် သက်ဆိုင်ပါက ၎င်းအကြောင်းအရာများ)၊ •	သေဆုံးကြောင်း အထောက်အထားလက်မှတ်၊ •	မိသားစုများအတွက် သင့်တင့်သည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးထောက်ပံ့မှုများ ရရှိနိုင်မှု၊ နှင့် •	မျှော်မှန်းထားချက်များအား စီမံဆောင်ရွက်သင့်ပေသည်။
ဥပမာအားဖြင့် ဆေးပညာ၊ သက်ရှိသိပ္ပံ နှင့် မျိုးရိုးဗီဇများတို့အပါအ၀င် သက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာများတို့တွင် သုတေသနပြုလုပ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော ဇီဝကျင့်ဝတ် နှင့် လူ့အခွင့်အရေးများအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် (UNESCO 2005) ၊ လူသား မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ ဒေတာအချက်အလက်များ နှင့် နမူနာများတို့ စုဆောင်းမှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၊ အသုံးပြုမှု နှင့် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော လူသားမျိုးရိုးဗီဇ ဒေတာအချက်အလက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် (UNESCO 2003)၊ လူတစ်ဦးစီ၏ မျိုးပွားဇီဝပစ္စည်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည့် သုတေသန၊ ကုသမှု သို့မဟုတ် ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော လူသား မျိုးပွားဇီဝပစ္စည်း နှင့် လူ့အခွင့်အရေးများတို့အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် (UNESCO 1997) ၊ ဇီဝဗေဒ၊ ဆေးပညာ၊ ဇီဝဆေးပညာဆိုင်ရာ သုတေသန နှင့် မျိုးရိုးဗီဇ စမ်းသပ်ချက်များတို့နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး လူသားများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ နှင့် အထောက်အထားအား အကာအကွယ်ပေးသော Oviedo ကွန်ဗင်းရှင်း (ဥရောပကောင်စီ 1995)။ aaBB ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အဆင့်မြင့် သွေးသွင်းလွှဲပြောင်းမှု နှင့် ဆဲလ် ကုထုံးများ (2010) ၊ ထို့ပြင် အထောက်အထားဖော်ထုတ်မှုဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွင်းမှ နေရာလွှဲပြောင်းမှု အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး အုပ်စုလိုက် သေဆုံးမှုဆိုင်ရာ DNA အထောက်အထား စီမံဆောင်ရွက်မှုများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ (စာမျက်နှာ 11) အားလည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ Minnesota လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်များ၊ နှင့် အထူးသဖြင့် မြေသင်္ချိုင်း ပြန်လည်တူးဖော်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်းသော ၎င်း၏ အသေးစိတ် လမ်းညွှန်ချက်များ၊ အပိုင်း C စာမျက်နှာ 36-37 ။
D. အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု ပြန်လည်ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုပြုကြောင်း သေချာစေရန်အတွက်ငှာ ရရှိနိုင်သမျှ နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များ
နည်းလမ်းများ အားလုံးကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားရမည် ဖြစ်သည်’ (ICRC ပျောက်ဆုံးမှုများနှင့်ပတ်သက်သော စံနမူနာဥပဒေ၊ အပိုင်း 19)။
CED ၏ အပိုင်း 15 တွင် ပြဌာန်းဖော်ပြထားသည်မှာ - ‘နိုင်ငံပါတီများသည်
ဤပြဌာန်းချက်များသည် လိုအပ်သော မြေမြှုပ်နှံမှု၊ ပြန်လည်တူးဖော်မှု
အတင်းအကြပ်ပြုမူသော ပျောက်ဆုံးမှုမှ နစ်နာသူသားကောင်များအား
နှင့် အမှတ်တရ အထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်မှု၊ ထို့ပြင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း
အကူအညီပေးရန် ရှုထောင့်အမြင်ထားရှိမှုနှင့်အတူ ပျောက်ဆုံးသွားသည့်
ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသည့် လူ့ရုပ်ကြွင်း အကြွင်းအကျန်များကို မည်သို့
ပုဂ္ဂိုလ်များအား ရှာဖွေခြင်း၊ တည်နေရာဖော်ထုတ်ခြင်း နှင့် ပြန်လွှတ်ပေးခြင်း
စီမံကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အစရှိသည်တို့ကိုလည်း အကျုံးဝင်ပြဌာန်းထားပြီး၊
အစရှိသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ နှင့် ပျောက်ဆုံးသူမှာ သေဆုံးသွားခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်တွင်မူ
မှတ်တမ်းများအား ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းမှုပြုကာ အထောက်အထားရှာဖွေသည့်
၎င်းတို့အား ပြန်လည်တူးဖော်၊ အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း
ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအား ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွား၍ မိသားစုထံ
နှင့် ၎င်းတို့၏ အကြွင်းအကျန်များအား ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း အစရှိသည်
ဆက်လက် အသိပေးအကြောင်းကြားမှုပြုရန် တောင်းဆိုထားသည်။
လုပ်ငန်းစဉ်များတို့တွင် တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပြီး၊ အပြန်အလှန် ပံ့ပိုးထောက်ပံ့ကာ အကောင်းဆုံး တိုင်းတာစီမံဆောင်ရွက်မှုများ အားထုတ်ရပေမည်’ (အထူးပြုချက်အား စာလုံအနက်ရောင်ရင့်ဖြင့် ပေါင်းထည့်ထားသည်)။ အဆိုပါသော သတင်းအချက်အလက်များအပေါ် တရားဝင် စိတ်ပါဝင်စားခွင့်ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဥပမာ ဆွေမျိုးသားချင်များထံသို့လည်း အချက်အလက်များအား ဆက်သွယ်အသိပေးရန် လိုအပ်ပေသည် (ibid ၊ အပိုင်း 18)။ ထို့ပြင် CED ၏ အပိုင်း 24(3) အရ လူ့ရုပ်ကြွင်း အကြွင်းအကျန်များအား ပြန်လည်အပ်နှံရန် လိုအပ်ပေသည်။ နိုင်ငံများသည်
အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ နှင့် အခွင့်အရေးများ ကျင့်သုံးသိမှတ်မှု၏ အဓိကကျသော ရှုထောင့်တစ်ရပ် ဖြစ်စဉ် ၎င်းအား နည်းပဒေသဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရား တစ်ရပ်အဖြစ်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် နားလည်သိမှတ်နိုင်ပါသည်။56 လူ့ရုပ်ကြွင်း အကြွင်းအကျန်များ၏ အထောက်အထားသည် အမှတ်တရ အထိမ်းအမှတ်များ ပြုလုပ်နိုင်စေရန်အတွက်ငှာ မိသားစုများထံသို့ ပြန်လည်အပ်နှံရသည့် အခြေခံအကြောင်းအရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည့်အပြင် မိသားစုအနေနှင့် သေဆုံးကြောင်း
သေဆုံးသူပုဂ္ဂိုလ် နှင့်ပတ်သက်သော စာရွက်စာတမ်း အချက်အလက်များအား
အထောက်အထားလက်မှတ်အား လက်ခံရယူနိုင်ဖို့အတွက်လည်း ဖြစ်သည်။57
ထောက်ပံ့ပေးရန်နှင့်၊ လူ့ရုပ်ကြွင်း အကြွင်းအကျန်များအား စုယူမှု၊ သိုလှောင်မှု
ဆိုဒ်နေရာပေါ် ကန့်သတ်ချက်များ -
နှင့် အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုတို့အပါအ၀င် မြေမြှုပ်နှံရာ နေရာအား တူးဖော်မှုအတွက် လိုအပ်သော အရင်းအမြစ်များအား နေရာချစီမံပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။ သေဆုံးကြောင်း အထောက်အထားလက်မှတ်အား 52
ထုတ်ပြန်ပေးရန်မှ အဓိက အရေးကြီးသော တာဝန်တစ်ရပ် ဖြစ်သည်။53
လူ့ရုပ်ကြွင်း အကြွင်းအကျန်များ နှင့် စပ်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများတို့အား ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု၊ မှတ်တမ်းတင်မှု နှင့် ထိန်းသိမ်းမှုတို့သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပုဒ်မအတွင်း၌ ဖော်ပြထားသည့် ပြဌာန်းချက်များတို့နှင့်အညီ ရှိသင့်ပေသည်။
ထို့ပြင် Pueblo Bello Massacre အပြိုင် Colombia အမှုကိစ္စရပ်တွင်
ဆိုဒ်နေရာပြင်ပ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ -
အမေရီကန် အတွင်းတရားရုံးမှ အကြံပြုသည်မှာ နိုင်ငံတော်အနေနှင့်
သေဆုံးပြီးနောက် ခွဲစိတ်စစ်ဆေးမှု58 နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားရယူမှုတို့အား
ရင်ခွဲရုံတွင် ဆောင်ရွက်မှုပြုသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အဆိုပါ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုသည်
အကူအညီဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မည့် အချက်အလက်များကို ဖော်ထွက်ထောက်ပံ့
အသေးစိတ် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း နှင့် နောက်ဆက်တွဲ အရင်းအမြစ်များအား
လာပေးဖို့အတွက်ငှာ အများပြည်သူလူထုအား တိုက်တွန်းသင့်ကြောင်း
ဖြန့်ဝေနေရာချခြင်းတို့ လိုအပ်ပေသည်။ ထို့ပြင် အောက်ဖော်ပြပါတို့အားလည်း
ဖော်ပြထားသည်။54 အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထတုမ်၏ှုအခြေခံနည်းလမ်းတစ်ရပ်
ဖြစ်သော DNA ခြွဲ ခမ်းစိတြ် ဖာလေ့လာမှု၏ တန်ဖိးု မှာ အသိအမှတြ် ပုမှု ဆောင်ရကွရ်န်
•	အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု နှင့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှု
ဖြစ်သည် (ICMP ပဲရစ် မူစည်းမျဉ်းများ၊ မူစည်းမျဉ်း 6)။55 ဓလေ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဥပဒေအရ ပြဌာန်းထားသည်မှာ (နိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ်မှဖြစ်စေ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှမဟုတ်သည်ဖြစ်စေ) ပဋိပက္ခအတွင်းမှ သက်ဆိုင်သူပါတီများသည် တောင်းဆိုချက် လက်ခံရရှိသည့်အပေါ်တွင် သေဆုံးသူ၏ ရုပ်ကြွင်းများအား ပြန်လည်အပ်နှံရပေမည် (CIHL စည်းမျဉ်း 114)။ ထို့ပြင် ‘ပဋိပက္ခမှ သက်ဆိုင်သူပါတီ (တစ်ဖက်စ)ီ သည် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ၏ ရလဒ်ကြောင့် ပျောက်ဆုံးနေသော ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် တာဝန်ယူရန် သင့်တင့်သော တိုင်းတာစီမံဆောင်ရွက်ချက်များ အားလုံးကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့၏ ကံကြမ္မာနှင့်ပတ်သက်ပြီး မိသားစုဝင်များထံသို့ သတင်းအချက်အလက်များ မှန်သမျှကို ထောက်ပံ့ပေးရမည်ဖြစ်သည်’ (CIHL စည်းမျဉ်း 117)။ ICRC သည် ဤအခြေအနေအား အကျယ်ဖြန့်ဖော်ပြထားသည် ‘ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ ကံကြမ္မာသည် သေဆုံးပြီးသူဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ကြွင်းနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သက်ရောက်ချက် မှန်သမျှအား
လုပ်ငန်းစဉ်များတို့အတွက် အုပ်ထိန်းစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်တွဲအား ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်မှု၊ •	လူ့ရုပ်ကြွင်း အကြွင်းအကျန်များ သိုလှောင်သိမ်းဆည်း၊ ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် လုံလောက်မှုရှိသော အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုအထောက်အပံ့များ၊ နှင့် •	သက်ဆိုင်ရာ သက်သေအထောက်အထားအား ဖော်ထုတ် ထို့ပြင်/သို့မဟုတ် ကြည့်ရှုရန်အတွက်ငှာ မိသားစုများမှ ရင်ခွဲရုံသို့ လည်ပတ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားမှု။ မိသားစုများထံမှ ကိုးကားမှုပြုရန် DNA နမူနာများအပါအ၀င် ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များအား စုဆောင်းရယူခြင်း အားဖြင့် အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေမည့် အချက်အလက်များအား ထုတ်လုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဤဒေတာ အချက်အလက်များအား စုဆောင်းရယူရာ၌ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများ နှင့် သေဆုံးသူများတို့၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ပေးသည့် အလွဲအမှား၊ အတိမ်းအစောင်းမခံသော အမူအကျင့်ပုံစံအားဖြင့် စုဆောင်းရယူရမည် ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ဒေတာအချက်အလက်များ၊ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ ထို့ပြင် အဆိုပါသော အချက်အလက်များအား သိမ်းဆည်းမှုတို့နှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် အဆိုပါ အလေ့အကျင့်များသည် ပြည်တွင်း ဒေတာအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်များနှင့် နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များတို့နှင့်အညီ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။
Massacres of El Mozote နှင့် အခြားသော နေရာများ အပြိုင် El Salvador ၊ ကောင်းကျိုးအပေါ် စီရင်မှု၊ စစ်လျော်ကြေးများ နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အမေရီကန်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တရားရုံး အတွဲဆက်များ C နံပါတ် 252 (အောက်တိုဘာ 25 ၊ 2012) အပိုဒ် 334။
Aslakhanova နှင့် အခြားသူများ အပြိုင် Russia ၊ စီရင်ချက်၊ ECtHR လျှောက်လွှာ နံပါတ် 2944/06 နှင့် 8300/07 ၊ 50184/07 ၊ 332/08 ၊ 42509/10 (ဒီဇင်ဘာ 18 ၊ 2012) အပိုဒ် 226။
သေဆုံးကြောင်း အထောက်အထားလက်မှတ်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုပြုခြင်းသည် 1972 အထိ အရှိန်အဟုန်ကျန်ရစ်ခဲ့သည့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် (1939-1945) အပြီး ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ၏ သေဆုံးမှုအား ထုတ်ပြန်ကြေငြာမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသော UN ကွန်ဗင်းရှင်း၏ နှလုံးအူတိုင်တွင် တည်ရှိခဲ့သည်။ ပျောက်ဆုံးမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ICRC စံနမူနာဥပဒေ၊ အပိုင်း4မှ ၎င်း၏ မှတ်ချက်အတွင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည်မှာ ‘သေဆုံးသွားခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်တွင် သေဆုံးကြောင်း အထောက်အထားလက်မှတ်အား ထောက်ပံ့ပေးရန်၊ လေးစားသမှု၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတို့ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ကြွင်းများအား ကိုင်တွယ်စီမံမှုပြုရန်၊ ထို့ပြင် မိသားစုများထံသို့ ခန္ဓာရုပ်ကြွင်းအား ပြန်လည်အပ်နှံရန်၊ နှင့်/သို့မဟုတ် မြေမြှုပ်နှံမှုအား သေချာအောင်ဆောင်ရွက်ရန် အစရှိသည့် တာဝန်ဝတ္တရားများအား တာဝန်ယူသင့်ပြီး၊’ (စာမျက်နှာ 12) ၊ ဤသည်တို့အား အရည်အချင်းပြည့်မှီသည့် အာဏာပိုင်များမှ ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပေသည် (စာမျက်နှာ 44)။ ထို့အပြင် သေဆုံးကြောင်း အထောက်အထားလက်မှတ်များအား ICRC ၏ ကပ်ဘေးများအပြီး သေဆုံးရုပ်ကြွင်းခန္ဓာများအား စီမံခန့်ခွဲမှု - ပထမဆုံး တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သူများအတွက် ကွင်းဆင်း လက်ကိုင်လမ်းညွှန်၊ ဥပမာ - စာမျက်နှာ 30 ၊ နှင့် 5.4. အဆင့်4- ပြန်လည်သင့်မြတ်မှု၊ စာမျက်နှာ 17 ရှိ အင်တာပို ကပ်ဘေးသားကောင် အထောက်အထားဖော်ထုတ်မှုတို့တွင် ဖော်ပြထားသည်။
Pueblo Bello Massacre Colombia ၊ ကောင်းကျိုးအပေါ် စီရင်မှု၊ စစ်လျော်ကြေးများ နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အမေရီကန်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တရားရုံး အတွဲဆက်များ C နံပါတ် 140 (ဇန်န၀ါရီ 31 ၊ 2006) အပိုဒ် 272။
ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် နိုင်ငံတကာ ကော်မရှင် (2019) ၊ ICMP ပဲရစ် မူစည်းမျဉ်းများ၊ မှတ်ချက်ပြုထားသော ဗားရှင်း၊ ICMP.DG.468.1.W.doc.
အင်တာပို၏ ကပ်ဘေးသားကောင် အထောက်အထားဖော်ထုတ်မှု လမ်းညွှန်အတွင်း၌ - ‘နစ်နာသူသားကောင်များသည် မိမိတို့ သေဆုံးပြီးနောက် အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု ရပိုင်ခွင့် ရှိသည်’ ဟူသည့် ဖော်ပြချက်မှတစ်ဆင့် ပိုမို အမျိုးအစားခွဲစိတ်မှုပြုသော ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းအား အကြံပြုထားသည် (အပိုင်း B ၊ နောက်ဆက်2၊ စာရွက်ဖြူ - DVI)။
အထူးခြွင်းချက်မှာ Argentine ဥပဒေ နံပါတ် 14,321 ၊ မေလ 11 ၊ 1994 ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် အတင်းအကြပ်လုပ်ဆောင်ထားသော ပျောက်ဆုံးမှုအမျိုးအစားအား အရပ်သားဆိုင်ရာ သေဆုံးမှုနှင့် တရားဝင် တန်းတူညီမျှမှုတစ်ရပ်အဖြစ် ဖန်တီးထားသည်။ ၎င်းအရ မိသားစုများအနေနှင့် သေတမ်းစာများအား လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုပြုနိုင်သည်၊ ပျောက်ဆုံးသူ ပိုင်ဆိုင်မှု အိမ်ခြံမြေအား စီမံဆောင်ရွက်နိုင်သည်၊ ထို့ပြင် အမွေဆက်ခံမှု ကိစ္စများအားလည်း စီမံနိုင်သည်၊ သို့သော်လည်း ၎င်းပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ‘ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာနိုင်ခြေ’ မှာမူ ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ ၎င်းကဲ့သို့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာမှုသည် (သေဆုံးကြောင်း အေ​ထောက်အထားလက်မှတ်ဖြင့် မတူဘ)ဲ တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ သေဆုံးမှုအတွက် နိုင်ငံ၏ ပါဝင်မှု သို့မဟုတ် တာဝန်ဝတ္တရားအား ပင်ကိုယ် အသိအမှတ်ပြုသည်။
ဥပမာအားဖြင့် စာမျက်နှာ 49-51 ရှိ လမ်းညွှန်ချက် E နှင့် စာမျက်နှာ 57-87 ကမ်းလှမ်းချက်ဖောင်များ၊ နောက်ဆက် 1-5 တို့တွင် ပါရှိသည့် အလောင်းခွဲစိတ်မှုများ၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု နှင့် ကျန်ရစ်အရိုးစုများအပေါ် မနုဿဗေဒဆိုင်ရာ လေ့လာဆန်းစစ်မှု အစရှိသည်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သော လမ်းညွှန်ချက်များအား ထောက်ပံ့ပေးထားသည့် အလောင်းစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ Minnesota လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ဖြစ်သည်။ ဤသည်တို့သည် ယာယီ ရင်ခွဲရုံ ၀န်ဆောင်ထောက်ပံ့မှုများအား လုံခြုံမှုရှိကောင်း ရှိစေပေမည်။
ဒေတာ စုဆောင်းရယူမှု နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှု ရှုထောင့်များ အားလုံးအား
(2) အထောက်အထားရှာဖွေတွေ့ ရှိချက်များသည် သေချာခြင်း မရှိသေးပေ၊ အကယ်၍
တစ်ပြေးညီကိုက်ညီမှုရှိစေသည့် ဒေတာ စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်သည်လည်း
ဥပမာအားဖြင့် သက်သေအထောက်အထားများသည် လူ့ခန္ဓာအကြွင်းအကျန်များ၏
အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုအား လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ငှာ ဆိုဒ်နေရာပြင်ပ စည်းမျဉ်းကန့်သတ်ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်ပေသည်။ ဤတွင် အနည်းဆုံးအနေနှင့် အောက်ပါတို့ ပါဝင်မည် ဖြစ်သည် -
အထောက်အထားနှင့်ပတ်သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာသော အဆိုပြုချက်တစ်ခုနှင့် ကွဲလွဲနေခဲ့လျှင်၊ သို့မှမဟုတ် ခန္ဓာအကြွင်းအကျန်များ၏ အထောက်အထားများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အဆုံးသတ် ဆုံးဖြတ်ချက်အား
•	ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် ဆက်စပ် အချက်အလက်များတို့အား စာရင်းသွင်းမှတ်တမ်းပြုမှု၊
•	ပျောက်ဆုံးသူများ၏ မိသားစုများထံမှ DNA ကိုးကားချက် နမူနာများ ပါဝင်သည့်
အနာဂါတ် အထောက်အထားရှာဖွေတွေ့ ရှိချက်များ နှင့် နောက်တွဲတွဲ
အချက်အလက်များ၊ •	သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ ရှေးဟောင်းသုတေသန စီမံဆောင်ရွက်မှု နှင့် လူ့ရုပ်ကြွင်းများ ပြန်လည်ရယူမှု၊ ထို့ပြင် ဆက်စပ် သက်သေအထောက်အထားများ အစရှိသည်တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် ဒေတာအချက်အလက်များ၊ •	မနုဿဗေဒဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု နှင့် အမှုမှတ်တမ်း၊ •	DNA ဓာတ်ခွဲခန်း လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ •	DNA ပရိုဖိုင်း ဒေတာဘေ့စ်၊ နှင့်
အသိပေးအကြောင်းကြားချက်များတို့ကို နိုင်ငံ အာဏာပိုင်များ အပါအ၀င် ဆွေမျိုးများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ စိတ်ပါဝင်စားသည့် ပါတီအဖွဲ့များထံသို့ အသိပေးအပ်နိုင်ရန်အတွက်ငှာ မှတ်တမ်းများအား အစဉ် ထိန်းသိမ်းထားသင့်ပေသည်။ အနာဂါတ် အထောက်အထားရှာဖွေတွေ့ ရှိမှု အလားအလာအား အကာအကွယ်ပြုပေးရန်အတွက်ငှာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု နှင့် ရေရှည် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုဆိုင်ရာ တိုင်းတာစီမံဆောင်ရွက်ချက်များအား စီမံထားဖို့ လိုအပ်ပေသည်။ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု နှင့် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုဆိုင်ရာ
•	DNA တိုက်စစ်ခြင်း။
စီမံလုပ်ဆောင်ချက်များအား မရရှိနိုင်သည့် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့သည် သင့်တော်မှုမရှိသည့်
DNA လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း လိုအပ်ချက်သည် နိုင်ငံအတွင်း၌ မရှိပေ၊
အခြေအနေများတွင်မူ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်ခြင်းမရှိသည့်
အကြောင်းအရင်းမှာ ကြီးမားသော ပမာဏအတိုင်းအတာဖြင့် DNA စစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုများအား ထောက်ပံ့ရန်အတွက်ငှာ တတိယပါတီ အဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် အကူအညီ
ခန္ဓာအကြွင်းအကျန်များအား သေဆုံးသူအတွက် သင့်တင့်သည်ဟု ယူဆရသော ယဉ်ကျေးမှု သို့မဟုတ် ဘာသာရေး ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်အညီ အမှတ်အသားပြု၊
ရယူကောင်း ရယူရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာသည် အောက်ပါတို့အား
အနာဂါတ်တွင် သက်သေအထောက်အထားအား ရှာဖွေတွေ့ ရှိနိုင်ဖို့ အတွက်ငှာ
အဆင်ပြေလွယ်ကူချောမွေ့စေမည် ဖြစ်သည် -
ဖြစ်နိုင်သမျှ မီးသင်္ဂြိုလ်မှုကို ရှောင်ရှားသင့်သည်။
•	လက်သင့်ခံမှုရှိလာစေရန်အတွက်ငှာ မိသားစုများ နှင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော
အောက်ဖော်ပြပါတို့ကဲ့သော နည်းလမ်းများအား အသုံးပြု၍ ရုပ်အကြွင်းအကျန်များအား
ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းထံသို့ လုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်း နှင့် အထောက်အထား ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု နှင့် ဒေတာအချက်အလက်များ လုပ်ငန်းစဉ်စီမံဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်ခြင်း အချိန်ဘောင်များအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောပြမှု၊ •	သေဆုံးပြီးနောက် ရင်ခွဲစစ်ဆေးမှုများနှင့် အဆိုပါ စစ်ဆေးမှု၏ ရလဒ်များတို့နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား မိသားစုများထံသို့ အသိပေးခြင်း။ ဤတွင် မိသားစုအတွက် ပံ့ပိုးထောက်ပံ့မှု နှင့် ညွှန်းဆိုလွှဲပြောင်းမှုဆိုင်ရာ ရွေးချယ်စရာများအကြောင်း အချက်အလက်များ ပါဝင်သင့်ပေသည်၊ •	ဖြည့်စွက် အချက်အလက်များအား ကိုင်တွယ်၊ ထောက်ပံ့ပေးကောင်း ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့် အေဂျင်စီများနှင့်အတူ ထိရောက်စွာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု၊ •	သက်ဆိုင်သူ မိသားစုများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို လေးစားသမှုထားရှိပြီး၊ မိသားစုများ၏ အလွဲအမှားမခံသော အချက်အလက်များ နှင့် မီဒီယာထံသို့ ဆက်သွယ်အသိပေးခြင်းမပြုမီ ရလဒ်များအကြောင်း မိသားစု၏ သိရှိပိုင်ခွင့်အား အသိအမှတ်ပြုသည့် မီဒီယာများနှင့်အတူ ထိရောက်စွာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု။ အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏ အလားအလာ အထွက်ရလဒ်များ (1) ရလဒ်ကောင်းသည့် အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု - ဟု ဆိုရာတွင် ပျောက်ဆုံးနေသူပုဂ္ဂိုလ်၏ မသေဆုံးမီ နှင့် သေဆုံးပြီးနောက် ဒေတာအချက်အလက်များအကြား တစ်သမတ်တည်း ကိုက်ညီမှုရှိပြီး၊
ခြေရာခံနိုင်ပေမည် •	ဆိုဒ်နေရာအတွင်းမှ ခန္ဓာရုပ်အလောင်းတစ်ခုစီ၏ တည်နေရာပြ မြေပုံအပါအ၀င် ဆိုဒ်နေရာနှင့်ပတ်သက်သော စာရွက်စာတမ်းများ နှင့် မြေပုံ၊ •	DNA နမူနာ အရေအတွက် နှင့် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုဆိုင်ရာ ကိုးကားချက်များနှင့်အတူ ခန္ဓာရုပ်အလောင်းတစ်ခုစီ နှင့် အိတ်/အခေါင်းတို့အား နံပါတ်ရေးမှတ်၊ တံဆိပ်တပ်မှုပြုခြင်း၊ •	ဆိုဒ်နေရာအား အမှတ်အသားပြုရန် ဆိုင်းဘုတ်များ အသုံးပြုမှု၊ •	လုံခြုံရေးအား သေချာစေရန်အတွက်ငှာ အချက်အလက်များအား လုံခြုံစွာ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု။ (3) အထောက်အထားလွဲမှားဖော်ထုတ်မှု - ခန္ဓာရုပ်ကြွင်းများ၏ အထောက်အထားဖော်ထုတ်မှုတွင် အမှားအယွင်းဖြစ်ပေါ်သော အခြေအနေများကို ဆိုလိုသည်။ ဤသို့သော အထောက်အထားလွဲမှားဖော်ထုတ်မှုသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်း ပါဝင်နေသော မိသားစု နှစ်စုအပေါ်သို့ ပြောင်းပြန် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပေသည်။ အဆိုပါသော မှားယွင်းတွေ့ ရှိမှုများ ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါတွင် မိသားစုထံ ကျိုးကြောင်းသင့်တော်သော ဆက်သွယ်အသိပေးမှုများ ပြုသင့်ပြီး၊ စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီဖြစ်သော လုပ်ငန်းစဉ် စီမံလည်ပတ်မှုနှင့် တစ်ညီတည်းဖြစ်သည့်
ရှင်းလင်းပြောပြနိုင်ခြင်းမရှိသည့် ရှေ့နောက်မကိုက်ညီမှုများ မရှိခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
အမှားပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားသင့်သည်။
အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု၏ သိပ္ပံနည်းကျ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သော
မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်ခြင်းမရှိသည့် အမှုများတွင် မိသားစုများ၏
နည်းလမ်းများတွင် လက်ဗွေရာများ၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု၊ ကျန်ရစ်သည့်
ရုပ်ကြွင်းများသည် အရိုးစုများ ဖြစ်နေသည့်အခါတွင် မနုဿဗေဒဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုအားဖြင့် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ပရိုဖိုင်းဖော်ထုတ်မှု၊ နှင့် DNA လေ့လာစစ်ဆေးမှုများတို့ ပါဝင်ပေသည်။ (ဓာတ်ပုံများအပါအ၀င်) အမြင်ပုံရိပ်ဆိုင်ရာ သိမှတ်မှု၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် ဖော်ပြချက်၊ ဆေးမှင်ကြောင်များ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် တွေ့ ရှိရသော အ၀တ်အစားများတို့အပြင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ရှာဖွေတွေ့ ရှိချက်များသည် အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း နည်းလမ်းတစ်မျိုးတည်းသာ အသုံးပြု၍ အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုအား ရှောင်ရှားသင့်သည်။59
မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား ဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်ခြင်းမရှိသည့် အမှုများတွင်မူ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သော မိသားစုဝင်များအတွက် မိမိတို့ချစ်ခင်ရသူများမှာ မရှိတော့ကြောင့် သက်သေပြနိုင်ရန် အထောက်အထားလက်မှတ်အချို့ကို လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်ပေမည်၊ ဤသို့အားဖြင့် ၎င်းတို့သည် ပိုင်ဆိုင်မှုများရောင်းချမှု၊ အမွေဆက်ခံမှု၊ နောက်အိမ်ထောင်ပြုမှု အစရှိသည်တို့ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခွင့် ရှိပေမည်။ ပျောက်ဆုံးကြောင်း အခြေအနေ သို့မဟုတ် မရှိတော့ကြောင်း အထောက်အထားလက်မှတ်အား မိသားစုများ၏ အခွင့်အရေးအား ကာကွယ်ရန်အတွက်ငှာ ထုတ်ပြန်ပေးသင့်သည်။63
အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုများ သေချာပြီးသည့်နောက်တွင် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်သည် သေဆုံးမှု အထောက်အထားလက်မှတ60်အား ထုတ်ပြန်ပေးသင့်သည်။
အင်တာပို၏ ကပ်ဘေးသားကောင် ဖော်ထုတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်၊ စာမျက်နှာ 18 ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုနည်းလမ်းများ (အခြေခံနှင့် ဒုတိယအဆင်)့ ၊ ထို့ပြင် အင်တာပို၏ ကပ်ဘေးသားကောင် ဖော်ထုတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် နောက်ဆက် 12 ၏ အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုနည်းလမ်းများ နှင့် Minnesota လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်၊ အပိုင်း E ရုပ်အလောင်းများအား အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု၊ စာမျက်နှာ 21-24 အား ကြည့်ရှုပါ။
ဥပမာအားဖြင့် ICRC ၏ နောက်ဆက်2/ပျောက်ဆုံးမှုများနှင့် ပတ်သက်သော စံနမူနာဥပဒေအတွင်းမှ သေဆုံးမှုဆိုင်ရာ နမူနာ အထောက်အထားလက်မှတ်။
Minnesota လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်၊ အပိုင်း E ၊ ရုပ်အလောင်းများအား အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု၊ စာမျက်နှာ 24 အား ကြည့်ရှုပါ။
ပိုင်ရှင်လာရောက်တောင်းဆိုခြင်းမရှိသည့်၊ ထို့ပြင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်ခြင်းမရှိသည့် အဆိုပါသော မြေမြှုပ်နှံမှုများအတွက် ရွှေ့ပြောင်းခရီးစဉ်များ၏ အကျိုးဆက်အနေနှင့်ငှာ ပျောက်ဆုံး၊ သေဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် ၎င်းတို့ မိသားစုများတို့အား ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ ဆက်ဆံမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် Mytilini ထုတ်ပြန်ချက်နှင့်အညီ သင့်တင့်စွာ စီမံဆောင်ရွက်မှုပြုရပေမည် (ရွှေ့ပြောင်းခရီးစဉ်များ၏ အကျိုးဆက်အနေနှင့် ပျောက်ဆုံး၊ သေဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် ၎င်းတို့ မိသားစုများတို့အား ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ ဆက်ဆံမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသော Mytilini ထုတ်ပြန်ချက် (2018) A.16 တွင)် ။ ပျောက်ဆုံးမှုများဆိုင်ရာ ICRC စံနမူနာဥပဒေ၊ အပိုင်း 22 မှ ၎င်း၏မှတ်ချက် (မြေမြှုပ်နှံမှု နှင့် ပြန်လည်တူးဖော်မ)ှု အတွင်း ဖော်ပြထားသည်မှာ ‘လိုအပ်သော အခြေအနေ (ဥပမာ - လူထုကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရင်းများ) အတွက်မှလွဲ၍ မီးသင်္ဂြိုလ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားသင့်ပြီး၊ ၎င်းအား ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းအရင်း မှတ်တမ်း နှင့် ပြာပုံများကို ထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်’ (စာမျက်နှာ 48 တွင)် ။
Argentina နှင့် Colombia ဥပဒေ 1531 ၊ ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ မရှိတော့ကြောင့် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်၊ 2012 ၊ အပိုင်း7အတွင်းမှ ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ် အမျိုးအစားနှင့် အလားတူညီသည်။ နိုင်ငံတကာဥပဒေများလက်အောက်တွင် ပျောက်ဆုံးနေသော ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် ၎င်းဆွေမျိုးများတို့၏ ဥပဒေရေးရာ အနေအထားသတ်မှတ်ချက်များအား သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိသော်လည်း၊ အတ်ဥပဒေ 24(6) အတွင်း CED မှ ပြဌာန်းဖော်ပြထားချက်တွင်မူ ‘ပျောက်ဆုံးသူပုဂ္ဂိုလ်၏ ကံကြမ္မာအား ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ထုတ်သိရှိရခြင်း မရှိသေးမီအထိ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ဝတ္တရားနှင့်ပတ်သက်ပြီး မျက်စိမှိတ်ဘက်လိုက်မှုများမရှိစေဘဲ နိုင်ငံပါတီအဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့စီသည် ၎င်းတို့၏ ကံကြမ္မာအခြေအနေအား ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ထုတ်သိရှိရခြင်း မရှိသေးသော ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ၊ နှင့် ၎င်းဆွေမျိုးများတို့၏ ဥပဒေရေးရာ အနေအထားများနှင့်ပတ်သက်ပြီး လူမှုဖူလုံရေး၊ ငွေကြေးကိစ္စများ၊ မိသားစုဥပဒေ နှင့် ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခွင့်များကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များတွင် သင့်တင့်သော ခြေလှမ်းအဆင့်များကို ပြုလုပ်ပေးရပေမည်။’
E. လူ့ခန္ဓာအကြွင်းအကျန်များ ပြန်လည်အပ်နှံမှု နိုင်ငံတကာ စံချိန်သတ်မှတ်ချက်များ CED ၏ အပိုင်း 24(3) သည် ပျောက်ဆုံးသူများ၏ လူ့ခန္ဓာကိုယ် ရုပ်ကြွင်းများအား ရှင်သန်ကျန်ရစ်သည့် မိသားစုဝင်များထံသို့ ပြန်လည်အပ်နှံရန် တာဝန်ဝတ္တရားအကြောင်း ဖော်ပြထားသည်၊ အပိုင်း 15 အရမူ နိုင်ငံများအနေနှင့် ရှာဖွေရေး နှင့် နိုင်ငံပြန်လည်အပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများတို့တွင် တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နှင့် ပံ့ပိုးထောက်ပံ့မှုများ ထောက်ပံ့ပေးရန် ပြဌာန်းထားသည်။ 2019 လမ်းညွှန် မူစည်းမျဉ်းများ၏ မူစည်းမျဉ်း 2(4) သည် ‘[လူ့ခန္ဓာရုပ်ကြွင်းများ] ပြန်လည်အပ်နှံမှုပြုရာ၌ မိသားစုများနှင့် ၎င်းတို့ ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆန္ဒများ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆငို ရ်ာ ဓလေ့ထုးံ တမ်းများ အစရှသိည်တန့ို ငှတ့် စ်သမတ်တည်းဖြစ်သော ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့် မြေမြှုပ်နှံမှုအား သေချာစေရန်အတွက်ငှာ လိုအပ်သည့် နည်းပဒေသများ နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များတို့ကို ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ပေးသင့်သည်’ ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဤသို့အားဖြင့် လူ့ခန္ဓာရုပ်ကြွင်းများ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ပို့ဆောင်မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို ထည့်သွင်းအကျုံးဝင်စေပေမည်။ အမေရီကန်အတွင်း လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ တရားရုံးမှ တရားစီရင်မှုဆိုင်ရာအတွင်း ဖော်ပြထားသည်မှာ ‘သေဆုံးသူ ရုပ်အလောင်းများအား မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်သိရှိပြီးသည့်နောက်တွင် နိုင်ငံတော်အနေနှင့် မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ တော်စပ်ဆက်နွယ်သူများအား အတည်ပြုပြီးသည့်နောက် ၎င်းတို့၏ နီးစပ်ဆွေမျိုးသားချင်း ဖြစ်သူထံသို့ ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး ရုပ်အလောင်းကို ပြန်လည်ပေးပို့ပေးရမည် ဖြစ်သည်၊ သို့မှသာ ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာအယူဝါဒများနှင့်အညီ အထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်သည် သေဆုံးသူ၏ ဆွေမျိုးသားချင်းနှင့် သဘောတူညီချက်ပြုလုပ်ပြီး
အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု နှင့် လူ့ရုပ်ကြွင်းများအား ပြန်လည်အပ်နှံမှုပြုနိုင်သည့် အခြေအနေများတွင် •	သေဆုံးသူ ရုပ်အလောင်းခွဲစိတ်စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ပြီးသည့်နောက် ခန္ဓာရုပ်ကြွင်းများအား ဖြစ်နိုင်သမျှ အစောဆုံး မိသားစုများထံသို့ ပြန်လည်ထုတ်ပေးသင့်ပေသည်။ •	လူ့ရုပ်ကြွင်းများအား ပြန်လည်အပ်နှံမှု လုပ်ငန်းစဉ်အား အကောင်အထည်ဖော်၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်ပေသည်။ ဤတွင် သင့်တင့်သော ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု နည်းဗျူဟာ၊ နှင့် ဖြစ်နိုင်ပါက ၀မ်းနည်းကြေကွဲနေသော မိသားစု နှင့် ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းအတွက် ပံ့ပိုးမှုများရရှိနိုင်မည့် အရင်းအမြစ်များကို ကမ်းလှမ်း၊ ညွှန်းဆိုပေးခြင်းများ ပါဝင်သင့်ပေသည်။ ရုပ်အလောင်းအား ရှာဖွေတွေ့ ရှိသော်လည်း မိသားစုဝင်များမှ လာရောက်တောင်းဆိုခြင်းမရှိသည့် အခြေအနေများတွင် •	လူ့ရုပ်ကြွင်းများ နှင့် သက်ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများအားလုံးကို သိုလှောင်သိမ်းဆည်း/ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်၊ သို့မဟုတ် •	သေဆုံးသူ၏ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် သင့်တင့်ရာ ဘာသာရေး ဓလေ့ထုံးတမ်းများတို့နှင့်အညီ ရုပ်ကြွင်းအား အမှတ်အသားပြုလုပ်ထားသည့် အုတ်ဂူ၌ မြေမြှုပ်ပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများအား ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ မည်သည့် ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းအား အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်သော အစီအစဉ်များသည် သေဆုံးသူ၏ ရုပ်အလောင်းအား ခြေရာခံနိုင်ရမည်ဖြစ်ကာ ရေရှည် သိုလှောင်မှု သို့မဟုတ် မြှုပ်နှံသင်္ဂြိုလ်မှုတို့အတွက် ပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ ဖြစ်သင့်ပေသည်။ ၎င်းအစီအစဉ်များသည် ယဉ်ကျေးမှုအရ သင့်တင့်ကိုက်ညီမှု ရှိသင့်ပြီး၊ ပြန်လည်မြှုပ်နှံမှုသည် မိသားစုများ နှင့် ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများတို့အတွက် သိသာထင်ရှားသော ဆိုဒ်နေရာ၊ အမှတ်တရ အထိမ်းအမှတ်နေရာ ဖြစ်စေရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပေသည်။ ရည်ရွယ်ထားသည့် ဧရိယာအတွင်းမှ မြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေအခြေအနေများ၊ နှင့် မြေအောက်ရေအမြင့် အစရှိသည့် ကိစ္စရပ်များအားလုံးကိုလည်း
မြှုပ်နှံမှု ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်း ထည့်သွင်းအကျုံးဝင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။’64
နောက်ဆက်တွဲ အခြေအနေများအဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် ဖြစ်သည်။
လူ့ရုပ်ကြွင်းများအား ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း မပြုဘဲ
မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း မသိရှိရသည့် ရုပ်အလောင်းများ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ
အသေးစိတ်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသော နေရာများတွင် မြှုပ်နှံမှုပြုခြင်းသည် မိသားစု နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘ၀ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးအား ချိုးဖောက်ခြင်းတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်သည်၊ ဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီမှသာလျှင် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုအား ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်သော ရည်ရွယ်ချက်များ
(အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အထက်ပါ အပိုင်း D အား ကြည့်ရှုပါ)၊ ထို့ပြင် မှားယွင်းစွာ အထောက်အထားဖော်ထုတ်မှုများအား ပြင်ဆင်နိုင်ရန် နှင့် ရုပ်ကြွင်းများအား မှားယွင်းစွာ ပြန်လည်အပ်နှံမှုပြုခြင်းများ မရှိစေရန်တို့အတွက်ငှာ အောက်ဖော်ပြပါသော နည်းလမ်းများအား အသုံးပြု၍ ရုပ်ကြွင်းများအား ခြေရာခံနိုင်ရန်
(ဥပမာ - အများပြည်သူလုံခြုံရေး၊ အထိကရုန်းများအား ကာကွယ်ရေး သို့မဟုတ်
အခြားသူများ၏ အခွင့်အရေးများ နှင့် လွတ်လပ်ခွင)့် တို့ဖြင့် ကိုက်ညီမှုရှိရန်
•	ဆိုဒ်နေရာအတွင်းမှ ခန္ဓာရုပ်အလောင်းတစ်ခုစီ၏ တည်နေရာပြ မြေပုံအပါအ၀င်
လိုအပ်သည်၊ ထို့ပြင် ဒီမိုကရက်တစ် လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်း၌ ဖြစ်ရန်လည်း လိုအပ်သည်။65 နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအတွင်း၌ ဖော်ပြထားသည်မှာ ‘မိသားစုဘ၀အပေါ် လေးစားသမှုပြုသည့် လက္ခဏာတစ်ရပ်အနေနှင့် ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများ၏ အခွင့်အရေးအား အလေးအနက်ထားပြီး ပါတီအဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ သို့မဟုတ် နီးစပ်ဆွေမျိုးသားချင်းတစ်ဦးမှ ရုပအ်လောင်းအား ပြန်လည်အပ်နှေံ ပးရန် တောင်းဆိမုသှုည် နိငုင်တံကာအဆင့် နှင့် နိငုင်တံကာအဆင်မ့ဟုတ်ေသာ လက်နက်ကငို ပ်ဋိပက္ခအခြေအနေတစ်ရပ်အတွင်း သက်ရောက်မှုရှိမည် ဖြစ်သည်’ (CIHL ၊ စည်းမျဉ်း 114)။ ပျောက်ဆုံးမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သော ICRC စံနမူနာဥပဒေ၊ အပိုင်း 21(4) အတွင်း၌ ပြဌာန်းဖော်ပြထားသည်မှာ ‘[လူ့]ရုပ်ကြွင်းများ နှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာများ တို့အား မိသားစုများထံသို့ ပြန်လည်အပ်နှံရပေမည်’။
ဆိုဒ်နေရာနှင့်ပတ်သက်သော စာရွက်စာတမ်းများ နှင့် မြေပုံ၊ •	DNA နမူနာ အရေအတွက် နှင့် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုဆိုင်ရာ ကိုးကားချက်များနှင့်အတူ ခန္ဓာရုပ်အလောင်းတစ်ခုစီ နှင့် အိတ်/အခေါင်းတို့အား နံပါတ်ရေးမှတ်၊ တံဆိပ်တပ်မှုပြုခြင်း၊ •	ဆိုဒ်နေရာအား အမှတ်အသားပြုရန် ဆိုင်းဘုတ်များ အသုံးပြုမှု၊ နှင့် •	လုံခြုံရေးအား သေချာစေရန်အတွက်ငှာ အချက်အလက်များအား လုံခြုံစွာ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု။ မီးသင်္ဂြိုလ်ခြင်းအား ရှောင်ရှားသင့်ပေသည်။ ဆက်စပ်ရာ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ နှင့် သက်သေအထောက်အထား ပိုင်ရှင်လာရောက်တောင်းဆိုခြင်းမရှိသည့် တစ်ကိုယ်ရေ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ နှင့် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်ခြင်းမရှိသည့် သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်မရှိသည့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများတို့အား ကိုင်တွယ်စီမံရန် ယဉ်ကျေးမှုအရ သင့်တင့်သော နည်းလမ်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောတူညီချက်နှင့်အညီ ဖြစ်သင့်ပေသည်။66 ဤတွင် အမှတ်တရ အထိမ်းအမှတ်နေရာများ ပြုလုပ်မှု၊
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၊ အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု၊ နှင့် တရားမျှတရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတို့အား ပြီးမြောက်ဆောင်ရွက်ပြီးသည့်အခါတွင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ကြွင်းများ၊
အလွဲအမှားမခံသော ဖွင့်လှစ်ပြသမှုများ၊ မြှုပ်နှံမှုများ၊ သတ်မှတ်ရည်ရွယ်ထားသော မြှုပ်နှံမှုဧရိယာများ သို့မဟုတ် အရိုးအိုးများတို့ ပါဝင်ကောင်း ပါဝင်နိုင်ပေသည်။
ဆက်စပ် ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများ နှင့် ကိုယ်ပိုင်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများတို့အား မိသားစုဝင်များထံသို့ ပြန်လည်အပ်နှံသင့်ပြီး၊ သေဆုံးသူအား ၎င်းတို့၏ ယုံကြည်ချက်များနှင့်အညီ မြှုပ်နှံခွင့် ပေးရပေမည်။
Pueblo Bello Massacre Colombia ၊ ကောင်းကျိုးအပေါ် စီရင်မှု၊ စစ်လျော်ကြေးများ နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အမေရီကန်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တရားရုံး အတွဲဆက်များ C နံပါတ် 140 (ဇန်န၀ါရီ 31 ၊ 2006) အပိုဒ် 273။
Sabanchiyeva နှင့် အခြားသူများ အပြိုင် Russia ၊ စီရင်မှု၊ ECtHR လျှောက်လွှာ နံပါတ် 38450/05 (ဇွန်လ6၊ 2013) အပိုဒ် 117-134။
အင်တာပို၏ ကပ်ဘေးသားကောင် အထောက်အထား ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု လမ်းညွှန်၊ နောက်ဆက် 17 - DVI အတွက် သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ မနုဿဗေဒပညာရှင်၏ အခန်းကဏ္ဍများ နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများတို့၌ ‘သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ မနုဿဗေဒ အဆုံးသတ် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှု နှင့် အကယ်၍ ရုပ်ကြွင်းများသည် အပိုင်းလိုက်ဖြစ်နေသော ထို့ပြင်/သို့မဟုတ် ထိခိုက်ပျက်စီးနေသော အခြေအနေများတွင်မူ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်ရှိသည့် ရုပ်ကြွင်းများအား စစ်ဆေးမှုကို အကြံပြုထားသည်။ ရုပ်ကြွင်းများအား ဆွေမျိုးဆက်ခံသူထံ ထုတ်ပေးခြင်း မပြုမီတွင် အဆုံးသတ် မနုဿဗေဒဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခြင်းသည် နစ်နာသူသားကောင်များ၏ မိသားစုများထံမှ ယုံကြည်မှုကို ပိုမိုမြင့်မားစွာ ရရှိစေနိုင်ပြီး၊ အရည်အသွေး အတည်ပြု သေချာစေမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှုများတို့အတွက်ပါ ပေါင်းဖြည့်ပေးသည်’ (စာမျက်နှာ3တွင)် ။
F. တရားမျှတရေး Mapiripán Massacre အမှုအတွင်း တွေ့ ရှိရသော ဖွင့်ဟချက်မှာ နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များ
‘စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နှင့် တရားစီရင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအတောအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှု၏ နစ်နာခံစားရသူ သားကောင်များ၊
a. အချက်အလက်များ ထောက်ပံ့မှု -
သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ဆွေမျိုးဆက်ခံသူများတို့သည် အဆိုပါတာဝန်ရှိသူများထံ
အမှန်တရားအား သိရှိပိုင်ခွင့်သည် လူ့အခွင့်အရေးများနှင့်သက်ဆိုင်သော
အချက်အလက်များ ရှင်းလင်းပြောပြမှု နှင့် ပြစ်ဒဏ်ပေးမှု၊ ထို့ပြင် မျှတသော
ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ် I ၏ အပိုဒ် 32
နစ်နာမှုလျော်ကြေး ရယူမှု အစရှိသည့် နှစ်မျိုးနှစ်ရပ်စလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော
နှင့် 33 (CED ကြိုတင်ကြေငြာချက် နှင့် အပိုင်း 24(2)) ၊ ဥပဒေအတတ်67
ကြားနာမှုအတွင်း ပါဝင်နိုင်ခွင့် ရှိရမည်ဖြစ်သည်’။71
နှင့် ညက်ညောသော ဥပဒေတို့တွင် အခြေပြုပေါင်းထည့်ထားသည်။
c. တားမြစ်မှု နှင့် ပြစ်ဒဏ်ပေးမှု သို့မဟုတ် တရားခံအား
ဤရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးအရ နစ်နာသူသားကောင်များ၊ မိသားစုများ နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများတို့သည် အဆိုပါ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုများအား ကျူးလွန်မှုသို့ ဦးတည်စေခဲ့သည့် အခြေအနေများ နှင့် အကြောင်းအရင်းများတို့နှင့်အတူ အတိတ်ဖြစ်စဉ်များအကြောင်း အမှန်တရားကို သိရှိပိုင်ခွင့် ရှိရပေမည် (Orentlicher မူစည်းမျဉ်းများ၊ မူစည်းမျဉ်း 2)။ သေဆုံးမှု သို့မဟုတ် ဖိအားပေးသည့် ပျောက်ဆုံးမှုတို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အခြေအနေ၌ အမှန်တရားအား သိရှိပိုင်ခွင့်ဟု ဆိုရာတွင် မိမိတို့ ချစ်ခင်ရသူများ၏ ကံကြမ္မာ နှင့် ၎င်းတို့ မည်သည့်နေရာတွင် ရှိနေကြောင်းတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး မိသားစုသည် သိရှိပိုင်ခွင့် ရှိရပေမည်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သင်ယူလေ့လာမှု နှင့် ဗဟုသုတအသိပညာများတို့သည် ဖြစ်စဉ်များ၏ စုပေါင်း မှတ်ဥာဏ်ဖြစ်စဉ်အား ထိန်းသိမ်းရန်ငှာ နိုင်ငံ၏ ၀တ္တရားအား ဖော်ပြထားသည် (Orentlicher မူစည်းမျဉ်းများ၊ မူစည်းမျဉ်း 3)။
ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပို့ဆောင်မှု လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်း၏ သင်္ချီုင်းဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်မှုများ၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု နှင့် ဖိအားပေး ပျောက်ဆုံးစေမှုများ အစရှိသည်တို့ကို စာချုပ်သဘောတူညီချက်အားဖြင့် တားမြစ်ထားပြီး၊ နိုင်ငံပါတီအဖွဲ့များအနေနှင့် အနိုင်ကျင့်ချိုးဖောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်သည့် နေရာများတွင် ထိရောက်သော ပြစ်ဒဏ်ပေးမှုများအား ပေးအပ်နိုင်ရန်ငှာ ပြည်တွင်း ဥပဒေထုတ်ပြန်မှုများ ချမှတ်ဖို့ လိုအပ်ပေသည် (လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း အပိုင်း5၊ GC I အပိုင်း 49 ၊ GC II အပိုင်း 50 ၊ GC III အပိုင်း 129 ၊ GC IV အပိုင်း 146 ၊UNCAT အပိငုး2နှင့်4၊ CED အပိငုး6၊ နှင့် လူမျိုးတံုး သတ်ဖြတ်မနှုငှပ့် တ်သက်သည့် ICCPR အပိငုး6တိအ့ုား ကြည်ရ့ပှုါ)။ လူမဘှုဝချို့တဲမ့မျှုားရှသိည်နငှအ့် ညီ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုရန် တာဝန်အတွင်း၌ ‘အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု၊ နှင့် အကယ်၍
b. ပြန်လည်ကုစားဖြေရှင်းမှုများ -
သင့်တင့်လျှင် အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူများအား ပြစ်ဒဏ်ပေးမှု’တို့ ပါဝင်ပေသည်။72
နစ်နာသူသားကောင်များ နှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများအတွက် 2005 အခြေခံ
CED-လမ်းညွှန် မူစည်းမျဉ်းများ၌ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်မှာ
မူစည်းမျဉ်းများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ၊ နှင့် CED (အပိုင်း 24(4) နှင့် 24(5)) တို့မှတစ်ဆင့် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေသည် အသုံးဝင်နိုင်သော ပြန်လည်ကုစားဖြေရှင်းမှု များတို့ကို ထောက်ပံ့ပေးထားသည် •	လျော်ကြေးပေးလျော်မှု၊ •	ပိုင်ရှင်ထံပြန်လည်အပ်နှံမှု၊
‘ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ ရှာဖွေမှု နှင့် ၎င်းပျောက်ဆုံးမှုအတွက် တာဝန်ရှိသူများအား ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတို့သည် အပြန်အလှန် အားပေးသက်ရောက်မှုရှိသင့်ပေသည်’ (မူစည်းမျဉ်း 13(1))။ ဂျနီဗာ ကွန်ဗင်းရှင်းအရ နိုင်ငံပါတီများသည် တရားစီရင်မှုအား ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်ငှာ စွဲဆိုထားခြင်းခံရသည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား တက်ကြွစွာ ရှာဖွေမှုပြုရန် လိုအပ်သည် (GC I အပိုင်း 49 ၊ GC II အပိုင်း
50 ၊ GC III အပိုင်း 129 ၊ GC IV အပိုင်း 146)။
•	စိတ်ကျေနပ်စေမှု (အချက်အလက်များ အတည်ပြုမှု၊ နှင့်/သို့မဟုတ် ရှာဖွေရေး၊
d. ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် -
ဖော်ထုတ်ရေး၊ အထောက်အထားရှာဖွေရေး နှင့် မြှုပ်နှံမှု အစရှိသည်တို့ ပါဝင်သည်)၊ နှင့် •	နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပေါ်ခြင်း မရှိစေရန် အာမခံချက်များ (ဥပမာအားဖြင့် ပြဌာန်းချက်ကုဒ်ဥပဒေများ၊ ပညာပေးမှု နှင့် ထရိန်နင်သင်တန်းပေးမှု အစရှိသည်တို့မှတစ်ဆင်)့ ။68
နစ်နာသူသားကောင်များ၏ ပြန်လည်ကုစားဖြေရှင်းမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများနှင့်တစ်ညီတည်း ပြည်တွင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ တရားမျှတမှုကို မျှော်မှန်းထားပြီး၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေး ရှုထောင့်များအား တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ရန် တိုင်းတာစီမံဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ထားသည်နှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု မှန်သမျှ၏ ရလဒ်များအား အပြည့်အ၀ ထုတ်ပြန်ကြေငြာမှုပြုသင့်ပေသည်။73
ပြန်လည်ကုစားဖြေရှင်းမှုပြုရာတွင69်နစ်နာသူသားကောင်များထံ၌ အောက်ဖော်ပြပါ ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများ ရှိပေသည် •	တရားမျှတမှုအတွက် တန်းတူညီမျှမှုရှိ၍ ထိရောက်သော ၀င်ရောက်ရယူနိုင်မှု ရပိုင်ခွင့်၊ •	ဆွေမျိုးဆက်ခံသူအတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသစောင့်ရှောက်မှု အပါအ၀င်
အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာအား ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် ကျယ်ပြန့်စွာ လူ့အခွင့်အရေး တလွဲသုံးစားအနိုင်ကျင့်မှုများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဥပဒေအား ချိုးဖောက်မှုပြုသည့် ကျယ်ပြန့်သော အတိုင်းအတာအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ကောင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ခံစားရသော ထိခိုက်နာကျင်မှုများအတွက်ငှာ လုံလောက်၍ ထိရောက်မှုရှိပြီး၊
အဆိုပါသောအခြေအနေများတွင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီ၊ ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံများ
ချက်ချင်းရယူနိုင်သည့် ပြင်ဆင်ကုစားချက်များ ရပိုင်ခွင70့် ၊ နှင့်
နှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများတို့၏ တရားမျှတမှုအား လိုလားတောင့်တမှုသည်
•	ချိုးဖောက်မှုများ နှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ကုစားမှုများဆိုင်ရာ ယန္တရားများနှင့်ပတ်သက်သော သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ရယူပိုင်ခွင့်။
ထောက်ခံမှု နှင့် အငြင်းပွားမှု နှစ်ရပ်စလုံးကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပေသည်။ ဤတွင် စုပေါင်း ဖြေရှင်းမှု နှင့် ကုစားမှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ ယုံကြည်မှု နှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်များမှု အစရှိသည်တို့အား လိုအပ်မှု နှင့်/သို့မဟုတ် ၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော အခွင့်အရေးများတို့ ပါဝင်နိုင်ပေသည်။
အစောပိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုအတွက် Velásquez Rodríguez အပြိုင် Honduras ၊ ကောင်းကျိုးအပေါ် စီရင်မှု၊ အမေရီကန်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တရားရုံး အတွဲဆက်များ C နံပါတ်4(ဇူလိုင် 29 ၊ 1988) အပိုဒ် 177 အား ကြည့်ရှုပါ။ အမှန်တရားအား ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးအရ လူ့အခွင့်အရေးအား တလွဲအသုံးပြုအနိုင်ကျင့်မှုများနှင့်အတူ ၎င်းအနိုင်ကျင့်မှုများသို့ ဦးတည်သွားစေသည့် လူမှုနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းတရာများတို့အား အာဏာပိုင်များမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုရန် လိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၌ နစ်နာသူသားကောင်များ ပါဝင်မှု အစိတ်အပိုင်းကို ဖော်ပြထားပြီး၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် သက်ဆိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်များအား အကျိုးရရှိစေရန်ငှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ရလဒ်များအား ထုတ်ပြန်ကြေငြာမှုပြုဖို့ ပြဌာန်းထားသည်။
UNGA ၊ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးဥပဒေ နှင့် ပြင်းထန်သော နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဥပဒေတို့အား ချိုးဖောက်မှုများတို့၏ သားကောင်များအတွက် ပြန်လည်ကုစားဖြေရှင်းမှုဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေး နှင့် အမှားပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတို့နှင့်ပတ်သက်သော အခြေခံ မူစည်းမျဉ်းများ နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ၊ မူစည်းမျဉ်း 19-23။
အခြေခံ မူစည်းမျဉ်းများ၊ မူစည်းမျဉ်း 11။
Pueblo Bello Massacre အပြိုင် Colombia ၊ ကောင်းကျိုးအပေါ် စီရင်မှု၊ စစ်လျော်ကြေးများ နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အမေရီကန်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တရားရုံး အတွဲဆက်များ C နံပါတ် 140 (ဇန်န၀ါရီ 31 ၊ 2006) အပိုဒ် 274။
Mapiripán Massacre အပြိုင် Colombia ၊ ကောင်းကျိုးအပေါ် စီရင်မှု၊ စစ်လျော်ကြေးများ နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အမေရီကန်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တရားရုံး အတွဲဆက်များ C နံပါတ် 134 (စက်တင်ဘာ 15 ၊ 2005) အပိုဒ် 219။
Kukhalashvili နှင့် အခြားသူများ အပြိုင် Georgia ၊ စီရင်ချက်၊ ECtHR လျှောက်လွှာ နံပါတ် 8938/07 နှင့် 41891/07 (မေလ2၊ 2020) အပိုဒ် 129။ အမှု၏ အချက်အလက်များအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် နိုင်ငံ၏ တာဝန်ဝတ္တရား၊ နှင့် သက်ဆိုင်ပါက အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူများအား စီရင်၊ ပိတ်ပင်ခွင့်ပြုရန်တို့နှင့် ပတ်သက်သော Pueblo Bello Massacre အပြိုင် Colombia ၊ ကောင်းကျိုးအပေါ် စီရင်မှု၊ စစ်လျော်ကြေးများ နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အမေရီကန်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တရားရုံး အတွဲဆက်များ C နံပါတ် 140 (ဇန်န၀ါရီ 31 ၊ 2006) အပိုဒ် 265-269 အားလည်း ကြည့်ရှုပါ။
‘Las Dos Erres’ Massacre အပြိုင် Guatemala ၊ ကောင်းကျိုးအပေါ် စီရင်မှု၊ စစ်လျော်ကြေးများ နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ IACtHR အတွဲဆက်များ C နံပါတ် 211 (နိုဝင်ဘာ 24 ၊ 2009) အပိုဒ် 256-264 ၊ နှင့် El-Masri အပြိုင် ယခင် Yugloslav Republic of Macedonia ၊ Grand Chamber တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်မှု၊ ECtHR လျှောက်လွှာ နံပါတ် 39630/09 (ဒီဇင်ဘာ 13 ၊ 2012) ၊ အပိုဒ် 192 နှင့် တရားသူကြီး Tulkens ၊ Spielmann ၊ Sicilianos နှင့် Keller တို့၏ တစ်ချိန်တည်း ပူးပေါင်း ထင်မြင်ချက်။
(1) သတင်းအချက်အလက်များ ထောက်ပံ့မှု - စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု လုပ်ငန်စဉ်များမှတစ်ဆင့်
အများပြည်သူလူထုထံသို့ အစီရင်ခံအသိပေးသင့်ပေသည်၊ သို့သော်
ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာများကို သိရှိခြင်းသည် တရားမျှတရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်အား
ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေသော သို့မဟုတ် အနာဂါတ်
လက်တွေ့သိမြင်နားလည်မှုအတွက် အခြေခံအကြောင်းအရင်း တစ်ရပ် ဖြစ်ပေသည်။ ၎င်းတို့
ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စီရင်မှုများတို့ကို ဘက်လိုက်မှုရှိစေနိုင်သည့် သို့မဟုတ်
ဖော်ထုတ်တွေ့ ရှိသော အချက်အလက်များမှတစ်ဆင့် အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ
အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည့် အခြေအနေများမှလွဲ၍ ဖြစ်သည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ နှင့် တူးဖော်မှုများတို့သည် အမှန်တရား နှင့် အဆင့်အသီးသီးရှိ တရားမျှတရေး ပန်းတိုင် ရည်မှန်းချက်များတို့ကို အောင်မြင်ရယူနိုင်စေမည် ဖြစ်သည်။
G. အမှတ်တရ အထိမ်းအမှတ် ပြုလုပ်မှု
အထူးသဖြင့် အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ၏ ရလဒ်များ နှင့် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများတို့သည် အောက်ပါတို့အား ထောက်ပံ့ရန် အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါသည် -
•	လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တလွဲသုံးစားအနိုင်ကျင့်မှုများသို့ ဦးတည်သွားသော
မိသားစုဝင်များအား မြေမြှုပ်နှံနိုင်ခွင့်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ
ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ၊ •	ပညာရေး နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များတို့ အပါအ၀င် မိသားစု၏ စီးပွားရေးအခြေအနေအား အကာအကွယ်ပေးအပ်ရန်ငှာ လူခန္ဓာရုပ်ကြွင်းများအား အသုဘ အခမ်းအနားအတွက် ပြန်လည်အပ်နှံမှု၊ နှင့် နောက်ဆက်တွဲ သေဆုံးကြောင်း အထောက်အထားလက်မှတ် (သို့မဟုတ် အလားတူ) အား ထုတ်ပြန်ပေးမှု၊ •	နစ်နာသူသားကောင်များနှင့်တကွ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများ၏ အထောက်အထားများ၊ နှင့်
နှင့် မိသားစုဘ၀ ကာကွယ်မှုအား အကျုံးဝင် လွှမ်းခြုံပေးသည်။75 သေဆုံးသူအား မြှုပ်နှံသည့် အပြုအမူသည် လွတ်လပ်စွာ စဉ်းစားပိုင်ခွင့်၊ အသိတရားထားရှိမှု နှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာများတို့၏လက်အောက်တွင် ကာကွယ်ထားသည့် အခြေခံကျသော အလေ့အကျင့်ရှုထောင့်တစ်ခုအား ဖွဲ့စည်းပေးသည်။76 ထို့ပြင် သေဆုံးသူအတွက် အထိမ်းအမှတ် ကျောက်တိုင်အား ပြုလုပ်ပေးခြင်းသည် ဤသို့အရာများ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိစေရန် အာမခံချက်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပေသည်။77 Orentlicher မူစည်းမျဉ်းများအရ နိုင်ငံများသည် ဖြစ်စဉ်များ၏
•	ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ၏ အထောက်အထားများ။
မှတ်ဥာဏ်စုစည်းချက်အား ထိန်းသိမ်းမှုပြုရန် လိုအပ်ပေသည် (Orentlicher
(2) ဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းများ - ဤအချက်အလက်များအရ အောက်ဖော်ပြပါတို့အတွက်ငှာ
မူစည်းမျဉ်းများ၊ မူစည်းမျဉ်း 3)။78
အခြားသော တရားမျှတရေး၊ အမှားပြန်လည်ပြင်ဆင်မှု အခွင့်အရေးများ နှင့် ဥပဒေရေးရာ
CIHL စည်းမျဉ်း 115 တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ ‘သေဆုံးသူအား
တောင်းဆိုချက်များတို့အား ပြည့်မီဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည် •	တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှု၊ လျော်ကြေးပေးမှု၊ စိတ်ကျေနပ်စေမှု နှင့်
လေးစားသမှုထားရှိသည့် အပြုအမူဖြင့် မြှုပ်နှံရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့၏ အုပ်ဂူများအား လေးစားသမှုထားရှိ၍ သင့်တင့်စွာ ထိန်းသိမ်းမှုပြုရမည် ဖြစ်သည်’။
အောက်မေ့အထိမ်းအမှတ်ပြုမှု အစရှိသည်တုိ့အပါအ၀င် အမှားပြင်ဆင်သုံးသပ်မှုအား အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်၊ •	နိုင်ငံတွင်း၊ ဒေသဆိုင်ရာ နှင့်/သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ပြဌာန်းချက်များအောက်တွင် တိုင်ကြားလျှောက်လွှာများ တင်သွင်းရန်၊ နှင့်
အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာများသည် ရှုပ်ထွေး၍ စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲများ ရှိနိုင်ကာ ထို့ပြင်/သို့မဟုတ် လူမှုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ နှင့် ပထ၀ီမြေအနေအထာဆိုင်ရာတွင် အငြင်းပွားဖွယ်အင်္ဂါရပ်များကို ဖြစ်စေနိုင်ပေသည်။
•	ပြစ်မှုစီရင်ချက်များ ပြုလုပ်ရန်။
ယခင် အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာ အဟောင်းများ နှင့် အသစ် ဖန်တီးထားသော
(3) တားမြစ်မှု နှင့် ပြစ်ဒဏ်ပေးမှု သို့မဟုတ် တရားခံအား ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပို့ဆောင်မှု
မြေမြှုပ်နှံမှု နှင့် အထိမ်းအမှတ်နေရာများ နှစ်မျိုးစလုံးသည် စုံစမ်းစစ်ဆေး၊ တူးဖော်မှုပြုချိန်၌
- တာဝန်ရှိသော ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား ရည်မှန်း၍ဆောင်ရွက်သည့် အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ နှင့် ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတို့သည်
တစ်ဦးချင်းစီအတွက် နှင့်/သို့မဟုတ် စုပေါင်း မှတ်တိုင်နေရာများ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေး နှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်များတို့ကို ဖွင့်ဟဖော်ပြခြင်းဖြစ်ကာ
အပြန်အလှန်တိုက်တွန်းအားဖြည့်မှု ရှိသင့်ပြီး၊ တရားစီရင်ရေး/တရားမျှတရေးဆိုင်ရာ
အမှားပြန်လည်ပြင်ဆင်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပေသည်။
အာဏာပိုင်များတို့ဖြင့် ရှင်းလင်းပြတ်သားသော ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများ
သို့ဖြစ်သောကြောင့်ငှာ အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာများသည် အောက်ဖော်ပြပါတို့အတွက်
ထားရှိရန် အရေးကြီးပေသည်။ တရားစီရင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ၏ အထူး တန်ဖိုးတွင် အောက်ဖော်ပြပါတို့ ပါဝင်နိုင်ပေသည် •	တာဝန်ရှိသော မျက်မြင်သက်သောများအား ပံ့ပိုးထောက်ပံ့မှု၊ •	သေဆုံးမှုများ အရေအတွက်၊ •	သေဆုံးမှု အကြောင်းအရင်း၊ ပုံစံ နှင့် နေ့စွဲ/အချိန်၊ •	နစ်နာသူသားကောင်များ၏ လိင်၊ အသက် နှင့် မျိုးနွယ်တိုင်းရင်းသား၊ •	နစ်နာသူသားကောင်များ၏ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သက်သေအထောက်အထား၊ •	အဓိကနေရာမှ ဒုတိယတစ်ခုသော မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာများသို့ ရုပ်အလောင်းများအား ပြောင်းရွှေ့ ခြင်းအားဖြင့် ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုအား ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများ၊ နှင့် •	ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများသို့ သက်သေအထောက်အထားဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုများ။74 တရားမျှတရေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နှင့် စီရင်မှုမှန်သမျှတို့အား ပြီးမြောက်လုပ်ဆောင်ရာတွင် အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နှင့် ကာကွယ်ရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအပေါ်
အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်လာနိုင်ပေသည် •	သမိုင်းဝင် အမှတ်တရအား ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ •	အတိတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံ၏ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအနေဖြင့် ပါဝင်ခြင်း၊ •	စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ-လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးထောက်ပံ့မှု စနစ်များ၊ •	အနာဂါတ် မူဝါဒများအပေါ် လွှမ်းမိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်း၊ နှင့်/သို့မဟုတ် •	တရားမျှတသော လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ အခြေခံ အနေအထားတစ်ရပ်အား ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။ တူးဖော်ထားသော အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုနေရာများသည် အမှတ်တရ အထိမ်းအမှတ်နေရာများအဖြစ် နောက်ဆက်တွဲ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုမှု နှင့် ကာကွယ်မှုများတို့ကို လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်ပေမည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသည့် အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှု နေရာများသည် အမှတ်တရ အထိမ်းအမှတ်နေရာများ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး၊ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုမှုအား ရရှိသင့်ကာ အကယ်၍ အနာဂါတ်တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အခြားဖြစ်နိုင်ခြေများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့လျှင် သက်သေအထောက်အထားများ၏ စစ်မှန်မှုအား သေချာစေရန်အတွက်ငှာ အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြစ်နိုင်သမျှ ကာကွယ်မှု ပြုသင့်ပေသည်။
ပြောင်းပြန် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ မရှိစေရန် ဆောင်ရွက်သင့်ပေသည်။ (4) တရားမျှတမှု နှင့် တာဝန်ယူမှုတို့အား ရည်မှန်း၍ လုပ်ဆောင်သော နိုင်ငံ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက်ငှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ ရလဒ်များတို့အား အနှောင်အဖွဲ့ကင်း လွတ်လပ်စွာ နှင့် အခွင့်အာဏာရှိစွာ အစီရင်ခံတင်ပြမှုပြုခြင်းသည် နစ်နာသူအနေနှင့် မည်သည့်အရာများဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်း၊ စုပေါင်းမှတ်ဥာဏ်အား သိရှိပိုင်ခွင့် နှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုများတို့ကို လက်တွေ့သိရှိစေရန်ငှာ အထောက်အကူပြုပေးသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့်ငှာ အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ၏ ရလဒ်များအား
အမှုစစ် အပြိုင် Mladic ၊ စီရင်ချက်၊ IT-09-02-T-117281 (နိုဝင်ဘာ 22 ၊ 2017) နှင့် အမှုစစ် အပြိုင် Karadžic ၊ မတ်လ 25 ၊ 2016 တွင် ထုတ်ပြန်သော စီရင်ချက်၏ လူထုထုတ်ဝေမှု ဗားရှင်း၊ IT-95-5/18-T (မတ်လ 25 ၊ 2016) အစရှိသည်တို့ ကဲ့သို့သော ICTY အတွေ့အကြုံ နှင့် အမှုများမှ ဆင်းသက်ရရှိသည်။
ဖွင့်ဟဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဥပမာအားဖြင့် Sabanchiyeva နှင့် အခြားသူများ အပြိုင် Russia ၊ စီရင်မှု၊ ECtHR လျှောက်လွှာ နံပါတ် 38450/05 (ဇွန်လ6၊ 2013) တွင် ဖြစ်သည်။
Johannische Kirche နှင့် Peters အပြိုင် Germany ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ECtHR လျှောက်လွှာ နံပါတ် 41754/98 (ဇူလိုင် 10 ၊ 2001)။
ဥပမာအားဖြင့် ‘Las Dos Erres’ Massacre အပြိုင် Guatemala ၊ ကနဦးရည်ရွယ်ချက်များ၊ ကောင်းကျိုး၊ စစ်လျော်ကြေးများ နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များတို့အတွက် စီရင်ချက်၊ IACtHR အတွဲဆက်များ C နံပါတ် 211 (နိုဝင်ဘာ 24 ၊ 2009) ၊ အပိုဒ် 265 နှင့် Pueblo Bello Massacre အပြိုင် Colombia ၊ ကောင်းကျိုးအပေါ် စီရင်မှု၊ စစ်လျော်ကြေးများ နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အမေရီကန်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တရားရုံး အတွဲဆက်များ C နံပါတ် 140 (ဇန်န၀ါရီ 31 ၊ 2006) အပိုဒ် 278။
အကယ်၍ ‘အုပ်စုလိုက် သတ်ဖြတ်မှုနေရာ တစ်ခုရှိ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဟရန်ခက်ခဲသော သင်္ကေတတစ်ခုအား ဖွင့်ဟပြသမှုသည် အချို့သော အခြေအနေများ၌ အဆိုပါ ရာဇ၀တ်မှုများ၏ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားကို ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်မှုဖြစ်စေနိုင်ပြီး၊ ၎င်းအကြောင်းအရင်းကြောင့် ကာကွယ်မှုပြုထားသော ဖွင့်ဟချက်သည်ပင်လျှင် နေရာတိုင်း၊ အချိန်တိုင်းတွင် တန်းတူညီမျှ ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း’ တရားရုံးမှ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် အခြေအနေတွင် Faber အပြိုင် Hungary ၊ စီရင်မှု၊ ECtHR လျှောက်လွှာ နံပါတ် 40721/08 (ဇူလိုင် 24 ၊ 2012) အတွင်း၌ ဖော်ပြထားသည်နှင့်အညီ အဆိုပါသော မှတ်တိုင် အထိမ်းအမှတ်များ သို့မဟုတ် အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုနေရာများတို့တွင် လွတ်လပ်စွာ ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ခွင့် အခွင့်အရေးများအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပေသည် (အပိုဒ် 58 တွင)် ။
နောက်ဆက်တွဲ 1 သက်ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ မူစည်းမျဉ်းများ၊ လက်ကိုင်စာအုပ်များ၊ ကောင်းမွန်သော အလေ့ကျင့်များဆိုင်ရာ လက်စွဲစာအုပ်များ နှင့် လုပ်နည်းကျင့်ဝတ်များ •	aaBB ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အဆင့်မြင့် သွေးသွင်းလွှဲပြောင်းမှု နှင့် ဆဲလ် ကုထုံးများ (2010) ၊ အုပ်စုလိုက် သေဆုံးမှုဆိုင်ရာ DNA အထောက်အထား စီမံဆောင်ရွက်မှုများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ www.aabb.org/programs/disasterresponse/Documents/ aabbdnamassfatalityguidelines.pdf •	ဥရောပကောင်စီ (2011) ၊ အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု နှင့် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု တာကွယ်တားဆီး၊ တိုက်ဖျက်ရေး ကွန်ဗင်းရှင်း၊ CETS 210 11.V.2011 www.coe.int/en/web/ conventions/full-list/-/conventions/treaty/210 •	Cox, M နှင့် အခြားသော (eds) (2008) ၊ အုပ်စုလိုက်
မြေမြှုပ်နှံမှုများအား သိပ္ပနည်းကျ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်များ နှင့် စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီဖြစ်သော လုပ်ငန်းစီမံလည်ပတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များသို့ (Cambridge တက္ကသိုလ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွ)ဲ •	Folke Bernadotte အကယ်ဒမီ နှင့် Swedish နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး ကောလိပ် (2011) ၊ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်းဆိုင်ရာ လက်ကိုင်စာအုပ် https://fba.se/contentassets/6f4962727ea34af 5940fa8c448f3d30f/handbook-on-assisting-internationalcriminal-investigations.pdf •	ဂျနီဗာ အကယ်ဒမီ နှင့် နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီ ကော်မတီ (ICRC) (2019) ၊ နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုများအား စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များ - ဥပဒေ၊ မူဝါဒ နှင့် အလေ့ကျင့်ကောင်းများ www.icrc.org/en/document/guidelines-investigatingviolations-ihl-law-policy-and-good-practice •	ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု (2016) ၊ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုများသို့ ပထမဆုံး တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သူများအတွက် အခြေခံ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ စံချိ်န်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်များ www.globalrightscompliance. com/en/publications/basic-investigative-standards-forinternational-crimes •	နိုင်ငံတကာ ဘားရှေ့နေ အစည်းအရုံး - လူ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း (2009) နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးများ အချက်အလက်ရှာဖွေရေး လည်ပတ်မှုများ နှင့် အစီရင်ခံတိုင်ကြားမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များ (“Lund-London လမ်းညွှန်ချက်များ”) www.ibanet.org/Fact_Finding_Guidelines.aspx •	ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ (ICMP) (2018) ၊ ပထမဆုံး တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သူများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ - သိရှိထားသော သို့မဟုတ် သံသယရှိသော မြေမြှုပ်နှံရာနေရာ သို့မဟုတ် ရုပ်အလောင်း စွန့်ပစ်ရာ တည်နေရာများတို့အား ကာကွယ်ခြင်း၊ ICMP.ST.AA.857.1 www.icmp.int/wp-content/uploads/2018/10/icmp-st-aa-8571-doc-guidelines-for-first-response-at-grave-or-body-disposallocations.pdf
•	နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီ ကော်မတီ (ICRC) (2009) ၊ လမ်းညွှန် မူစည်း မျဉ်းများ/ပျောက်ဆုံးမှုများအတွက် စံနမူနာ ဥပဒေ www.icrc.org/en/ document/guiding-principles-model-law-missing-model-law •	ICRC (2016) ၊ ကပ်ဘေးများအပြီးနောက် ရုပ်အလောင်းများအား စီမံခန့်ခွဲမှု - ပထမဆုံးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သူများအတွက် လက်တွေ့ကွင်းဆင်း လက်ကိုင်စာအုပ် www.icrc.org/en/ publication/0880-management-dead-bodies-after-disastersfield-manual-first-responders •	ICRC (2020) ၊ ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ၏ မိသားစုများအား အဖော်ပြုပေးခြင်း - လက်တွေ့ကျသော လက်ကိုင်စာအုပ် https://shop.icrc.org/accompanying-the-families-of-missingpersons-a-practical-handbook-pdf-en •	နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုတရားရုံး (2008)၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများအတွက် လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်ကုဒ်၊ ICC/AI/2008/005 www.icc-cpi.int/resource-library/Vademecum/ Code%20of%20Conduct%20for%20Investigators.PDF •	အင်တာပို၊ (2018) ကပ်ဘေးသားကောင်များအား အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု www.interpol.int/en/ How-we-work/Forensics/Disaster-Victim-Identification-DVI •	ပါလီမန်တွင်း သမ္မဂ နှင့် ICRC (2009) ၊ ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ – ပါလီမန်ဝင်များအတွက် လက်ကိုင်စာအုပ် www.icrc.org/en/doc/ assets/files/other/icrc_002_1117.pdf •	လူထု နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ နှင့် မူဝါဒ အုပ်စု (PILPG) (2015) ၊ အစုလိုက် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးလူမှုအဖွဲ့အစည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နှင့် စာရွက်စာတမ်းပြုမှုတို့အတွက် လက်တွေ့ကွင်းဆင်း လမ်းညွှန်ချက် www.publicinternationallawandpolicygroup.org/toolkits-andhandbooks •	ဖိအားပေး ပျောက်ဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ကုလသမ္မဂ ကော်မတီ၊ ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ ရှာဖွေမှုအတွက် လမ်းညွှန်ခြင်း (မေလ 8 ၊ 2019) UN စာရွက်စာတမ်း CED/C/7 www.ohchr.org/_layouts/15/ WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/HRBodies/CED/ CED_C_7_E_FINAL.docx&amp;action=default&amp;DefaultItemOpen=1 •	လူ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် ကော်မရှင်နာ၏ ကုလသမ္မဂရုံးခန်း (2004), Istanbul လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု နှင့် အခြားသော ရက်စက်မှု၊ လူသားမဆန်မှု သို့မဟုတ် နိမ့်ကျသော ဆက်ဆံမှု သို့မဟုတ် ပြစ်ဒဏ်ပေးမှု အစရှိသည်တို့အား ထိရောက်စွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နှင့် စာရွက်စာတမ်းပြုလုပ်မှုတို့အတွက် လက်စွဲလမ်းညွှန် www.ohchr.org/documents/publications/training8rev1en.pdf •	လူ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် ကော်မရှင်နာ၏ ကုလသမ္မဂရုံးခန်း (2016) ၊ တရားမ၀င် သေဆုံးမှုဟု ယူဆရသည်အား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် Minnesota လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ် www.ohchr.org/Documents/Publications/ MinnesotaProtocol.pdf •	လူ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် ကော်မရှင်နာ၏ ကုလသမ္မဂရုံးခန်း (2001) ၊ လူ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအတွက် ထရိန်နင်သင်တန်းပေးမှု လက်ကိုင်စာအုပ် www.ohchr.org/Documents/Publications/ training7Introen.pdf
•	ICMP (2019) ၊ ICMP ပဲရစ် မူစည်းမျဉ်းများ၊ မှတ်ချက်ပြုသော ဗားရှင်း၊ ICMP.DG.468.1.W.doc www.icmp.int/wp-content/ uploads/2019/04/icmp-dg-1468-1-W-doc-paris-principlesannotated.pdf
နောက်ဆက်တွဲ2သက်ဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နှင့် သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်အကဲဖြတ်မှုတို့တွင် အောက်ဖော်ပြပါ ဇာတ်ကောင်များ သို့မဟုတ် အထူးကျွမ်းကျင်သူများတို့ ပါဝင်ကောင်း ပါဝင်ပေမည် အစုလိုက်သော အထွေထွေဝန်ဆောင်ထောက်ပံ့မှု၏ မန်နေဂျာ သည် အလုံးစုံခြုံကြည့်လျှင် စီရင်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များနှင့် စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီဖြစ်သော လုပ်ငန်းစီမံလည်ပတ်မှုများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတာဝန်၊ ဆိုဒ်နေရာ ကျန်းမာရေး၊ လုံခြုံရေး နှင့် ဖူလုံပြည့်စုံရေး အစရှိသည်တို့အား ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစီရင်ခံတိုင်ကြားမှုပုံစံများ နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု နည်းဗျူဟာများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နှင့် လူ့ရုပ်ကြွင်းများ အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု နှင့် ပြန်လည်အပ်နှံမှု လုပ်ငန်းစဉ်အား ဆက်စပ်စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း အစရှိသည်တို့ အပါအ၀င် အကန့်အသတ်မရှိသော အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် တာဝန်ရှိသည်ဟု ယူဆရပေမည်။ မှုခင်းနေရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ နှင့်/သို့မဟုတ် ဆိုဒ်နေရာ စီနီယာ တာဝန်ခံအရာရှိများ တို့သည် ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွဲအား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိစဉ် တစ်ဖက်တွင်လည်း နောက်ဆက်တွဲ လေ့လာသုံးသပ်မှုများအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်သေအထောက်အထားများ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်း
မှတ်ချက်များ ပြုလုပ်ပေးကာ ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ဆောင်ရွက်မှုများ/ ကိရိယာများ/လက်နက်များတို့ကို နှိုင်းယှဉ်မှုပြုလုပ်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ ပိုးမွှားဗေဒ သည် အများအားဖြင့် သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ ရောဂါဖော်ထုတ်လေ့လာမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်ငှာ သေဆုံးပြီးချိန်မှစ၍ အနည်းဆုံး ကြာမြင့်ချိန်အား ညွှန်ပြချက်တစ်ရပ်အနေဖြင့် သေမှုသေခင်း စစ်ဆေးမှု အပြင်အဆင်အတွင်းမှ အင်းဆက်ပိုးမွှားများအား လေ့လာမှုတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ သွားနှင့်မေးရိုးလေ့လာမှုဗေဒ သည် အထူးသဖြင့် သေဆုံးမှုအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရာ၌ လူ့ရုပ်ကြွင်းများ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ထုတ်ရန် လိုအပ်သည့်အခါတွင် ဥပဒေနှင့်ဆက်နွယ်သော သွားဘက်ဆိုင်ရာ လေ့လာမှုတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ ဆေးပညာ သည် ဥပဒေနှင့် တရားရုံးများတို့တွင် သက်ရောက်အသုံးချရန် လိုအပ်သည့် ဆေးပညာ အလေ့အကျင့် မူစည်းမျဉ်းများကို ရည်ညွှန်းသည်။ သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ ရောဂါဗေဒပညာရှင် သို့မဟုတ် သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ ဆရာဝန် သည် သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ ရင်ခွဲစစ်ဆေးမှုများအား ဆောင်ရွက်ရန်ငှာ ခွင့်ပြုချက်ရရှိသော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အထူးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်
ပြုလုပ်ခြင်း၊ စုဆောင်းရယူခြင်း နှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့တွင်
သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ အဆိပ်ဗေဒ သည် ဥပဒေများ နှင့်
ဒီဂျစ်တယ်ဒေတာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမျှာားမူ မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊
တရားရုံးများတို့တွင် သက်ရောက်အသုံးချရန်လိုအပ်သည့် ဆေးဝါးများ
မမ်မိုရီစတစ်များ၊ ကွန်ပျူတာများ သို့မဟုတ် လူမှုမီဒီယာများတို့မှ
နှင့် အဆိပ်များတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုတစ်ရပ်
သက်သေအထောက်အထား နှင့် ဒေတာအချက်အလက်များတို့အား
စစ်ဆေး၊ ရယူရန် ဖြစ်သည်။
လူသား အထောက်အထားဖော်ထုတ်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ
သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ မနုဿဗေဒ သည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း
ဟုဆိုရာတွင် မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပညာရှင်များ၊ လက်ဗွေရာ
အထောက်အထားများတို့အပါအ၀င် ဆေးပညာ-ဥပဒေဆိုင်ရာ မေးခွန်းများအား ဖြေကြားရန်အတွက်ငှာ (ပုပ်ဆွေးနေသည်များ၊
အထူးကျွမ်းကျင်သူများ၊ မော်လီကျူးဆိုင်ရာ ဇီဝဗေဒပညာရှင်များ/ သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ DNA အထူးကျွမ်းကျင်သူများ သို့မဟုတ်
အရိုးစုဖြစ်နေသည်များ၊ အစိတ်ပိုင်းလိုက်ဖြစ်နေသည်များ သို့မဟုတ်
သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ သွားဆရာဝန်များတို့ ပါဝင်သည်။
လောင်ကျွမ်းနေသည်များတို့ အပါအ၀င်) လူ့ရုပ်ကြွင်းအား
(အရင် အရင်းအမြစ် - Minnesota လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်များ၊ စာမျက်နှာ 30 နှင့် 53 မှ
ပြန်လည်ဖော်ထုတ်၍ စစ်ဆေးမှုပြုခြင်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည်။
သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ ရှေးဟောင်းသုတေသန သည် မှုခင်းနေရာအား
ဤလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုများ နှင့်/သို့မဟုတ် လက်တွေ့အသုံးချပညာ
မှတ်တမ်းပြု၊ တူးဖော်၊ ရှာဖွေဖော်ထုတ်၊ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်၍
ရှင်များ တစ်ဦးချင်းစီအား သက်ဆိုင်ရာ သင့်တင့်သော
လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်ကုဒ်(များ) အားဖြင့် အစိုးရအုပ်ချုပ်မည် ဖြစ်သည်။
ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ရှေးဟောင်း ရုပ်ကြွင်းကျန်များ
၎င်းတို့၏ ရာထူးအဆင့်များသည် အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
နှင့် အရာဝတ္ထုများတို့ကို လေ့လာရာတွင် အသုံးပြုသော နည်းဥပဒေသများကို အသုံးချခြင်း ဖြစ်သည်။ သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ လက်နက်ပစ်လွှတ်မှုနည်းပဒေသ/ လက်နက်ခဲယမ်းများ နှင့် ကိရိယာများတွင် အထူးကျွမ်းကျင်သူများ တို့သည် တွေ့ ရှိရမှုမှ ကျန်ရစ်နေသည့် အမှတ်အသားများကို စစ်ဆေးပြီး၊ သေနတ်ဒဏ်ရာများနှင့် ဖော်ထုတ်တွေ့ ရှိရသည့်
နောက်ဆက်တွဲ3- ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု၊ အစီရင်ခံတိုင်ကြားခြင်း နှင့် ကာကွယ်မှု* အတည်ပြုမှု နှင့် အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှု
အောက်ပါတို့မှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကာကွယ်မှု တည်နေရာ တိရစ္ဆာန်များ၏ အနှောက်အယှက်ပေးမှု
ရာသီဥတု နှင့် မိုးလေ၀သအခြေအနေ
အောက်ပါတို့အား အသုံးပြု၍ ကာကွယ်မှုပြုခြင်း -
အတားအဆီးအကာများ *	ဤနောက်ဆက်တွဲမှ လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေး နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများတုိ့၏ ပေါင်းစပ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပေသည်။
နောက်ဆက်တွဲ4- စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်* အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း အဆင့် -
ပျောက်ဆုံးနေသူ ရှာဖွေရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု တာဝန်တစ်ရပ်လုံးအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းထံ၌ တာဝန်ရှိသနည်း။ အုပ်စုလိုက် မြေမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအား မည်သူမှ စီစဉ်သင့်သနည်း။
သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဆင့် -
စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီဖြစ်သည် လုပ်ငန်းစီမံလည်ပတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအား အသုံးပြုမှု
သက်သေအထောက်အထားများအား ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ •	ရယူမှု •	ပို့ဆောင်မှု
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု နယ်ပယ်အကျယ်အ၀န်းမှာ မည်သို့နည်း။
•	သက်သေအထောက်အထား စာရင်း •	မှတ်တမ်းပြုခြင်း
နောက်ထပ် မည်သည့် အာဏာပိုင်များ ပါဝင်ပတ်သက်၍ လိုအပ်သနည်း။
မှတ်တမ်းပြုခြင်း နှင့် ထိန်းသိမ်းမှု စနစ်
•	ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းတွဲ •	ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု
ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု နည်းဗျူဟာဖြင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှု နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့
အခြား မည်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ ရှိသနည်း။
ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်း ၀င်ရောက်မှု နှင့် သက်ရောက်မှု
နယ်ပယ်အကျယ်အ၀န်း၊ စကေးအတိုင်းအတာ နှင့် နောက်ဆက်တွဲများ
အရင်းအမြစ်များ၊ အဖွဲ့ နှင့် ရယူမှု
အန္တရာယ်ကင်းရေး နှင့် လုံခြုံရေး
စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီဖြစ်သည် လုပ်ငန်းစီမံလည်ပတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအား မွေးစားကျင့်သုံးမှု
တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသည့် အချက်များ နှင့် အကြောင်းအရာများ
စီစဉ်နေရာချမှု၊ ဒေတာအချက်အလက် သိုလှောင်မှု၊ ထိန်းသိမ်းမှု နှင့် ကာကွယ်မှု
လူ့ရုပ်ကြွင်းများ ပြန်လည်အပ်နှံမှု နှင့်/သို့မဟုတ် တူးဖော်ပြီးနောက်ပိုင်း သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု
အဖွဲ့ နှင့် အာဏာပိုင်များအကြားမှ ပြင်ပပိုင်း
အဖွဲ့ ၊ မိသားစုများ၊ ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်း နှင့် မီဒီယာများတို့အကြားမှ ပြင်ပပိုင်း
*	ဤနောက်ဆက်တွဲမှ လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အုပ်စုလိုက်မြေမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေး နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများတုိ့၏ ပေါင်းစပ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပေသည်။
နောက်ဆက်တွဲ5- အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ*ျား
+ ဒေတာအချက်အလက်များ စုဆောင်းမှု နှင့် မိသားစုများထံမှ DNA နမူနာများ •	အတိမ်းအစောင်း အလွဲအမှားမခံသော
•	ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ထိန်းမှု ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများအား လေးစားသမှုပြုခြင်း
DNA လုပ်ငန်းစဉ် ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း
•	ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များအား စာရင်းသွင်းမှတ်တမ်းပြုလုပ်မှု
•	ဓာတ်ခွဲခန်း လုပ်ငန်းစဉ်များ
•	မိသားစုထံမှ အချက်အလက်များ နှင့် DNA နမူနာများ
•	DNA ပရိုဖိုင်း ဒေတာဘေ့စ် •	DNA တိုက်စစ်ခြင်း
•	ဆိုဒ်နေရာ တူးဖော်မှု နှင့် သက်သေအထောက်အထား •	ရင်ခွဲရုံ ရှာဖွေတွေ့ ရှိချက်များ
ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် အလှမ်းမီအသိပေးမှု ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု နည်းဗျူဟာ -
အောက်ဖော်ပြပါတို့နှင့် အောက်ဖော်ပြပါတို့အား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု - ဆက်သွယ်အသိပေးမှု -
•	မသေချာမရေရာခြင်း များမရှိသော
•	အာဏာပိုင်များ •	မီဒီယာ
•	DNA ဓာတ်ခွဲခန်း၊ ပရိုဖိုင်း နှင့် တိုက်စစ်ဆေးခြင်း
•	အထောက်အထား ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ •	ရလဒ်များ •	တိုးတက်မှု အခြေအနေ
•	ပုဂ္ဂိုလ်ရေး စောင့်ထိန်းမှု နှင့် ဒေတာအချက်အလ က်ကာကွယ်မှုတို့ နှင့်အညီလိုက်နာ ဆောင်ရွက်သော
•	အချိန်ဘောင် •	စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးထောက်ပံ့မှု
မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထား သို့မဟုတ် မရှိတော့ကြောင့် အစီရင်ခံချက် အသိအမှတ်ပြုမှုလက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးသည့် အာဏာပိုင်/ သေမှုသေခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အရာရှိ
မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု အထွက်ရလဒ်များ
မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုနှင့်
ပတ်သက်ပြီး အဆုံးသတ်ကောက်ချက်ဆွဲမှုများ မရှိသေးပေ
ရုပ်အလောင်းအား တွေ့ရှိသော်လည်း မိသားစုမှ
•	ဆက်လက်၍ ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်မှု နှင့် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု
•	ယဉ်ကျေးမှု သို့မဟုတ် ဘာသာရေးအရ သင့်တင့်သော မြှုပ်နှံမှု
•	မိသားစုထံသို့ ထုတ်ပေးမှု
•	ပံ့ပိုးထောက်ပံ့မှု ကမ်းလှမ်းပေး မှုများအကြောင်း ဆက်သွယ်အသိပေးမှု
•	လူ့ရုပ်ကြွင်းများအား ဆက်လက်ပြီး
ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု •	မရှိတော့ကြောင်း နှင့် ခြေရာခံနငို ရ်န်စမီထာံးမှု အသိအမှတ်ပြုလက်မျတ် (တံဆိပ်တွဲခြင်း၊
နောက်ဆက်တွဲ4- အမှန်တရား၊ တရားမျှတရေး နှင့် အမှတ်တရ အထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်မ*ှု သတင်းအချက်အလက် ထောက်ပံ့မှု
တစ်ဦးချင်းစီ အုပ်စုလိုက် ၀မ်းနည်းပူဆွေးခြင်း ၀မ်းနည်းပူဆွေးခြင်း
ပြန်လည်ကုစားဖြေရှင်းမှုများ •	လျော်ကြေးပေးလျော်မှု •	ပိုင်ရှင်ထံပြန်လည်အပ်နှံမှု •	ပြန်လည်နလန်ထူထောင်မှု
•	စိတ်ကျေနပ်စေမှု •	နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း မရှိစေရန် အာမခံချက်များ
စာရေးသူများ ဒေါက်တာ မယ်လနီ ခလင့်ခ်နာ (Melanie KLINKNER)
ဒေါက်တာ အယ်လီ စမစ် (Ellie SMITH)
နိုင်ငံတကာဥပဒေ ပညာရေးတာဝန်ခံအုပ်၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုများ
သုတေသီ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုများ နှင့် ဥပဒေဌာန၊ Bournemouth တက္ကသိုလ်
နှင့် ဥပဒေဌာန၊ Bournemouth တက္ကသိုလ်
နှင့် Global Security နှင့် Disaster Management Ltd ရှိ လက်ထောက်အုပ်
စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးမှုများ၌ ကျွမ်းကျင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများ အက်စ်မာ အလက်စီယာဂျစ် (Esma ALICEHAJIC)
ဒေါက်တာ အလက်စန်ဒရာ လာ ဗက်ကာရာ (Alessandra LA VACCARA)
သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင် နှင့် မနုဿဗေဒပညာရှင်၊
ပျောက်ဆုံးနေသည့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ နှင့် ဒုက္ခသည်ခိုလှုံသူများ အစီအစဉ်မှ
နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီ ကော်မတီ
အစီအစဉ် မန်နေဂျာ၊ ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ကော်မရှင်
စရီတာ လက်ရ်ှရာဖ် (Sareta ASHRAPH)
ဌာနမှူး မန်နင် (Dean MANNING)
Barrister, Garden တရားရုံးရှေ့နေရုံးခန်း; ညွှန်ကြားရေးမှူး, ကျူးလွန်သောရာဇ ၀ တ်မှုများ
ယခင် Yugoslavia ၏ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုစီရင်မှုအတွက် ယခင်
အတွက်တာဝန်ခံမှု မြှင့်တင် သောကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့၏ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရုံး
စုံစမ်းစစ်ဆေးသူဟောင်း၊ MH17 ပူးပေါင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်၊
Da’esh/ISIL; စီးရီးယား နှင့် အီရတ်တို့တွင် ကျူးလွန်သော ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုများအတွက် တာဝန်
နှင့် Canberra ပိုင်ဆိုင်မှု သိမ်းဆည်းရေး တပ်အင်အားမှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
ယူအားထုတ်မှုများဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးရာအကြံပေး စီနီယာ၊; ၀တ်လုံတော်ရရှေ့နေ၊ Blavatnik အစိုးရကျောင်း (Blavatnik School of Government) ဧည့်အသင်းဝင်, Oxford တက္ကသိုလ် (University of Oxford)
ကယ်ရိုလိုင်း ဘေကာ (Caroline BARKER) သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင် နှင့် မနုဿဗေဒပညာရှင်၊ အပိုင်းဌာနမှူး၊ သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ စီနီယာ မနုဿဗေဒပညာရှင်၊ Da’esh/ISIL မှ ကျူးလွန်သည့် ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုများအတွက် တာဝန်ယူမှုအား မြင့်တင်ရန်ငှာ ကုလသမ္မဂ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့ (UNITAD)
ဒေါက်တာ ဒန်းနစ် ဘိုင်ကီရှာ (Denis BIKESHA) ဥပဒေကျောင်းမှ ဌာနမှူး၊ Rwanda တက္ကသိုလ်
ကလော်ဒီယာ ဘစ်စို (Claudia BISSO) သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ မနုဿဗေဒပညာရှင်၊ တောင်အာဖရီးကား၏ ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ တပ်အဖွဲ့ နှင့် Argentine သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ မနုဿဗေဒအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင် (EAAF)
ဒေါက်တာ အက်ဂ်နက်စ် ကော်လာမတ်ဒ် (Agnes CALLAMARD) တရားရုံးပြင်ပ စီရင်မှု၊ လက်တန်း သို့မဟုတ် အာဏာအကြွင်းမဲ့ စီရင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကုလသမ္မဂ အထူး အစီရင်ခံတင်ပြသူ
ပီတာ မက္ကလိုစကီ (Peter MCCLOSKEY) ယခင် Yugoslavia ၏ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုစီရင်မှု၏ အမှုစစ်ရုံးခန်းမှ အမှုခင်းဆိုင်ရာ စီနီယာ အကြံပေးရှေ့နေ့ (အငြိမ်းစား)
ဆာရ် ဟောင်းဝဒ် မောရစ်စင် (Sir Howard MORRISON) နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုတရားရုံး၊ နှင့် ယခင်ကမူ ယခင် Yugoslavia ၏ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုစီရင်မှုမှ ဗြိတိသျှ ရှေ့နေ နှင့် တရားသူကြီး
ဒေါက်တာ ကလယ်ရီ မွန်း (Claire MOON) လူမှုဗေဒဆိုင်ရာဌာနမှ တွဲဖက် ပါမောက္ခ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လန်ဒန်ကျောင်း၊ နှင့် ‘လူ့အခွင့်အရေးများ၊ လူ့ရုပ်ကြွင်းများ - သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု နှင့် မြှုပ်နှံမြေဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး’ စီမံချက်မှ သုတေသနခေါင်းဆောင်
မက်ခ် မြူလ်ဒါ (Mark MUELDER) INTERPOL ၏ ကပ်ဘေးသားကောင် အထောက်အထားရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု ယူနစ်၏ စီမံဆောင်ရွက်သူ
ဂေါင်ရီ ပရာဒန် (Gauri PRADHAN) နိုင်ငံတော် လူသားအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ (NHRC) မှ ယခင်
တီနာ ဂါအန်ဇယ်လ် (Tina GAENTZLE)
ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း (အဖွဲ့ဝင်) နှင့် ပြောဆိုခွင့်ရှိသူ၊ Nepal နိုင်ငံတော်
ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာ သတင်းပေး အရာရှိ၊ ၀ရမ်းပြေး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ
ပံ့ပိုးထောက်ပံ့မှု/ပင်မ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မှုများ၊ INTERPOL
အလစ်စတယ် ဂရေဟမ် (Alistair GRAHAM) စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၊ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာ တရားရုံး
ဒေါက်တာ အိုင်ယန် ဟန်စန် (Ian HANSON) နိုင်ငံတကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက် ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင် နှင့် ကျွမ်းကျင်
စတီဖင် ရှမစ် (Stefan SCHMITT) Florida နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်၏ နိုင်ငံတော်အဆင့် သေမှုသေခင်း သိပ္ပံ နှင့် နည်းပညာစင်တာမှ နိုင်ငံတကာ သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်၏ ခေါင်းဆောင်၊ လူ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ သမားတော်များအဖွဲ့ မှ အဖွဲ့ဝင် နှင့် Guatemalan သေမှုသေခင်းဆိုင်ရာ မနုဿဗေဒ ဖောင်ဒေးရှင်း၏ တည်ထောင်သူ
မျက်မြင်သက်သေ၊ ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ကော်မရှင်အဖွဲ့၏
အလီ ဆီမိုချီ (Ali SIMOQY)
ရှေးဟောင်းသုတေသန နှင့် မနုဿဗေဒ ဌာနမှ ယခင် ဒါရိုက်တာဟောင်း၊ သေမှုသေခင်း
လွတ်လပ်သော သုတေသနပညာရှင်၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ နှင့်
သိပ္ပံဆိုင်ရာ အမေရီကန် အကယ်ဒမီ၏ အသင်းဝင်၊ Bournemouth တက္ကသိုလ်ရှိ
Da’esh/ISIL မှ ကျူးလွန်သည့် ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုများအတွက် တာဝန်ယူမှုအား မြင့်တင်ရန်ငှာ
ကုလသမ္မဂ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့ (UNITAD) မှ အဖွဲ့ဝင်
ကာရိုလင်း ဟောန်း (Carolyn HORN)
ဒေါက်တာ ဒီဘိုရာ ရူအစ်ဇ် ဗာရ်ဒူဇကို (Deborah RUIZ VERDUZCO)
တရားရုံးပြင်ပ စီရင်မှု၊ လက်တန်း သို့မဟုတ် အာဏာအကြွင်းမဲ့ စီရင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး
ယဉ်ကျေးသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ကနဦးအစပြုဆောင်ရွက်မှုများ၏ ခေါင်းဆောင်၊
အထူး အစီရင်ခံတင်ပြသူ၏ စီနီယာ အကြံပေး
ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ကော်မရှင်
အင်ဒရီယာစ် ခလိုင်စာ (Andreas KLEISER)
ရူးပက် စကေးလ်ဘက်ခ် (Rupert SKILBECK)
မူဝါဒ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဒါရိုက်တာ၊ ပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ
အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်း REDRESS မှ ဒါရိုက်တာ၊ ၀တ်လုံတော်ရရှေ့နေ နှင့်
Open Society Justice Initiative ၏ ယခင် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးတာဝန်ခံ ဒါရိုက်တာဟောင်း
အုပ်ထိန်းပဲ့ကိုင်မှုအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ ပရော်ဖက်ဆာ ရော်ဂျာ ဘရောင်းစဝေါဒ် (Professor Roger BROWNSWORD)
ပရော်ဖက်ဆာ ဒင်းရူအာ မန်းဒစ် (Professor Dinusha MENDIS)
Kings College London နှင့် Bournemouth တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေ ပရော်ဖက်ဆာ
အသိဥာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပရော်ဖက်ဆာ နှင့် Bournemouth တက္ကသိုလ်ရှိ သုတေသန
ပရော်ဖက်ဆာ လူးဝစ် မလင်းဒါ (Professor Louise MALLINDER) Queen’s University Belfast မှ ဥပဒေ ပရော်ဖက်ဆာ
နှင့် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်များအတွက် တွဲဖက်ဌာနမှူး
ဒေါက်တာ အဲန်လင်း မိုင်းကပ်စ် (Annelen MICUS) Oxford တက္ကသိုလ်ရှိ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ Bonavero အဖွဲ့အစည်းမှ အစီအစဉ် ခေါင်းဆောင်
အမည်မဖော် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုအဆင့်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ နှင့် ဤစာရွက်စာတမ်း ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော တုံ့ပြန်မှတ်ချက်များ နှင့် ပါဝင်ထည့်သွင်းမှုများတို့ကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့သူများ အစရှိသည်တို့အားလုံးကို စာရေးသူများမှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
10856 09/20 ဤစီမံကိန်းအား UK ၏ အနုပညာ နှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ သုတေသန ကောင်စီမှ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ အနုပညာ နှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ကောင်စီသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်စီအနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံ တန်ဖိုးများ နှင့် ယုံကြည်ချက်များ အစရှိသည်တို့နှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုအဖွဲ့အစည်း နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု တာဝန်ဝတ္တရားများတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ တာဝန်ယူကြောင်း အစရှိသည်တို့အား လေ့လာစစ်ဆေးမှုပြုသည်။